ချေမွလိုက် – Grab Love Story
ချစ်စုသဲသဲ အရမ်း အံ့သြသွားသည် ။ ဟေမာငွေနှင်းတို့ ခေါ်သွားတဲ့ ဒီ ကလပ်က သူထင်ထားတာထက်
ပိုသားနားနေလို့ ။ ပိုရှိုင်းနေလို့ ။ သားသားနားနား ဘဲလေးတွေလည်း တပုံကြီး လေ .. ။ချစ်စုသဲသဲ အတွက် ဒီ ဇုံ ( Zone) ဆိုတဲ့ ကလပ်အသစ် နေရာအသစ်က အထူးအဆန်းတွေ ချည်း။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို နေရာမျိုး ရှိသည်ဆိုတာ ချစ်စုသဲသဲ အခု ကိုယ်တိုင် ရောက်ဖူးမှ သိသွားသည် ။ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည် တခုကို ရောက်သွားသလို စိတ်ထဲမှာ ခံစားလိုက်ရလို့ ။
“ ချစ်စု ”
“ ဟင် ..ဘာလ.ဲ .ဟေမာ ”
“ ဟိုမှာကြည့် ..အရမ်းလန်းတယ် ..”
“ ဘယ်တယောက်လဲ ..ဟေမာ ..”
“ ဟိုမှာလေ ..စောစောက ဘရိတ်ဒန့်စ်ကတဲ့ ဟို ပိုးဟတ်ဖြူလေး နဲ့ တော်ကီပွားနေတဲ့ဘဲ …”
ဟေမာငွေနှင်း ပြတဲ့ဘဲကို ချစ်စုသဲသဲ တွေ့ပြီ ..။ အိုး ။ ဟေမာပြောတာ ဟုတ်တယ် ။ ဘကဲ အလန်းစား ။ ဝတ်တာကလဲ လန်းသည် ။ဆံပင်ပုံနဲ့ လူပုံက ဗီဒီယိုမင်းသား အောင်ရဲလင်းလို ဒီဇိုင်း ။ ဘရိတ်ဒန့်စ်ကတဲ့ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ် စလင်းလေးနဲ့ တော်ကီတွေ ပွားနေတာ မရပ်မနား ..။
ကြည့်နေတုံးဘဲ သူ့အနားကို စော်အလန်စားလေးတွေ ၀ိုင်းလာသည် ။ ဟွန်း..ကောင်မတွေကလဲ မိုက်တဲ့ ဘဲဆို အရှက်မရှိ ၀ိုင်းအုံနေကြတယ် ။ သူများတွေကို ပြောသာ ပြောရတယ် …ချစ်စုသဲသဲလဲ ဒီဘဲချောချောကို မကြာ ခဏ ကြည့်မိနေသည် ။ သူ့ကို လူတွေရှုပ်ပြီး မတွေ့တော့ရင် ချစ်စုသဲသဲ လိုက်ရှာမိနေသည် ။
ဟေမာငွေနှင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း မိမိဦး မိတ်ဆက်ပေးလို့ သူတို့ ချောင်းငမ်းနေတဲ့ အလန်းစားဘဲ နဲ့ ဘော်ဒါ ဖြစ်ကြရသည် ..။ သူ့နံမည်က ဖရန်ကီမိုးမြင့် ….တဲ့ ။ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးတယောက်ရဲ့ သား တဲ့ ။ မိမိဦးနဲ့ ဖရန်ကီက အဖေချင်းသိကြခင်ကြလို့ သူတို့အိမ်ကို မိမိဦးက ရောက်ဖူးသည် ။ မိမိဦး မိတ်ဆက်ပေးတော့ ဖရန်ကီမိုးမြင့်နဲ့ ချစ်စုသဲသဲ လက်ဆွဲနုတ်ဆက်ကြတော့ သူ့လက်နဲ့ ချစ်စုလက် ထိတွေ့တဲ့အချိန် ချစ်စုတကိုယ်လုံး ရှိန်းရှိန်း ဖိန်းဖိန်း ဖြစ်သွားသည် ။ ကြက်သီး မွေးညင်းတွေ ထသွားသည် ။ စုးရှတဲ့ သူ့မျက်လုံးတွေရဲ့ ဒါဏ်ကို ချစ်စုသဲသဲ ရင်မဆိုင်နိုင်ဘူး ။ သူ့အကြည့်တွေက စူးစူးရှရှကြီးနဲ့ …။
ချစ်စုသဲသဲရဲ့ တကိုယ်လုံးကိုသူ အဝတ်မပါဘဲ တွေ့နေရသလိုကြီး ။ ဇုံကလပ် ရဲ့ မန်နေဂျာကြီးက ဖရန်ကီမိုးမြင့် ကို ပြာပြာသလဲ ဆက်ဆံသည် ။ ဘာလိုလဲ တချိန်လုံး အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ။မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးဘဲ ဖြစ်မည် ။ တချို့ ဇုံကလပ် ထဲကို ဝင်ချင်ကြပေမဲ့ လူပြည့်နေပြီ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် ချိတ်ဆွဲထားတဲ့အပြင် တုတ်ခိုင်တဲ့ လူကြီးတယောက်က မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ အပေါက်ဝက စောင့်ပြီး ပေးမဝင်လို့ ဝင်ခွင့်မရကြဘူး ။ ဟေမာငွေနှင်းနဲ့ မိမိဦးတို့နဲ့ အတူတူလာလို့ ချစ်စုသဲသဲတို့ကို ဇုံကလပ်က မန်နေဂျာကြီး ကိုယ်တိုင်က အပြင်ကို ထွက်ကြိုခဲ့တာ ။
ဖရန်ကီမိုးမြင့်က မိမိဦးကို နောက်ပြောင်ပြီး မုမုအီး လို့ ခေါ်သည် ။
“ မုမုအီး..အိမ်လာလည်အုံးလေဟာ ..နင့်သူငယ်ချင်း ပါ ခေါ်ခဲ့..ငါ့အမ်ိမှာ ပူးဆိုက်ပါတီ ရှိတယ်..ဒီဆက်တဒေး ”
လို့ မိမိဦးကို ပြောလိုက်သည် ။ မိမိဦးရဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ချစ်စုသဲသဲကို ဆိုလိုတာမှန်း ချစ်စုသဲသဲရော တခြား ဘော်ဒါတွေရော သိလိုက်ကြသည်။ ဖရန်ကီမိုးမြင့်သည် တော်ရုံစော်ကို အဖက်လုပ်ပြီး စကားတောင်မပြောဘူးလို့ မိမိဦးက သူတခြားဖက်ကို ထွက်သွားတဲ့အချိန် ပြောပြသည် ။ ချစ်စုသဲသဲကို သ ခင်မင်ချင်လို့ ဖိတ်တာလို့
ပြောပြသည်။ တကယ်တော့ ချစ်စုသဲသဲသည် ဟေမာငွေနှင်း ခေါ်သွားလို့သာ ဇုံကလပ်လိုနေရာကို ရောက်ဖူးရတာ
။ ချစ်စုသဲသဲသည် ဟေမာငွေနှင်း. . မိမိဦးတို့လို လူဂုဏ်တန် အသိုင်းအဝိုင်းက မဟုတ်ဘူး ။
ချစ်စုသဲသဲ အဖေက အစိုးရဌာနတခုက အရာရှိတယောက် ဖြစ်ပေမဲ့ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားတာ
နှစ်နှစ်ကျော် လောက်ရှိပြီ ။ ချစ်စုသဲသဲရဲ့ အမေနဲ့ အမကြီးတို့က မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် တဆိုင်ဖွင့်ထားသည် ။ ချစ်စုသဲသဲ တို့သည် အဖေရှိတုံးက နေခဲ့တဲ့ တိုက်ခန်း ကောင်းကောင်းမှာတောင် မနေနိုင်ကြတော့ဘဲဈေးပေါတဲ့ မြို့သစ်က တိုက်ခန်း သေးသေး ညံ့ညံ့ကို ပြောင်းခဲ့ကြရတဲ့အထိ အိမ်စီးပွားရေး အခြေအနေက ကျဆင်း နိမ့်ပါးခဲ့သည် ။
ဟေမာငွေနှင်းနဲ့ ချစ်စုသဲသဲတို့က အထက်တန်းကျောင်းသူ ဘဝထဲက အရမ်းခင်မင် တွဲခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သည် ။ မိမိဦးနဲ့က ဟေမာငွေနှင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခင်မင်ကြရတာ ။ မိမိဦးက ချမ်းသာတဲ့ မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းက ဖြစ်ပေမဲ့ ဟေမာငွေနှင်းလိုဘဲ ဘော်ဒါစိတ်ရှိပြီး အဆင့် အတန်း ခွဲခြားတတ်တဲ့ စိတ်မရှိလို့ ချစ်စုသဲသဲနဲ့ အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းအခြာတွေ ဖြစ်လာကြသည်။ မိမိဦးက ချစ်စုသဲသဲကို ဖရန်ကီ့အိမ်က ပူးဆိုက်ပါတီ Poolside Party ကိုသွားဖို့ ခေါ်သည် ။ ယူ ရောက်ဖူးဖို့ကောင်းတယ်.. ချစ်စု.. နန်းတော်ကြီးလိုဘဲ သားနားတာ . .ဒို့အိမ်နဲ့တခြားစီဘဲကွ.. ဖရန်ကီတို့အိမ်က အံ့မခန်းပါကွာ.. လိုက်ကြည့်သူငယ်ချင်း … လို့ ပြောသည်။
Zone ကိုသွားတဲ့ညက ချစ်စုသဲသဲသည် အမေနဲ့ အမကြီးကို သူငယ်ချင်း မွေးနေ့ပွဲကိုသွားမယ်လို့ ညာပြောရသည် ။ ကလပ်သွားမည် ဆိုရင် အမေတို့က ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူးလေ ။ ချစ်စုသဲသဲက ဖြူဖွေးချောမောတဲ့ ကောင်မလေးဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေက ဖီးလိမ်းပြင်ဆင် ဝတ်စားပေးလိုက်သောအခါ သာမန် နွမ်းပါးတဲ့ မိသားစုက ဆိုတာ မသိသာတော့ဘဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်သီး သူဌေးကြီးဦးမိုးမြင့်ရဲ့ သား ဖရန်ကီကတောင် မျက်စိကျကာ သူ့အိမ်ကို ဖိတ်ခေါ်လေသည် ။
ဒီနေ့မနက် ချစ်စုသဲသဲ နေဖင်ထိုးတဲ့အထိ မထဘူး ။ သူ့ကို ထခိုင်းမဲ့ မေမေရော မမကြီးရော မရှိလို့ ။ သူတို့ မနက် အစောကြီးထပြီး အဝေးပြေးကားကြီးနဲ့ ဘုရားဖူးသွားကြသည် ။ ကျိုက်ထီးရိုးကို ။ ချစ်စုသဲသဲ ဒီနေ့ လွတ်လပ်သည် ။ ဘော်ဒါတွေနဲ့ ရှော့ပင် သွားကြမလို့ ။ ဘာမှတော့ မဝယ်နိုင် ။ ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံက မရှိ ။ငေးရုံဘဲ ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ သွားရတာတွေကို ပျော်သည်။ သူ့ထက်စာရင် မုန့်ဖိုးတွေရပြီး မိဘချမ်းသာသော ဟေမာငွေနှင်း နဲ့ မိမိဦး တို့က စားသောက်ကြရင် ဝယ်ကျွေးနေကျမို့ ချစ်စု စိတ်ပူစရာမလိုဘူး ။ တကယ့် သူငယ်ချင်း ကောင်းတွေ ရထားတာ ။
ဒေါက်…ဒေါက် …ဒေါက် …ဒေါက် …..
အာ…အိပ်ကောင်းနေပါတယ် ဆိုမှ တံခါးလာခေါက်နေတယ် ….စောစောစီးစီး ဘယ်သူလဲမသိဘူး ..။ အိပ်မှုံစုံမွှားနဲ့ ထကြည့်သည် ။ ဘယ်သူလဲ…။
အိုး ..။ မေမေတို့ မမကြီးတို့ဆီကို လာလာနေတဲ့ လူကြီး ။
တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး ဒီလူကြီးကို မေမေနဲ့ မမကြီးတို့ ဘုရားဖူး သွားကြတဲ့အကြောင်း ပြောပြလိုက်သည်
.။ ဒီလူကြီးရဲ့ အကြည့်တွေက စူးစူးရှရှနိုင်လွန်းလို့ သူဘယ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုက်တော့ ..ဟယ် သူ.. သူ ချစ်စု ရင်ဘတ်ကို ကြည့်နေတာ ..။ အခုမှ ချစ်စုဖါသာ သတိထားမိသည် ..။ အိပ်ရာထဲက ထလာတာမို့ ညအိပ်ရင်း ချစ်စုက ဘယ်တော့မှ ဘရာခံပြီး မအိပ်ဘူး ဆိုတော့ ချစ်စုရဲ့ အကျ င်္ီပါးပါးအောက်က ရင်သားတွေကို သူ နှာဘူးထနေတာ ။
“ ကိုယ် ခဏ ထိုင်လို့ရမလား …”
“ မရဘူး ..”
“ ဗျာ…ဘာလို့ ..”
“ ချစ်စု အိမ်မှာ တယောက်ထဲ..မေမေနဲ့ မမကြီးတို့ ရှိတဲ့အခါမှ ပြန်လာပါလား ”
ကိုသူရိန်ထွန်း ချစ်စု ပြောတာကို သဘောမကျ မကြိုက်ဘူးဆိုတာ သူ့မျက်နှာမှာ ပေါ်လွင်နေသည် ။ ဒါပေမဲ့ သူ ချစ်စုကို “ ကောင်းပြီလေ..ကိုယ် ပြန်တော့မယ် ..” လို့ မကျေမနပ်ကြီး ပြောပြီး အိမ်ထဲက ပြန်ထွက်သွားသည် ။
နေခြစ်ခြစ်တောက် ပူနေသည် ။ ချစ်စု ကျောင်းသွားဖို့ ကားစောင့်နေသည် ။ ဘတ်(စ် ) ကားက မလာသေး။ ဘတ်( စ် )ကား မှတ်တိုင်မှာ လူတွေ တပုံတခေါင်းကြီး သည် ဘတ်( စ် )ကား လာမယ့်ဖက်ကို လှည့်ပြီး
မျှော်နေကြသည် ။ နေပူပူအောက် အခြေခံလူတန်းစား ရဲ့ နေ့တိုင်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စ ။ ဘတ်( စ် )ကား စောင့်ရင်း ဟိုနေ့က ကိုသူရိန်ထွန်းကို ကောင်းကောင်း မဆက်ဆံလိုက်လို့ ဆိုပြီး မေမေနဲ့ မမကြီးတို့က ချစ်စုကို ဆူကြသည် ။ ဟွန်း ..။ မေမေက သိပ်ဘက်လိုက်တာဘဲ ။ မမကြီး ဖက်က အမြဲ ဘက်လိုက်သည် ။ ချစ်စုကို ဆူဘဲ ဆူနေတာဘဲ ။ တခါတခါ ချစ်စု မေမေ့အဆူကို မခံချင်လို့ အိမ်ကတောင် ထွက်ပြေးသွားချင်သည် ။
အဲ့လူကြီး ကိုသူရိန်ထွန်းကို နောင်ဆိုရင် လေးလေးစားစား ခင်ခင်မင်မင် ဆက်ဆံဖို့ မေမေနဲ့ မမကြီးက ချစ်စုကို ကောင်းကောင်း လက်ချာ ရိုက်ကြသည် ။ ကသိုရိန်ထွန်းကြီးက မမကြီးနဲ့ မေမေတို့ ရောင်းနေတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် ကို ဆိုင်ခန်း ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ သားသားနားနား ဖငွ့်နိုင်ဖို့ ငွေအရင်းအနှီး ထုတ်ပေးခဲ့တယ် လို့ မမကြီး နဲ့ မေမေက ပြောပြသည် ။ ဘယ်လောက်လဲ လို့ ချစ်စု မေးကြည့်လိုက်သည် ။ ဘုရား ဘုရား.. သိန်းငါးဆယ် တဲ့ ..။
“ သူက ဘာအတိုးမှ မယူဘဲ ချေးတာ..သူ့ကျေးဇူးတွေ ဒို့တတွေ အပေါ် တအားကြီးတယ် ..ချစ်စု .. ကိုသူရိန်ကြီးကလေ.. ညည်းကို သဘောကျနေတာ..” လို့ ပြောသည် ..။
ဘာရယ် .. ။ ချစ်စုကို သူက သဘောကျတယ် ..။ အမလေး ..။ သူက ..။ လူပုံက တောသူကြီးလိုလို ..အညာ ဆီကုန်သည်လိုလိုနဲ့ …။ ရရာစစ ..။ အမဲရိုးက ဟင်းအိုးမှ အားမနာ ..။
“ မမကြီးရယ် …ချစ်စုထက် သူက အသက်အများကြီး ကြီးတာ ..သဘောကျခြင်းကျ..မမကြီးကိုဆို တော်သေး …” “ သူက ငါ့ကို သဘောမကျဘူးဟဲ့. .ညည်းကိုဘဲ သဘောကျတာ ..သူက ငါ့ကို အမြဲ နောက်သလိုလိုနဲ့..မသစ်နု ညီမလေးကို ကျနော် လာတောင်းရမ်းမှာဗျ နဲ့ ပြောပြောနေတာ ”
အလုပ်များနေတဲ့ မေမေက “ ချစ်စု..မောင်သူရိန်ထွန်းကို ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံပါ ..သူတို့က ဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေ ..သူဌေးတွေ ” လို့ ဝင်ပြောသည် ။
ဟွန်း ..ဘတ်(စ် )ကား မလာလို့ စိတ်ညစ်ရတဲ့အထဲ မေမေနဲ့ မမကြီးတို့ ပြောတာတွေကို ပြန်တွေးမိပြီး ရင်ဘတ်ထဲ မကျေနပ်မှုတွေက ပြည့်ကျပ်သွားလို့ ပိုပြီး စိတ်ညစ်သွားသည် ။ မျက်မှောင်လေး ကြုံ့နေသော ချစ်စုသဲသဲ ကို ကောင်လေးနှစ်ယောက်က မကြားတကြားနဲ့..“ ဘဲနဲ့ ရန်ဖြစ်ထားလို့ ဖြစ်မယ် ..မျက်နှာလေးက ပုပ်သိုးနေတာဘဲ …” လို့ စသွားကြ သည် ။
ဒီကောင်လေးတွေဆီကို မျက်စောင်းပြင်းပြင်းတချက် ထိုးပစ်လိုက်ရင်း တဖက်ကို လှည့်ရပ်လိုက်တော့ သူ့ရှေ့ကို ညင်ညင်သာသာလေး ထိုးဆိုက်လာတဲ့ ဇိမ်ခံကားလှလှကြီးတစီးကို ချစ်စု တွေ့လိုက်ရသည် ။ အပြာနုရောင်လိုလို. .ငွေမှင်ရောင်လိုလို တောက်ပနေတဲ့ ကားအလန်းစားကြီး ။ ချစ်စုတို့ တခါမှ မစီးဘူးတဲ့ သူဌေးတွေ စီးတဲ့ကားကြီး ။ ကားကြီးရဲ့ ရှေ့ခန်းက မှန်ချပ် တတိတိနဲ့ လျောကျလာသည် ။ နေကာမျက်မှန် တပ်ထားတဲ့ ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာတခု ပေါ်လာသည် ။
ဟင် …ဖရန်ကီ …ဖရန်ကီမိုးမြင့် …
“ မုမုအီးရဲ့ ဘော်ဒါ ချစ်စုသဲသဲ မဟုတ်လား …” “ ဟုတ်တယ် ..”
“ အိမ်က ကား မအားလို့လား..ပျက်လို့လား ..တက်(က်)စီကား စောင့်နေတာလား …”
ဖရန်ကီမိုးမြင့်ရဲ့ မေးခွန်းတွေက များလိုက်တာ ။ ဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိ ။ မဖြေ ။ ဖရန်ကီသည် မိမိဦး ဟေမာငွေနှင်း တို့နဲ့တွဲနေတဲ့ သူငယ်ချင်းမို့ သူတို့လိုဘဲ ကားစီးနိုင်တဲ့ လူတန်းစားထဲကလို့ ထင်နေပုံရသည် ။
“ လာလေ..ဒို့ လိုက်ပို့မယ် ..”
ဘတ်(စ် )ကားကလဲ မလာ…ကျောင်းချိန်လဲ ကပ်နေပြီ ။ ဖရန်ကီ့ကားကြီးထဲကို ချစ်စုသဲသဲ ဝင်ထိုင်လိုက်သည် ။ မွှေးပျံ့တဲ့ အနံ့နဲ့ အဲကွန်း အရသာကို ခံစားလိုက်ရသည် ။ ကားထဲမှာ သီချင်း ဖွင့်ထားသည် ။ ငြိမ့်ငြောင်းတဲ့ သီချင်းသံလေးက ခပ်တိုးတိုး ကြားနေရသည် ။
“ ချစ်စုကို ဘယ်ကို ပို့ပေးရမလဲဟင် ”
“ ကျောင်းကို ..”
“ အိုခေ.. ဒို့ လိုက်ပို့မယ် ”
ဖရန်ကီ သည် အဝါနုရောင် စပို့ရှပ်အကောင်းစား တထည်ကို ရင်ဘတ်ကြယ်သီး မတပ်ဘဲ ဝတ်ထားသည် ။ လည်ပင်း နေရာမှာ ရွှေကြိုး သေးမျှင်မျှင်ဆွဲထားတာ တွေ့ရသည် ။ လက်မှာက ရွှေလက်ပတ်ကြိုး ခပ်တုတ်တုတ်နဲ့ နာရီ တလုံးကို ပတ်ထားသည် ။
“ ချစ်စု …ဒို့ ချစ်စုလို့ ခေါ်မယ်နော်..ရတယ် မဟုတ်လား ”
“ ဟုတ်..ရပါတယ် ”
“ ချစ်စု ..ကမ်းမင်း ဆက်တဒေး..ဒို့အိမ်မှာ လုပ်မယ့် ပူးဆိုက်ဒ်ပါတီ ကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ပါရစေ …” “ဟုတ် ”
“ မုမုအီးတို့နဲ့ လာမှာလား ”
“ အင်း..ဟုတ်တယ် ”
“ လာခေါ်စေချင်ရင် ပြောနော် ..ဒို့ လာခေါ်ပေးနိုင်တယ် ..”
ချစ်စုက ခေါင်းငြှိမ့်ပြလိုက်သည် ။ ဖရန်ကီက ချစ်စု မူအရာကို ငဲ့ကြည့်ပြီး ပြုံးသည် ။
“ ဘာပြုံးတာလဲ ..”
ချစ်စု မျက်စောင်းလှလှလေးကို ဖရန်ကီ ရသွားသည် ။
“ ချစ်စုက စကားမပြောဘဲ ခေါင်းဘဲ ငြှိမ့်ငြှိမ့်ပြနေလို့လေ…”
ချစ်စုလဲ ပြုံးမိသွားသည် ။ သူနဲ့ စကားပြောရတာ စိတ်ထဲမှာ ပျော်သလိုဘဲ ။ သူက သိပ်ကြည့်ကောင်းတာဘဲ ။ ရုပ်ရှင် မင်းသားတွေ ထက်တောင် ကြည့်ကောင်းသေးတယ် ..။ သူ့ကို ဇုန်ကလပ်မှာ စတွေ့ဖူးထဲက ချစ်စု စိတ်ထဲမှာ သဘောကျမိခဲ့တာ ။ ကားထဲမှာ အဲကွန်းကြောင့် စိမ့်အေးနေသည် ။ ချစ်စု ကားအပြင်ကို ထွက်ရမှာတောင် ဝန်လေးနေသည် ။ ကျောင်းရောက်ပြီ ။ ကားပေါ်က ဆင်းခါနီး ဖရန်ကီက ပူးဆိုက်ပါတီကို ဆက်ဆက် လာခဲ့ဖို့ ထပ်ဖိတ်သည် ။ ချစ်စုလဲ လာနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။
တကယ်လဲ ချစ်စု ဖရန်ကီ့အိမ်ကို ရောက်ဖူးချင်သည် ။ သူနဲ့ စကားပြောရတာ ချစ်စု ရင်ခုံသည် ။ သူ့အကြည့် တွေထဲ အချစ်ရဲ့ အရိပ်အရောင်တွေ ပါနေသလို ထင်မိသည် ။ သူ့ကားကြီး ထဲက ထွက်လိုက်တာနဲ့ အပူလုံးကြီး ဝုန်းကနဲ ချစ်စုကို ဝင်ဆောင့်သည် ။ သူ့ကားထဲကိုတောင် ပြန်ပြေး ဝင်လိုက်ချင်တဲ့ စိတ်ပေါက်သည် ။ သူ့နားကနေ ဖြည်းဖြည်းလေး ပြန်လည် မောင်းထွက်သွားတဲ့ ဇိမ်ခံကားလှလှကြီး ကို ချစ်စု အထင်တကြီး
ငေးမောရင်း ကျန်ခဲ့သည် ။ ကျောင်းဆောင်ထဲကို ချစ်စု မဝင်နိုင်သေး ။
ဖရန်ကီမိုးမြင့် ရဲ့အိမ်က ပူးဆိုက်ပါတီ ကို ချစ်စုသသဲရောက်သွားသည် ။ ဟေမာငွေနှင်း.. မိမိဦးတို့နဲ့ ။ ဖရန်ကီမိုးမြင့် တို့ မိသားစုရဲ့ ခြံနဲ့တိုက်ကြီးက ချစ်စုထင်ထားတာထက် ကြီးကျယ်ခန်းနား နေသည် ။ ဖရန်ကီတို့က သူထင်ထားတာထက်တောင် ပို ချမ်းသာ သည် ။ တိုက်ကြီးကလဲ ရဲတိုက်ကြီးတခုလိုဘဲ မြင့်မားကြီးကျယ်လှသည် ။ တိုက်ကြီးရဲ့ အနောက်ဖက်က ရေကူးကန်ကြီးကလဲ ခန်းနားလှသည် ။ ရေကူးကန်ကြီးရဲ့ ဘေး ပတ်ပတ်လည်မှာ မီးရောင်စုံတွေ ချိတ်ဆွဲထွန်းညှိထားပြီး စားပွဲခုံတွေ ချထားသည် ။ ချစ်စုတို့ ရောက်ရောက်ချင်း အချိန် ဖရန်ကီ က ရေကူးပြိုင်ပွဲ လုပ်မည် လို့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ပြောသည် ။ ယောက်ျားပြိုင်ပွဲ.. မိန်းမပြိုင်ပွဲ လုပ်မှာ လို့ ပြောသည်။
ရေကူးပြိုင်မယ့် မိန်းကလေးတွေ နဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ သည် အဝတ်လဲတဲ့ တိုက်အိမ်လေးမှာ ရေကူးဝတ်စုံတွေ လဲလှယ် ဝတ်ဆင်နေကြသည် ။ ဒီ အဝတ်လဲတဲ့ တိုက်ပုလေးကတောင် ချစ်စုတို့ နေတဲ့ တိုက်ခန်းထက် အများကြီး ပိုကြီးသည် လို့ ချစ်စု ထင်သည် ။ ပထမဆုံး မိန်းကလေးတွေ ပြိုင်ရမည်လို့ ဖရန်ကီက ပြောသည် ။ ချစ်စုတို့ ထိုင်နေရာကို ဖရန်ကီ ရောက်လာပြီး..“ မုမုအီးတို့ ချစ်စုတို့ကော ဝင်မပြိုင်ဘူးလား.. ဆုပေးမှာနော.. ဆုက အရမ်းကောင်းတယ် …”လို့ ရယ်ပြီး ပြောသည် ။ ဟေမာငွေနှင်းက “ ဆုက ဘာလဲဟင်
..ဖရန်ကီ …”လို့မေးသည် ။ ဖရန်ကီက ရေကူးကန် နားမှာ ရှိနေတဲ့ ပြိုင်စက်ဘီးတစီးကို ပြသည် ။
“ ဒါ ပထမဆုဘဲ .. ဒုတိယ.. တတိယဆုတွေလဲ ရှိသေးတယ် ..”လို့ ပြောပြသည် ။
မိန်းကလေးတွေ ရေကူးဝတ်စုံတွေနဲ့ ရေကူးကန်နဘေးကို ထွက်လာကြသည် ။ ရေကူးပြိုင်မယ့်အထဲ မှာ ဇုန်ကလပ်မှာတုံးက ဖရန်ကီ နဲ့ ပူးပူးကပ်ကပ် တော်ကီပွားနေတဲ့ အသားဖြူပတ်ဖြူရော်နဲ့ ပိုးဟတ်ဖြူလို့ သူတို့က နံမည်ပေးခဲ့တဲ့ ပိန်ပိန်ကောင်မလေး လဲ ပါသည် ။ တူးပိစ် နှစ်လွှာ ရေကူးတ်စုံလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ က ကြွကြွရွရွလေးတွေ နဲ့ ရေကူးကန်ဘေးမှာ လမ်းသလာနေကြသည် ။ “ ဖရန်ကီ..ဖရန်ကီ …” နဲ့ ဖရန်ကီမိုးမြင့်ကို ၀ိုင်းအုံနေကြသည် ။ ချစ်စုစိတ်ထဲမှာ မိန်းကလေးတွေ က ဖရန်ကီကို အရောတဝင် ပူးကပ်နေကြတာကို မနှစ်မြို့သလိုဘဲ ။ မနာလို ဖြစ်တာလား .. ကိုယ့်ဖါသာ စဉ်းစားလိုက်မိသည် ။ ဖရန်ကီ့ကို ငါ ကြိုက်နေ ပြီလား ..။ ဖရန်ကီ့ကို စတွေ့တွေ့ချင်းထဲက ချစ်စု စိတ်ဝင်စားမိခဲ့တာဘဲ လေ ။
ပြိုင်ပြီ ..။ ရေကူးကန်ရဲ့ တဖက်ထိပ်မှာ ရေကူးပြိုင်မယ့် မိန်းကလေး သုံးယောက်တန်းစ ရပ်နေကြသည် ။ ရေကူးကန် တဖက်ထိပ်ကနေ ဖရန်ကီမိုးမြင့်က လက်နှစ်ဖက်ကို မြှောက်ထားသည် ။ သူ့လက်တွေ ချလိုက်တာနဲ့ အသင့်ပြင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ရေထဲကို ခုန်ဆင်းကြရမည် ။ ပိုးဟပ်ဖြူလေး သည် ရေကူးဝတ်စုံ အနီလေးနဲ့
ရေကူးကန်ထဲကို ခုန်ဆင်းရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေသည် ။ ဟေမာငွေနှင်းက “ ပိုးဟပ်ဖြူလေးက ပိန်တယ် ထင်ရပေမယ့် မဆိုးဘူးဟ .. ကိုယ်လုံးလေးတော့ ရှိသား …” လို့ ပြောသည် ။ ချစ်စုစိတ်ထဲမှာတော့ ပိုးဟပ်ဖြူ ကိုယ်လုံး မလှပါဘူး .. လို့ ပြောနေမိသည် ။ ဖရန်ကီ့အနားကို ကပ်ကပ်နေတဲ့ ပိုးဟပ်ဖြူကို ချစ်စု မနာလို ဖြစ်နေသည် ။
ဖရန်ကီသည် ရေကူးဘောင်းဘီလေးနဲ့ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်း ဗလာနဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို မြှောက်ထားသည် ။ ရေအမြဲ ကူးတဲ့လူမို့လားမသိဘူး ။ ဖရန်ကီရဲ့ ကိုယ်လုံးက အချိုးကျ သည် ..ကြည့်ကောင်းသည် လို့ ချစ်စု ထင်သည် ။ ဖရန်ကီ လက်ချလိုက်တာနဲ့ မိန်းကလေးသုံးယောက် ရေကူးကန်ထဲ ဒိုက်ထိုးချပြီး ကူးခတ်ကြတော့ ကန်ဘေးမှာ ၀ိုင်းထိုင်နေတဲ့ ချစ်စုတို့ အပါအဝင် သူငယ်ချင်းတွေ က အော်ဟစ် အားပေးကြတော့တာဘဲ။ ချစ်စု ပိုးဟပ်ဖြူ မရပါစေနဲ့လို့ ကျိတ်ဆုတောင်းနေပေမယ့် ဆုတောင်းက မပြည့်ဘူး ။ ပိုးဟပ်ဖြူ ပထမ ရသွားသည် ။ ချစ်စု မမြင်ချင်တာတွေ မြင်ရပါတော့သည် ။ ပိုးဟပ်ဖြူကို ဖရန်ကီက ပထမဆု ဖြစ်တဲ့ ပြိုင်စက်ဘီးလေးကို ဆုအဖြစ်နဲ့ ပေးတာ ..။ဇလပ်ဖြူ ဆိုတာ ချစ်စုတို့ သိလိုက်ကြရသည် ။
အရမ်းကို ကျေနပ် ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ပိုးဟပ်ဖြူသည် ဖရန်ကီ့ကို တအားဖက်လိုက် ဆွဲလိုက်နဲ့ ..။ ပထမဆု အဖြစ် ပြိုင်စက်ဘီးလေးကို ပိုးဟပ်ဖြူ ရသွားသည် ။ ပိုးဟပ်ဖြူက ..“ ကိုဖရန်ကီ ..ဇလပ်ဖြူနဲ့ ဘီးအတူတူ စီးမှာ မဟုတ်လားဟင် ..” လို့ ချွဲတဲတဲ အသံလေးနဲ့ ပြောတာကို ချစ်စုတို့ ကြားလိုက်ကြရသည် ။ ဖရန်ကီက ..“ စီးမှာပေါ့ ဇလပ်ဖြူရယ် …စီးချင်တဲ့နေ့ ဖုန်းဆက်လိုက် …” လို့ ပြောသည် ။ မိန်းကလေးပြိုင်ပွဲ ပြီးသွားတော့ ယောက်ျား လေးပြိုင်ပွဲ စသည် ။ ရေကူးပြိုင်မယ့်လူတွေထဲ ဖရန်ကီလဲ ပါသည် ။ ဖရန်ကီရဲ့ အဝတ်မပါတဲ့ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို ချစ်စု မကြည့်ရဲဘူး . .။ ရင်ဖို ရင်ခုံနေသည် ။ အထူးသဖြင့် ရေကူးဘောင်းဘီရဲ့ အရှေ့ သူ့ပေါင်ကြားက ဖုဖု ဖေါင်းဖေါင်း ဖြစ်နေတဲ့ နေရာကို ကြည့်ပြီး ကြက်သီးတွေထ ..ရင်တွေ တုန်တာ ။
ဖရန်ကီတို့ ပြိုင်မယ့်လူတွေ တန်းစီနေချိန် တဖက်ထိပ်ကနေ လက်ပြပေးမယ့် လူက ပိုးဟပ်ဖြူ ဖြစ်နေသည်။ ပိုးဟပ်ဖြူက ပိုးပုဝါစလေး တစကို လက်ထဲမှာ မြှောက်ကိုင်ထားနေသည် ။ သူ ဒီပဝုါစလေးကို မြေကြီးပေါ်ကို လွှတ်ချလိုက်တာနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့်လူတွေက ရေကန်ထဲကို ဒိုက်ထိုးဆင်းကာ ကူးကြရမှာ ဖြစ်သည် ဇလပ်ဖြူ နေရာရနေတာ ချစ်စု စိတ်ထဲမှာ ပူလောင် ခံစားနေရသည် ။ ချစ်မိရင် မနာလို ဖြစ်သည် လို့ ထင်မိတာဘဲ ။ ပိုးဟပ်ဖြူ သို့မဟုတ် ဇလပ်ဖြူ သည် မခို့တရို့ အမူအရာလေးနဲ့ ရပ်နေသည် ။ မြှောက်ထားတဲ့ လက်ထဲမှာ ပုဝါစလေး ရှိနေသည် ။
“ ချစ်စု ..ပိုးဟပ်ဖြူကို ကြည့်…တအားမြောက်နေသလိုဘဲ …” လို့ ဟေမာငွေနှင်းက ပြောလိုက်တော့ မိမိဦးက ..“ မြောက်မှာပေါ့ဟာ..သူ့ကို ဖရန်ကီက အရေးပေး ဆက်ဆံတာကိုး ပိုးဟပ်ဖြူ က ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ဘူး ဟဲ့ … သူ့အဖေက အကောင်ကြီးကြီးတယောက်လို့ ကြားတာဘဲ …ဖရန်ကီ့ အဖေကလဲ..ယူတို့ သိတဲ့အတိုင်း စီးပွားရေး ထိပ်သီးကြီး တယောက် ဆိုတော့ ပိုးဟပ်ဖြူတို့ အဖေကို ဖားနေရတာပေါ့ဟာ …” လို့သူသိသမျှ ပြောပြလေသည် ။
ဟော…ဇလပ်ဖြူ လက်ထဲက ပိုးပုဝါစလေး ကျသွားပြီ ..။ ဖရန်ကီတို့ ရေကန်ထဲ ဒိုက်ထိုးဆင်းကြပြီး ကူးခတ်
နေကြသည် ။ ချစ်စု ထင်တဲ့အတိုင်းပါ ။ ပထမဆုကို ဖရန်ကီ ရသည် ။ ချစ်စု စိတ်ထဲ ကျိတ် ဆုတောင်း နေခဲ့တာ …။ ဖရန်ကီ ရပါစေ..ရပါစေ…ဆိုပြီး ။ သူငယ်ချင်းတွေ လူငယ်တွေ လက်ခုပ်တီး အားပေးကြ အပြီး လက်ခုပ်သံတွေ ထပ်ကြားလိုက်ရသည် ။
“ ချစ်စု..ကြည့်ကြည့်..အဲဒါ ဖရန်ကီ့ အဖေ နဲ့ အမေ ….”
ဟေမာငွေနှင်း ပြလို့ ချစ်စုလဲ ဖရန်ကီ့ကို ငေးမောနေရာက လက်ခုပ်တီးပြီး ရေကူးကန် အနားကို
လျောက်လာတဲ့ အသက်ငါးဆယ်လောက် ရှိတဲ့ စုံတွဲတတွဲကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ ဖရန်ကီ့အဖေက အသားညိုညို ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ..။ ရုပ်ရှင်မင်းသား လူမင်းတို့လို ပုံ ..။ ဖရန်ကီ့အမေက ရုပ်သန့်သန့် အသားဖြူဖြူ ပိန်ပိန်ပါးပါး …။ ဖရန်ကီ့အဖေက ဆုချီးမြှင့်ပေးမည် လို့ ကျေငြာနေသည် ။ ရေကူးပြိုင်ပွဲ ပြီးသွားတော့ ရေကူးကန် ဘေးက စင်မြင့်ပေါ်ကို လူတစု တက်လာသည် ။ လူငယ်တွေ ၀ိုင်းအော်ဟစ်လိုက်ကြတာ ဆူညံသွားသည် ။ ယနေ့ ခေတ် နံမည်ကြီးနေသော ရော့ခ် တေးဂီတအဖွဲ့ ဖြစ်နေသည် ။ လက်ခုပ်တွေ တီးကြ..လက်ခေါက်တွေ မှုတ်ကြ.. အော်ဟစ်အားပေးနေကြသည် ။ တီးဝိုင်းက မြူးမြူးကြွကြွ တေးသီချင်းတွေ စတင် တီးခတ်လိုက်တဲ့ ချိန်မှာဘဲ အစားအသောက်တွေကို စားပွဲတွေမှာ အနက်ရောင် ဝတ်စုံတွေနဲ့ စားပွဲထိုးတွေက လိုက်ချတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။
ဖရန်ကီ အဝတ်အစား ကောင်းကောင်း ပြန်ဝတ်ပြီး ခြံထဲ ပြန်ရောကလ်ာသည် ။ လူတွေက ၀ိုင်းနုတ်ဆက်ကြ ..စကားပြောကြတာ ဖရန်ကီလဲ တော်တော်နဲ့ ချစ်စုတို့ စားပွဲဝိုင်းဆီ ရောက်မလာနိုင်ဘူး ..။ စင်မြင့်ပေါ်မှာလဲ နံမည်ကြိး အဆိုတော်မ တယောက် ဆိုနေတာနဲ့ လူတွေ တအားသဘောကျ အားပေးနေကြသည် ။ ချစ်စုတို့ လူစုလဲ အစားအသောက်တွေက ကောင်းလွန်းလို့ သဘောကျနေကြဆဲ ဖရန်ကီ ရောက်လာသည် ။ ချစ်စုတို့နဲ့ လာထိုင်ပြီး စကားတွေ ပြောသည် ။ စင်မြင့်ပေါ်က အဆိုတော်မ က လာရောက်သူတွေ အားလုံးကို ဖရန်ကီတို့ မိသားစုက အိမ်အပြန်မှာ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ထုပ်လေးတွေ ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကျေငြာလိုက်တော့ လူတွေ အားလုံး တခဲနက် လက်ခုပ်တီးကြ…အော်ဟစ်ကြသည် ။ တယ်လဲ ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုပါလား…လို့ ချစ်စု စဉ်းစာနေတုံး မိမိဦးနဲ့ ဟေမာငွေနှင်းတို့ နံမည်ကို ခေါ်လိုက်လို့ သူတို့နှစ်ယောက် စင်မြင့်ဖက်ကို အပြေးအလွှား ထွက်သွား ကြသည် ။ ဒီအချိန်မှာ ဖရန်ကီက ချစ်စု လက်ထဲကို အထုပ်လေး တထုပ် လာထည့်သည် ။
“ ဒါ ချစ်စုအတွက် …” ဆိုပြီး ။
ချစ်စုလဲ သူ့ကို မော့ကြည့်ပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး ။ သူက ..“ ဒါ စောစောလေးက ရေကူးပြိုင်ပွဲမှာ ဒို့ ရတဲ့ ပထမဆု လေ..ဒို့က ချစ်စုကို ပေးတာ …” လို့ ပြုံးပြီး ပြောသည် ။ ဒီချိန်မှာဘဲ စင်မြင့်ပေါ်က ချစ်စုနံမည်ကို ခေါ်လိုက်လို့ ချစ်စုလဲ ဖရန်ကီပေးတဲ့အထုပ်လေးကို ကိုင်ရင်း စက်မြင့်ဖက်ကို ထွက်ခဲ့ရသည် ။ စားပွဲကို ပြန်ရောက်
တော့ ဖရန်ကီ မရှိတော့ ။ တခြားဝိုင်းကို ရောက်နေပြီ ။ မိမိဦးနဲ့ ဟေမာငွေနှင်းတို့က သူတို့ရတဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်
တွေကို ဖေါက်ကြည့်နေကြသည် ။ အဖိုးတန် မိန်းမပတ် နာရီလေးတွေမို့သူတို့ တအားသဘောကျ ပျော်နေကြသည်။
“ ဟဲ့ ချစ်စု..ယူ့အထုပ်လဲ ဖေါက်လေ..” လို့ သူတို့ ချစ်စုဖက် လှည့်ပြီး ပြောလိုက်ချိန် ချစ်စု လက်ထဲမှာ အထုပ် နှစ်ထုပ် ဖြစ်နေတာကို သူတို့ သတိထားလိုက်မိသည်။
“ဟယ်..ချစ်စု ..ယူက နှစ်ခုတောင် ရတာလား ..တယ် ကံကောင်းပါလား …”
အတင်းဖေါက်ခိုင်းလို့ သူတို့ ရှေ့မှာ ဖေါက်ပြလိုက်ရသည် ။ စင်မြင့်ပေါ်က ရတာက မိမိဦးတို့ ဟေမာငွေနှင်း တို့လို မိန်းမပတ် နာရီလေး ပါဘဲ ..။ ဖရန်ကီ ပေးတဲ့ အထုပ်ကို ဖေါက်လိုက်တော့ အကောင်းစား
နောက်ဆုံးပေါ် ဟန်းဖုန်း တလုံး ဖြစ်နေသည် ။ ဟေမာငွေနှင်းက ..“ ဟယ်..ချစ်စု ယူ တော်တော် ကံကောင်းတယ် ..ဖုန်းလေးက ကောင်းလိုက်တာ..လှလိုက်တာ..တော်တော် ဈေးကြီးမှာဘဲ …” လို့ ပြောသည် ။ တီးဝိုင်း ခဏ နားသွားချိန် နံမည်ကြီး ဟာသလူရွှင်တော် တယောက် စင်ပေါ်တက်လာပြီး ဟာသတွေ ပြောသည် ။ သည်အချိန်မှာ ချစ်စု ရလိုက်တဲ့ ဖရန်ကီ ပထမဆုအဖြစ်ရတယ် ဆိုတဲ့ ဟန်းဖုန်းလေး မြည်လာသည် ..။ တိ တိ တိ နဲ့ ။ မိမိဦးက ..“ ဟယ် ..ဖုန်းခေါ်နေပြီ ….” လို့ ပြောရင်း..“ ချစ်စု..ကိုင်လိုက်လေ..ကိုင်လိုက်လေ …” လို့ ပြောသည် ။ ချစ်စု လဲဖုန်းကိုင်လိုက်တော့..ဖရန်ကီ ခေါ်တာ ဖြစ်နေလို့ စိတထ်ဲမှာ ထိတ်ကနဲ လှုပ်ရှားသွားရသလို ရင်တွေလဲ ခုံလွန်းသွား ရသည် ။
“ ချစ်စု ….”
“ ရှင် ……”
“ ချစ်စု …ဘာဘဲ အကူအညီ လိုလို..ဒီဖုန်းလေးနဲ့ ဒို့ကို ခေါ်လိုက်နော် ..ဒို့ ချက်ချင်း ပြေးလာခဲ့ပေးမယ် …”
“ဒို့လဲ ချစ်စုဆီကို ဖုန်းခေါ်မယ်နော် ..ဖြစ်တယ် မှုတ်လား …”
“ ဖြစ်ပါတယ် ….”
“ စားလို့ ကောင်းရဲ့လား …”
“ ကောင်းပါတယ် ..”
ချစ်စု ဖရန်ကီတို့ အိမ်က ပြန်ခဲ့တော့ မိမိဦးတို့ကားပေါ်မှာ အတွေးတွေ များနေသည် ။ သူ ဖရန်ကီ့ကို စိတဝ်င်စားနေသလို ဖရန်ကီကလည်း သူ့ကို စိတ်ဝင်စားနေသလား ..။ ချစ်စု ဘဝနဲ့ ဖရန်ကီ ဘဝက မိုးနဲ့ မြေကြီး လို ကွာခြားနေသည်.. ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား .. လို့ချစ်စု တွေ့နေမိသည် ။ နောက်တခု ချစ်စု ပူပန်မိတာက ပိုးဟပ်ဖြူ သို့မဟုတ် ဇလပ်ဖြူ …။ ဖရန်ကီက သူ့အဖေ အတွက် ဖားပေးရလို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဇလပ်ဖြူကို သိပ် အရေးပေး လွန်းသည် လို့ ချစ်စု ထင်သည် ။ ဇလပ်ဖြူကို တအား မုန်းနေမိသည် ။
ဖရန်ကီ ပေးထားတဲ့ ဖုန်းလေး မြည်လာသည် ။ ချစ်စု အရမ်း ရင်ခုံသွားသည် ။ ဒီဖုန်း နံပါတ်ကို တခြားလူ ဘယ်သူမှ မသိကြ ..။ ဖရန်ကီ ခေါ်တာဘဲ ဖြစ်မှာမို့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားရင်း ဖုန်းထူးလိုက်သည် ။
“ ဟယ်လို ”
“ ချစ်စု ..”
“ ပြော ..”
“ ဒို့ပါ..ဖရန်ကီ …”
“ အင်း ..သိတယ်..ပြော …”
“ချစ်စုကို သတိရနေတယ် ….”
“ ဟနွ့်..ညကဘဲ တွေ့တာဘဲ..ခု သတိရနေပြီလား …”
“ ဟုတ်တယ် ..”
“ ယုံပါဘူး …”
“ တကယ် …”
“ ဖရန်ကီ ..ဒို့ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ..နောက်မှ ပြောမယ် …”
“ အိုကေ ..ချစ်စု ”
ချစ်စု ဖုန်းကို ပိတ်လိုက်ပြီး ဘတ်စ်ကား ပြူတင်းပေါက်ကနေ အမှတ်မထင် အပြင်ကို ကြည့်လိုက်သည် ။
“ ဟင် ….” ပန်းခြံလေး ဘေးနားမှာ ပြိုင်စက်ဘီးလေးနဲ့ ဇလပ်ဖြူ ..။ အဖြူရောင် တီရှပ်..အဖြူရောင်ဘောင်းဘီတို ..အဖြူရောင် Nike ဖိနပ်လေးနဲ့ ..။ ဇလပ်ဖြူဘေးမှာက သူ့ဆီကို အခုဘဲ ဖုန်းဆက်တဲ့ ဖရန်ကီ ..။ ဖရန်ကီ ရဲ့ လက်ထဲမှာ ဖုန်းတလုံးကို ကိုင်ထားသည် ။ ချစ်စုရဲ့ စိတ်တွေ အရမ်း ဝမ်းနည်းသွားသည် ။ ဖရန်ကီ ဖုန်းဆက်လို့ စိတ်တွေ လှုပရ်ှားနေတာ ..။ ရင်တွေ ခုံနေတာ ..။ အခုတော့..။ သူတို့က အရမ်းတွေ ပြုံးပျော်ကြည်နူးနေကြတာ ..။ ချစ်စု မျက်စိနဲ့ သေသေချာချာ မြင်လိုက်ရတာ ..။ ချစ်စု မျက်လုံးထဲက မျက်ရည်ပေါက်တွေ တတောက်တောက် ယိုစီး လိမ့်ကျလာရသည် ။ ချစ်စု ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ငိုနေသည် ။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲ မရှက်နိုင်တော့ ..။ ရင်ထဲမှာ နာကျင်နေသည် ..။ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဆင်းခဲ့တော့လဲ ချစ်စု ငိုနေဆဲ ..။ ဖရန်ကီ့ကို သူချစ်နေမိလို့လား ..။ ဇလပ်ဖြူကို မုန်းသထက် မုန်းမိရသည် ။ တကယ်တော့ ချစ်စုဘဝက သူတို့ ဘဝတွေလို မဟုတ် ..။ တကယ်တမ်း လိုက်ဖက်တာက သူတို့နှစ်ယောက်ပါ လို့ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ တွေးနေသည် ။ သူ့ဘေးကို ကားတစီး လာရပ်သည် ။
“ ချစ်စု ..ချစ်စုသဲသဲ …”
ကားပေါ်က ကားမောင်းတဲ့လူက လှမ်းခေါ်တာ ..။ ဒီအသံ ကြားဖူးပါတယ် ..။ မော့ကြည့်လိုက်တော့
“ ချစ်စု ..ငိုနေတယ် ..ဘာဖြစ်လို့လဲ ..ကိုယ် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ..အိမ်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ ..လာ..လာ..ကားပေါ်တက် …”
“ ရပါတယ်..နေပါစေ …” “ အို..မဟုတ်တာဘ.ဲ .လာ..လာ…”
သူရိန်ထွန်းက ကားပေါ်က ဆင်းလာပြီး တံခါးဖွင့်ပေးသည် ..။
“ တက်..တက်..ချစ်စု ..လိုက်ပို့ပေးမယ် ..”
ချစ်စုလဲ သူက တအားခေါ်နေတော့ သူ့ကားပေါ်ကို တက်လိုက်မိသည် ။
သူရိန်ထွန်းက ..“ ချစ်စု ကို တယောက်ယောက်က စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်လိုက်လားဟင် ..” လို့ မေးသည် ။
“ မလုပ်ပါဘူး ..”
သူရိန်ထွန်းကို ကြည့်ရတာ တကယ်ဘဲ ချစ်စုအတွက် ပူပန်နေတဲ့ပုံရှိသည် ။ သူရိန်ထွန်းက လူရှင်းတဲ့ အအေးဆိုင် တဆိုင်ကို ချစ်စုကို ခေါ်သွားသည် ။ ချစ်စုကို ဖျော်ရည်တခွက် တိုက်သည် ။
“ စိတ်မညစ်နဲ့ ချစ်စု..ကိုယ် ရှိတယ်..ချစ်စု မှာ အခက်အခဲ ရှိရင် ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြော..ကိုယ် ချစ်စု စိတ်ချမ်းသာတာကိုဘဲ မြင်ချင်တယ် ..”
ချစ်စု ဘာမှ ပြန်မဖြေဘူး ..။ မျက်ရည်တော့ မကျတော့ဘူး ..။ ကိုသူရိန်ထွန်း က သိပ်တော့ မဆိုးပါဘူး..ငါ့ကို စေတနာထားသားဘဲ..လို့တွေးမိသည် ။ ချစ်စု ဆီကို ဖရန်ကီ ညနေပိုင်းမှာ ဖုန်းထပ်ခေါ်ပေမယ့် ချစ်စု သူ့ဖုန်းကို မထူးဘူး ..။
ချစ်စု ဒီနေ့ ထမင်းဘူး မပါခဲ့လို့ ကင်တင်းမှာ အသုတ်ဝယ်စားရသည် ။ ဟေမာငွေနှင်းက မိမိဦးနဲ့ ပါသွားလို့ ချစ်စု တယောက်ထဲ ကင်တင်း မှာ ထိုင်စားနေတာ ..။
အို..ဖရန်ကီ ….ချစ်စုဘေးမှာ လာထိုင်သည် ။ “ ချစ်စု ..ဘာလို့ ဒို့ ဖုန်းခေါ်တာကို မကိုင်တာလဲ …”
ချစ်စု ပုဂံထဲက ခေါက်ဆွဲသုပ်ကို ဇွန်းနဲ့ မလိုအပ်ဘဲ မွှေနေသည် ။ ဖရန်ကီ့မေးခွန်းကို ပြန်မဖြေ ..။ ဖရန်ကီ က သူ့ကို ဖုန်းဆက်..သတိရတယ် ဘာညာကွိကွတွေ ပြောနေပေမယ့် ဇလပ်ဖြူနဲ့က တတွဲတွဲလုပ်နေတာ သူ့ ရင်ဘတ် တွေ နာအောင့် အောင် ခံစားနေခဲ့ရသည် ။
“ ချစ်စုက ဒို့ကို စိတ်ဆိုးနေတာလား …ဘာကြောင့်လဲ..ချစ်စု မကြိုက်တာ ဒို့ ဘာလုပ်မိလို့လဟဲင် . . .”
ဖရန်ကီက မျက်စိမျက်နှာပျက်ပျက် နဲ့ မေးသည် ။ ချစ်စု ဘာမှ မဖြေဘဲ တဖက်ကို မျက်နှာလှည့်ထားသည် ။
“ ချစ်စု နှုတ်ခမ်းလေးက စူထားတာ ဟိုဒင်းလေးနဲ့ တူနေတယ် …”
ချစ်စု ခြာကနဲ သူ့ဖက်ကို လှည့်လိုက်ပြီး ..“ ဘာပြောတယ် ..ဘာဟိုဒင်းလဲ..” လို့ မေးသည် ။ မျက်စောင်းလှလှလေး ကို ဖရန်ကီ ရသွားသည် ။
ဖရန်ကီက..“ စိတ်မဆိုးလိုက်ပါနဲ့ ချစ်စုရယ်…ချစ်စုနှုတ်ခမ်းလေး ..ဟို ကွိကွိ ကွိကွိ နဲ့ အော်ပြီး နှုတ်ခမ်းထော်ထော် အကောင်လေး နဲ့ တူတယ် လို့ ပြောချင်တာပါ …” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ ချစ်စုလဲ ဖရန်ကီ့ကို ကြာကြာ စိတ်မကောက်နိုင် ..။
“ဟွန်း..သူများကို ဝက်နဲ့တူတယ် ပြောတာ..စိတ်ဆိုးတယ် ..သိလား….” လို့ ပြုံးပြုံးလေး ပြောလိုက်သည် ။
ဖရန်ကီလဲ ချစ်စု သူ့ကို ပြန်စကားပြောလာလို့ ပြန်ပြုံးလာလို့ ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်သွားသည် ။
“ ဟင် …ဘာလဲ…”
“ မြို့ထဲမှာ တခုခုသွားစားရအောင် ..”
“ ခုဘဲ အသုတ်စားထားတယ် ..ဘိုက်ပြည့်နေပြီ …”
“ ထပ်စားကွာ…ချစ်စုကြိုက်တဲ့ မြေအိုးမြီးရှည် နဲ့ မာလာဟင်း သွားစားမယ် ..”
“ ချစ်စု စားနေကျ တရုပ်တန်းက ဆိုင်လေးမှာ…”
“ဟယ် ..သူ…ဘယ်လိုသိလဲ …ပြောပြော….ဘယ်သူ သူ့ကို ပြောပြလဲ..သူများအဲ့မှာစားနေကျ ဆိုတာ …”
“ ချစ်စု ဘာကြိုက်တယ် ဘယ်သွားတယ်..ဘာလုပ်တယ် ဆိုတာ ဒို့ သိချင်တာပေါ့ …”
“ နောက်..ဘာတွေ သိသေးလဲ..ပြော..ပြော ….”
“ အင်း..နောက် သိတာတွေက ချစ်စု မှာ ရည်းစား မရှိသေးဘူး ဆိုတာရယ် …” “ ဟိတ်..သေချာလို့လား..”
“ သေချာတာပေါ့ …ဒို့ ဘာလို့ ချစ်စုအကြောင်းတွေ ကို ဒီလောက် စိတ်ဝင်စားပြီး သိအောင်လုပ်နေသလဲ သိလား
“ မသိဘူး …”
“ မသိရင် ပြောပြမယ် ….”
အို..ချစ်စု လန့်သွားသည် ..။ သူ ချစ်စုကို ချစ်စကား ပြောတော့မလား ..။
“ မပြောနဲ့…မပြောနဲ့ ….”
ချစ်စု အသံကျယ်သွားလို့ ဖရန်ကီ လန့်သွားသည် ..။ ချစ်စု ရှက်တာပါ ..။ ဖရန်ကီ ရည်းစားစကား ပြောတော့မယ် ထင်လို့ ..။
“ လာ..ချစ်စု မြေအိုးမြီးရှည်ဆိုင် သွားကြစို့ …”
ဖရန်ကီက ကင်တင်းဘေးမှာ ရပ်ထားတဲ့ သူ့ကားကြီးဆီကို ချစ်စုကို ခေါ်သွားသည် ။ ဒီအချိန်မှာ ဟိုးအဝေးက ပြိုင်စက်ဘီးလေး နင်းလာနေတဲ့ ဇလပ်ဖြူကို ချစ်စုရော ဖရန်ကီရော မြင်လိုက်ကြသည် ။ ဖရန်ကီက..“ ဟိုးမှာ ဇလပ်ဖြူ လာနေတယ် …”လို့ ပြောလိုက်တော့ ချစ်စုလဲ..“ ယူ ..အဲ့စော်ကို စကားပြောရဲပြောကြည့်..ယူနဲ့ တသက်လုံး စကားမပြောတော့ဘူး ..” လို့ ဖရန်ကီ့ကို မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ပြောထည့်လိုက်သည် ။ ဖရန်ကီ သဘောပေါက်သွားပြီ ..။ ချစ်စု သူနဲ့ ဇလပ်ဖြူ ပတ်သက် ခင်မင်တာကို ဂျေဝင်နေတာကိုး ..။
“ ချစ်စု မကြိုက်ရင် ဒို့ ဇလပ်ဖြူကို ကင်းကင်း နေမယ်..ကျေနပ်ပြီလား ….”
ဖရန်ကီ ချစ်စုဖက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ယိမ်းလိုက်သည် ..။ ဖရန်ကီ က လူပါး ..။ သူ ခြံစည်းရိုး ခွထိုင်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူးလေ ..။ တကယ်တမ်း သူ ကြိုက်တာက ချစ်စုသဲသဲ မဟုတ်လား ..။ ဖရန်ကီ့ကားက ဟိုတခါ ချစ်စုကို ကျောင်းလိုက်ပို့ပေးတဲ့ ငွေမှင်ရောင်ကားကြီး မဟုတ်ဘူး ..။ အမဲရောင် ကားရှည်ရှည်ကြီး ..။ ကားရဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှာ ကျားသစ် အနက်ရောင် အရုပ်ကလေးနဲ့ ..။ ထုံးစံအတိုင်း အဲကွန်း တအားဖွင့်ထားသည် ။အပြင်မှာ တအားပူပြီး ကားထဲမှာ အေးလွန်းလို့လားမသိဘူး..။ ချစ်စု ခေါင်းကိုက်သလို ဖြစ်သွားသည် ..။ ချစ်စုကို အရိပ် တကြည့်ကြည့် လုပ်နေတဲ့ ဖရန်ကီ ပျာပျာသလဲ ဖြစ်သွားသည် ။
“ ချစ်စု ဘာဖြစ်လဲ..နေမကောင်းဘူးလား …ဖြစ်ပါ့မလား..မြေအိုးမြီးရှည် စားလို့ ….ချစ်စု ဘာစားချင်လဲ …”
“ ရတယ်..ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် …”
“ အပြုတ် တခုခု စားရင်ကောင်းမယ် ထင်တယ် …”
ဖရန်ကီ တရုတ်တန်းကို မသွားတော့ ..။ အင်းလျားလမ်းက ဟက်ပီး ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးကို ခေါ်သွားသည် ။ အပြင်မှာ ပူလွန်းတယ် ဆိုပြီး သီးသန့် အခန်းလေးထဲ ထိုင်စေသည် ။ အခန်းလေးက အလုံပိတ်လေး ..။ ဆိုဖါကြီးလဲ ရှိသည် ..။ အ်ိမ်သာခန်းလေးလဲ တွဲရက် ပါသည် ..။
“ ချစ်စု ..ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေး သောက်လိုက် …ဒါက သံပုရာရေ ချဉ်ချဉ်လေး …”
ဖရန်ကီက ချစ်စုကို အရမ်း ဂရုစိုက်ပြတာဘဲ ..။ စောစောက ဇလပ်ဖြူကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပြတ်သားပြ လိုက်ကထဲက ချစ်စု သူ့ကို ကျေနပ်သွားခဲ့ပြီလေ ..။
“ ချစ်စု …”
“ ဟင် …ဖရန်ကီ ”
“ ချစ်စုကို ဒို့ သိပ်ချစ်တယ် …”
ဖရန်ကီက ချစ်စု လက်ကလေးကို ဖမ်းဆုပ်ထားသည် ။
“ ချစ်တယ် ….ချစ်စုရယ်..ဒို့ကို ပြန်ချစ်ပါ …”
“ ယူနဲ့ ချစ်စုတို့ ဘဝ အခြေအနေက ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးလိုဘဲ ကွာဟလွန်းပါတယ် ဖရန်ကီရယ် ..မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
“ ဒို့က ချစ်တာ တခုဘဲ သိတယ် ချစ်စု ..ဒို့ ဖြစ်ချင်ရင် အားလုံး ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ….”
“ ချစ်စု ကို တကယ် ချစ်လားဟင် …”
ဇလပ်ဖြူကို ဥပက္ခာပြုနိုင်တာကို တွေ့ရလို့ သူ့ကို ချစ်စု ယုံသွားသလိုဘဲ ..။
“ ချစ်စုကို အရမ်းချစ်တယ် …ချစ်စုကို ဒို့ တနေ့ လက်ထပ်မယ် ..တသက်လုံး အတူတူနေမယ် ..”
ဖရန်ကီက ချစ်စုကို ဖက်လိုက်သည် ..။
“ ဟိတ်..ဘာလို့ ဖက်တာလဲ ..”
“ ချစ်လို့..ချစ်စုရော ဒို့ကို ချစ်တယ် မဟုတ်လား …”
“ ချက်ချင်းဘဲ သိချင်တာဘဲလား ..”
“ သိချင်တာပေါ့ …ချစ်စုနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ချင်လှပြီ..ပြော..ပြော…ချစ်တယ် လို့..”
ချစ်စုပါးလေးကို ဖရန်ကီ နမ်းသည် ..။
“ အို …ဟိတ် …”
“ ပြောလေ ..ချစ်တယ်လို့ ..”
“ ရှက်တယ်ကွာ…ဟိတ်..လူဝင်လာလိမ့်မယ် …”
“ မလာပါဘူး ..”
ဖရန်ကီက ချစ်စုနှုတ်ခမ်းဖူးဖူလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးနဲ့ ဖိကပ်ပြီး စုတ်နမ်းသည် ..။
ချစ်စု သူ့ရင်ခွင်ထဲ ပျော့ကျသွားသည် ။
ဖရန်ကီရယ် … သူ..သူ သူများကို သူ့ဖက်ပါအောင် သိပ် လုပ်တတ်တာဘဲ ..။ ချစ်စုလေ ..သူ့ကို တအား ချစ်မိသွားပြီ ..။
“ ပြော..ချစ်လား …”
“ အင်း..ချစ်တယ်..ဖရန်ကီ့ကို ချစ်စုလဲ အရမ်းချစ်တယ် …”
“ ဒို့လဲ ချစ်စုကို အရမ်းအရမ်း ချစ်တယ် ..”
အနမ်းတွေ ဖွဖွလေး ..ညင်ညင်သာသာလေး..နမ်းမိကြရပြန်သည် ..။ ရင်တွေ ခုံတာ အရမ်းအရမ်း …။ ဖရန်ကီ့ လက်မောင်း ကို တွဲချိတ်လို့ ချစ်စု ဖရန်ကီ့ကားကြီးဆီကို လျောက်သွားသည် ။ ဒီနေ့ ချစ်စု သိပ်ပျော်သည် ..။ ဖရန်ကီ နဲ့ တိတိပပ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားလို့…။
ဖရန်ကီနဲ့ လမ်းခွဲပြီး အိမ်ပြန်တော့ ချစ်စုသဲသဲ ကယောင်ခြောက်ခြားတွေ ဖြစ်နေသည် ။ ရယ်ချင် သလိုလို
..ငိုချင်သလိုလို ..။ မေမေနဲ့ မမကြီးက အမှားမှား အယွင်းယွင်းတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ချစ်စုကို ..“ဟဲ့ …ချစ်စု ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ .. စိတ်နဲ့လူနဲ့ မကပ်ဘူးလား ..” လို့ ငေါက်တာ ခံရသည် ။ ဖရန်ကီ ချစ်စုကို တအား နှုတ်ခမ်းချင်းစုတ် နမ်းတဲ့အချိန် ချစ်စု ဖုတ်ဖုတ်က တအားကျင်တာဘဲ ..။ အရေတွေ စိုစွတ်စွတ် ဖြစ်သလိုလဲ ခံစားမိရသည် ။ အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း ချစ်စု ကြည့်လိုက်တော့ ပင်တီလေး ဂွကြားနေရာမှာ စိုကွက်နေတာ တွေ့ရသည် ..။ သူ့ကြောင့်..။ ဖရန်ကီ့ကြောင့် ..။ ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထပြီး ဖုတ်ဖုတ်က အရေတွေ ယိုစီးကျရသည် ။
ဖရန်ကီနဲ့ ခုဘဲ တွေ့ပြီး ပြန်လာတာ..အိမ်ရောက်တာနဲ့ သူနဲ့ ပြန်တွေ့ချင်မိရသည် ..။ မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ပေါ်လာသည် ။ သူ့စကားသံတွေကို ကြားချင်နေသည် ။ ဖရန်ကီက ချစ်စုကို ဖုန်းခေါ်သည် ။ ချစ်စု သူပေးထားတဲ့ ဖုန်းကိုင်တာ မေမေနဲ့ မမကြီးတို့က မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေက တပုံတခေါင်းကြီး ..။ ချစ်စုက ဟေမာငွေနှင်း ပေးထားတာ လို့ ညာထားသည် ။ ညအိပ်ရာဝင်တော့ ဖရန်ကီ့အနမ်းတွေကို ပြန်သတိရနေမိသည် ။ ဖရန်ကီ နမ်းတဲ့အချိန် ချစ်စုနို့သီးတွေလဲ တအား မာတင်းပြီး ယားသလိုလို တယောက်ယောက် ရဲ့အကိုင်ကို ခံချင် သလိုလို ဖြစမ်ိခဲ့တာလဲ ပြန်စဉ်းစားနေမိသည် ။ ဖရန်ကီနဲ့ ချစ်မိသွားတာလဲ ကျေနပ်သလိုလို ပျော်သလိုလိုကြီး ။ ညက စဉ်းစားတာတွေ များလို့ မနက် မထနိုင်ဘူး ..။ မေမေနဲ့ မမကြီးက ဆိုင်ကို ရောက်နေကြပြီ ။ ချစ်စု တယောက်ထဲ မို့ နှိုးမယ့်လူ မရှိဘူး ..။ ပြူတင်းပေါက်ကလဲ ခန်းဆီးကာ ထားတော့ အခန်းက မှောင်နေသည် ..။ အိပ်မက်တွေကြောင့် လန့်နိုးလာသည် ။
ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲ ..။ နာရီကို ကြည့်လိုက်သည် ။ ဟယ် ….ကျောင်းချိန်တောင် ကပ်နေပြီ ….
လူးလဲ ထပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ပြေး သွားတိုက် ရေချိုးရသည် ။ ကိုယ်လုံးတီး ရေချိုးရင်း သူ့ကို ဖျတ်ကနဲ သတိရ မိပြန်သည် ။ တနေ့ကျရင် သူ..သူ ချစ်စုရဲ့ ဒီကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကိုင်မှာ နမ်းမှာလို့ စိတ်ကူး အတွေးတွေက ဘယ်လို ဘယ်လို ပေါ်လာမှန်း မသိဘူး ..။ ကျောင်းနောက်ကျနေတာ သိနေရက်နဲ့ ပေါင်ကြားက အဖုတ်ကို စမ်းမိ သွားသည် ။ ဖုတ်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသား နုနုလေးတွေက လက်ချောင်းတွေ ထိတွေ့လိုက်တဲ့အချိန် ပြန်မခွာ စေချင်ကြဘူး ။ ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်မိတာ ..။ အို …..အထဲက ယားသလိုလိုကြိး ..။ ဖုတ်ဖုတ်အထဲက တခုခုကိုလိုလား နေသလိုကြီး ..။ အို..ငါဘာတွေ လုပ်နေမိတာလဲ ဆိုပြီး သတိပြန်ဝင်လာရပြီး ရေကို တဘွမ်းဘွမ်း ခပ်ချိုး လိုက်ရသည်..။ အိမ်ကနေ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို ခပ်သုတ်သုတ် လျောက်ခဲ့တုံး ကားမဲကြီတစီး သူ့ဘေးနား ဆိုက်လာသည် ။ ဟင် …
သူ့ကားကြီးပါလား …။ သူ..သူ ….ကားပြူတင်းပေါက်ကနေ ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေသည် ..။
“ ချစ် ..ကားပေါ်တက် ….” တဲ့ ..။
ဘတ်စ်ကား က တော်တော်နဲ့ လာမှ မဟုတ်လို့ ကျောင်းတော့ အသေအချာ နောက်ကျပါပြီလို့ တွက်ထားတာ ..သူ ရောက်လာတာနဲ့ အဆင်ပြေသွားရသည် ။ ကားထဲရောက်တော့ သူက ကားပြန်မောင်းထွက်လိုက်တာနဲ့ ချစ်စု လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည် ။
“ ချစ်စု..ဒို့ကို သတိရနေလားဟင် ..”
“ ဒို့လဲ ချစ်စုကို အရမ်းသတိရ လွမ်းနေတာ …သိလား..”
“ ဟုတ်လို့လား ..”
“ ဟုတ်တာပေါ့..ချစ်စုကို ဒို့ သိပ်ချစ်တာလေ …”
“ ယုံရမှာလား …”
“ ယုန်ရော ကြောင်ရော ရမယ် ….”
“ မနောက်နဲ့ကွာ ..အတည်ပြော..“
“ အတည် ပြည်ကြီးကို ပြန်သွားပြီ …”
“ ကြည့်..သူသိပ်နောက်တာဘဲ …”
ကျောင်းကို ရောက်တော့ သူတို့ လက်ချင်းတွဲထားတာကို ဟေမာငွေနှင်းတို့ တွေ့သွားသည် ..။ ဟေမာငွေနှင်းက “ ဟယ် ..ယူတို့နှစ်ယောက် ဘာညာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ ပေါ့လေ …” ဆိုပြီး တခစ်ခစ် ရယ်မော သဘောကျသည် ..။ မိမိဦးကတော့ ဟန်တောင် မဆောင်နိုင် ..။ မျက်နှာပျက်ပြီး လှည့်ထွက်သွားတော့ သူလဲ ဖရန်ကီ့ကို ကြိုက်နေလို့ ဖြစ်မည် လို့ ဟေမာငွေနှင်းက ပြောသည် ..။ ချစ်စုလဲ မတတ်နိုင် ..။ သူမကျေနပ်လဲ မတတ်နိုင် ..။ မကျေနပ် လဲသေ ..။ ချစ်တာကို တားဆီးလို့ ဘယ်ရမလဲ ..။ ချစ်စုကလဲ ဖရန်ကီ့ကို ချစ် …ဖရန်ကီကလဲ ချစ်စုကို ချစ် ..။ အရမ်း အရမ်း ချစ်မိကုန်ကြပြီလေ ..။
ဖရန်ကီက ဟေမာငွေနှင်း အပါအဝင် ခင်မင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေကို ချစ်စုသဲသဲနဲ့ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ အထိမ်း အမှတ်ပွဲလေး အနေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာ ကျွေးသည် ။ မိမိဦးကို ခေါ်ပေမယ့် မိမိဦးက မလိုက်ဘူး ..။
ပျော်မဆုံး မော်မဆုံး ..။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လမ်းခွဲအပြီး ဖရန်ကီ နဲ့ ချစ်စု လူရှင်းတဲ့ ကန်တော်ကြီးစောင်း တနေရာမှာ ကားရပ်ပြီး စကားပြောကြသည် ..။ ဖရန်ကီ နမ်းတော့ ချစ်စုလဲ တုန့်ပြန်ပြီး ပြန်နမ်းသည် ။ ရင်တွေခုံတာ အရမ်းဘဲ ..။ ဖရန်ကီက နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းစုတ်တာ တခုဘဲ ..။ တခြား ဘယ်ကိုမှ ကိုင်တာတွယ်တာ မရှိဘူး ..။ ဖရန်ကီက ချစ်စု လမ်းထိပ်နားအထိ လိုက်ပို့ပေးသွားသည် ။ အိမ်ရောက်တော့ အရင်တခါလိုဘဲ ဖုတ်ဖုတ်က အရေတွေ စိမ့်ထွက်လို့ ပင်တီလေး ဂွဆုံနေရာမှာ စိုသွားသည် ။ ချစ်စု ဒါကို ကျေနပ်နေသလိုဘဲ ..။ ချစ်စုနဲ့ဖရန်ကီ ဖုန်း အကြာကြီး ပြောကြသည် ..။ ဖုန်းထဲမှာ ချစ်စုကို နမ်းချင်ကြောင်း ပြောတာနဲ့တင် ချစ်စု ဖုတ်ဖုတ်က စိုချင်လာသည် ။ နောက်နေ့မနက်လဲ ဖရန်ကီက သူလာကြိုမည်လို့ ပြောသည် ။
ချစ်စု ဖရန်ကီနဲ့ ဖုန်း အကြာကြီး ပြောနေတာကြောင့် ရေတောင် မချိုးရသေးဘူး ။ မေမေက ထမင်းစားဖို့ လာခေါ်လို့ မေမေ..မမကြီးနဲ့ အတူတူ ထမင်း စားလိုက်ရသည် ။ ဘာမှ စားထားလို့ မဟုတ်ဘဲ စားချင်စိတ် မရှိဘူး ..။ အချစ်စိတ် မွှန်တာ ဖြစ်မည် လို့ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်လဲ တွေးမိရင်း ရယ်မိသည် ။ မေမေက..“ ဟဲ့ ချစ်စု.. အရူးမ.. ကိုယ့်ဖါသာ တယောက်ထဲ ရယ်နေလား..ဘာများရယ်စရာ တွေ့လို့လဲ …”လို့ လှမ်းအော်သည် ။ ကိုယ့်ကုတင် ပေါ်ကိုယ် ငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်း စဉ်းစားနေသည် ။ ဖရန်ကီ့အကြောင်း ..။ သူနဲ့ ဖရန်ကီ့ ချစ်ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်း အကြောင်း ..။ ရှေ့ကို ဘာဆက်ဖြစ်အုံးမလဲ..။ မိမိဦးကတော့ အရမ်း ဂျေဝင်သွားသည် ..။ မခေါ်မပြော ဖြစ်သွားပြီ ။ ဇလပ်ဖြူ ကတော့ သူနဲ့ ဖရန်ကီတွဲတာ မနေ့က တွေ့သွားတော့ သူ့ကို ရန်သူကြီးလို မျက်စောင်းကြီးထိုး..မဲ့ရွဲ့ပြီး မကျေမနပ် ကြည့်သည် ။
ဖရန်ကီ က ကျိကျိတက် ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးသား ..။ သူက မုန့်ဟင်းခါးသည်ရဲ့ သမီး ..။ ဖရန်ကီတို့မိဘက သဘောတူမည်လို့ လုံးဝ မထင်ဘူး ..။ ချစ်စုနဲ့ ဖရန်ကီရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း က ရေရှည်ခံပါ့မလား ..။ အင်း .. ဒါတွေမစဉ်းစားချင်ဘူး ။ မတွေးချင်ဘူး ။ သူ့ကို ချစ်တာဘဲ သိသည် ။ ချစ်တာ တခုထဲ သိတယ် ..။ ဖရန်ကီ့ကို ချစ်သည် ။
“ ချစ်စု ..ဗီဒီယို ငှားလာတယ်..လာကြည့် ..” မမကြီးက လှမ်းခေါ်သည် ။
“ မကြည့်ချင်ဘူး ..”
“ ဟာ ချစ်စုကလဲ..လာပါ..အတူတူ ကြည့်ရအောင် …”
မေမေကတော့ သူ့အခန်းထဲ ဝင်သွားပြီ ..။ မမကြီး ခေါ်လွန်းလို့ သူနဲ့ ဗီဒီယို ထိုင်ကြည့်ရသည် ။ မမကြီးက ဘာကြောင့် ငှားလာသလဲ မသိဘူး ..။ တအားကြမ်းတဲ့ အမေရိကန် ရုပ်ရှင် ..။ စဖွင့်ကထဲက ဇာတ်လိုက် မင်းသမီးလေးက အိပ်ရာထဲ လက်နဲ့ အာသာဖြေတာ ..။ နောက်တော့ ပထွေးကြီးနဲ့ ညိစနွ်းတာ ..။ ဒါလဲအသေးစိတ် တွေ ပြတာ ..။ မမကြီးလဲ ဒါတွေကို စိုက်ကြည့်ပြီး သဘောတွေ ကျနေသည် ။ ချစ်စုလဲ အပျိုကြီး လိင်ကိစ္စတွေ သဘောကျနေတာ စိတ်ထဲမှာ ကျိတ်ပြီး ရယ်ချင်နေမိသည် ။ ချစ်စုလဲ ဒီရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ရင်း စိတ်တွေ တမျိုးကြီး ဖြစ်လာသည် ။ မမကြီး ဟာကလဲ ဆိုးလိုက်တာ..လို့ ပြောရင်း ဆက်မကြည့်တော့ ..။ အိပ်ရာထဲ ရောက်တော့လဲ စောစောက လိင်ဆက်ဆံတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ပြန်မြင်ယောင်မိပြီး ဖရန်ကီနဲ့ နမ်းခဲ့ဘူးတာတွေ ပြန်သတိရသည် ။ ပေါင်ကြားက အဖုတ်ဆီက စိုတိုတို ခံစားရလို့ လက်နဲ့ စမ်းလိုက်မိသည် ။
အို..။ အရေတွေ စိုနေတယ် …။ မမကြီးရဲ့ ရုပ်ရှင်ကြောင့် စိတ်ထကြွလို့ ဖြစ်မည် …။
စမ်းကြည့်မိတဲ့ လက်ချောင်းတွေက အဖုတ်ဆီက မခွာချင် ..။ လက်ကို ပြန်ရုတ်ရမှာ ဝန်လေးနေသည် ။ စမ်းရင်း.. စမ်းရင်း ပွတ်သပ်မိလာရသည် ..။ စောစောက ရုပ်ရှင် အစမှာ ဇာတ်လိုက် မင်းသမီးလေး သူ့အဖုတ်ကိုသူ လက်နဲ့ ပွတ် အာသာဖြေသလို လုပ်မိနေပြီ ..။ အဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားနုနုလေးတွေ ကို ပွတ်နေရင်း ထပ်ထပ် ပွတ်ချင်လာမိသည် ..။ ဖရန်ကီက ပွတ်ပေးနေသလို စိတ်ကူးယဉ်လိုက်မိသည်..။ ဖိပွတ်ရင်း ထပ်ပွတ်ချင်ရင်း..။ ပွတ်တာတွေကြမ်းလာရော….။ အဖုတ်ထဲက တအား လှိုက်လှိုက် ယားတက်လာသည် …။ တခုခု နဲ့ ထိုးထည့် ချင်စိတ်ပေါက်လာသည် ..။ အဖုတ်ကို အနာတရ ဖြစ်မှာလဲ စိုးသည် ။ လက်ချောင်းနဲ့ စိုရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်ထဲ မသိမသာ စမ်းထိုးကြည့်သည် ..။ အင်း…အိပ်လို့ မပျော်ဘူး ..။ လူးလိုက် လှိမ့်လိုက် ..။ မနက်ကျတော့ နှိုးစက် ပေးထား တာတောင် နှိုးစက်ကို လှမ်းပိတ်ပြီး ပြန်အိပ်ချင်နေသည် ။ နောက်တော့ ဖရန်ကီ လာကြိုမည် ဆိုတာ သတိရပြီး
ရေအမြန်ချိုး အဝတ်အစားလဲရသည် ..။ ဖရန်ကီသည် လမ်းထိပ်မှာ ချစ်စုကို စောင့်နေသည် ။
ချစ်စု ဖရန်ကီ့ ကားကြီးဆီကို ခပ်သွက်သွက်လေး လှမ်းသွားလိုက်သည် ။ ဖရန်ကီက ..“ ချစ်စု အရမ်း လှတာဘဲ …” လို့ ပြောသည် ။ ချစ်သူရဲ့ ချီးမွမ်းတာကို ခံရလို့ ချစ်စု အရမ်းကျေနပ်သည် ။ လေအေးစက် ဖွင့်ထားတဲ့ ဖရန်ကီရဲ့ ဂျက်ဂွားကားနက်ကြီးသည် လူတွေအများကြီး ရှိနေတဲ့ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်ရှေ့က ညင်ညင် သာသာလေး ဖြတ်သွားသည် ။ ဖရန်ကီ က ရယ်စရာတွေ ပြော..ချစ်စုက တခစ်ခစ်နဲ့ သဘောကျ ..ကမ္ဘာလောက ကြီးက သာယာလှပနေသည် ။ ကျောင်းသွားတာ ဖရန်ကီနဲ့ တွေ့ချင်လို့ ..။ ချစ်စု စိတ်တွေလေ နေသည် ..။ အတန်းလဲ မတက်ချင်ဘူး ..။ မချစ်စဖူး ချစ်ပြီး ချစ်သူနဲ့ ပြုံးပျော်လို့ အားမရသေးဘူး …။
ကျောင်း ကင်တင်းက ထိုင်နေကျ ဆိုင်ထဲ ချစ်စု နဲ့ ဖရန်ကီ ဝင်သွားကြတော့ ဟေမာငွေနှင်းနဲ့ မိမိဦးတို့ ရှိနေသည် ။ ဟေမာငွေနှင်းက သူတို့ကို တွေ့တွေ့ချင်း လှမ်းနုတ်ဆက်ပြီး သူတို့နဲ့ လာထိုင်ဖို့ လက်ပြပြီး ခေါ်သည် ။ မိမိဦးကတော့ သူတို့ကိုတွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းဘဲ ထ ထွက်သွားလိုက်သည် ။ ဟေမာငွေနှင်း နဲ့ သူတို့ ထိုင်ပြီး အတူတူ အစားစားကြသည် ။ ဟေမာငွေနှင်းက “ ယူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ သတင်း အရမ်းကြီးတာဘဲကွာ.. လူတိုင်းရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ယူတို့နှစ်ယောက် အကြောင်း ပြောဆိုနေတာ ကြားနေရတယ်…” လို့ ပြောပြသည် ..။ ကျောင်းက ပြန်တော့ ဖရန်ကီက တနေရာရာ သွားရအောင်လို့ ပြောသည် ။ ချစ်စု လန့်သွားသည် ။ ဖရန်ကီ နဲ့ ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ မတွေ့ချင်ဘူး ..။ ဖရန်ကီ့အနမ်းတွေကြောင့် ချစ်စု စိတ်တွေ အရမ်း ယိမ်းယိုင်ခဲ့ရတာ ချစ်စု ကိုယ့်ဖါသာ အသိဆုံးမို့ပါ ..။ သူနမ်းရင် ချစ်စု ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထရသည် ။ စိတ်တွေလှုပ်ရှားလွန်းလို့ ထကြလွန်းလို့ ပင်တီဂွဆုံမှာ စိုစိုရွှဲရသည် ။ စိတ်တွေ ကြွတက်လာရင် ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်တော့ ဆိုပြီး သူ့အနမ်းတွေ အကိုင်အတွယ်တွေထဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် မျှောပစ်လိုက်ချင်မိသည် ။
“ ဘယ်သွားမှာလဲဟင် …”
“ ချစ်စုကို ပြစရာ ရှိလို့ …”
“ ဘာပြမှာလဟဲင် …ပြော…ပြော…သိချင်တယ် …”
“ ဟိုရောက်တော့ သိမှာပေါ့ …”
“ ဘယ်မှာ ပြမှာလဲ …”
“ ဒို့ အိမ်မှာပေါ့ ….”
“ အိမ်မှာ ဘယ်သူတွေ ရှိလဲဟင် ….”
“ မာမီ ရှိမှာပေါ့ ..ဒက်ဒီကတော့ ဟိုတယ် အသစ် ဆောက်တဲ့ အလုပ်နဲ့ ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာ ရောက်နေတယ်
ဖရန်ကီရဲ့ ဂျက်ဂွားအနက်ကြီး သူတို့ ခြံဝင်းတံခါးဝကို ရောက်တာနဲ့ တံခါးကြီးတွေ ပွင့်လာသည် ..။ ကာကီ ရောင်ဝတ် ခြံစောင့်နှစ်ယောက် က ခါးညွှတ်ကိုင်းပြီး နုတ်ဆက်ကြသည် ။ ပြုံးပြကြသည် ။ ဖရန်ကီက ခြံထကဲ လမ်းအတိုင်း ရဲတိုက်ကြီးလို ကြီးမားခန့်ထယ်လှတဲ့ သူတို့ တိုက်ကြီးရဲ့ ဆင်ဝင်ကြီးအောက်ကို မောင်းသွား လိုက်သည် ..။ ကားရပ်လိုက်တာနဲ့ တိုက်ကြီးထဲက လူတယောက် ထွက်လာသည် ။ ခေါင်းဖြူဖြူ မျက်မှန်ထူထူနဲ့ လူကြီးတယောက် ..။
“ သားသား …ဘကြီး ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ..”
“ ကျနော် ချစ်စုကို ကျနော့် ငန်းနက်ကြီးတွေ ပြမလို့ …”
“ ရတယ်..သားသား…သူတို့ အေးအေးဆေးဆေး ရှိကြပါတယ် …”
ဖရန်ကီက ချစ်စုကို ဒီလူကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးသည် ။
ဒီခေါင်းဖြူ မျက်မှန်ထူကြီးရဲ့ နံမည်က ဘကြီးကျော်…တဲ့ ..။ ဖရန်ကီတို့ ဒက်ဒီ..မာမီတို့ရဲ့ မန်နေဂျာ လူယုံတော်ကြီး …တဲ့ ။
ဖရန်ကီ က သူတို့ မိသားစု ချစ်တဲ့ ငန်းနက်ကြီးတွေကို ပြသည် ။ တိုက်ကြီးရဲ့ ဘေးတဖက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ ရေကန် လှလှလေးထဲမှာ ရေကူးနေတဲ့ ငန်းအနက်ကြီး လေးကောင် ကို ဖရန်ကီနဲ့ ချစ်စု သွားကြည့်ကြသည် ..။
“ အရမ်းလှတဲ့ အကောင်ကြီးတွေနော် …ချစ်စု က ငန်းအဖြူရောင်တွေဘဲ တွေ့ဘူးတာ …” ဖရန်ကီနဲ့ ချစ်စု ရေကန်လေးပေါ် ဖြတ်ထိုးထားတဲ့ တံတားအဖြူလေးပေါ်မှာ ရပ်ပြီး စကားပြောကြသည် ..။ အလုပ်သမားတယောက်က ပန်းခင်းကြီးကို ရေလောင်းနေသည် ..။
“ အော် ..ချစ်စုကို ဒို့ ငါးတွေ ပြရအုံးမယ် …”
“ ဟင်..ယူ့မှာ ငါးတွေလဲ ရှိတယ်..ဟုတ်လား …”
“ အင်း …ရွှေငါးမျိုးစုံ ရှိတယ် …”
“ ဟယ်…ကြည့်ချင်လိုက်တာ ….”
“ လာ..ချစ်စု …ဒို့ လိုက်ပြမယ် ….”
ဖရန်ကီက ချစ်စု လက်ကို ဆွဲပြီး ခြံကြီးရဲ့ အနောက်ဖက်ကို ခေါ်သွားသည် ..။ အဆောက်အဦးကြီးတခုကို ရောက်လာသည် ..။ ခေါင်မိုးအစိမ်း နဲ့ အဆောက်အဦး ရှည်ရှည်ကြီး ..။
“ ဒါက ဘာကြီးလဲ..ငါးတွေက ဒီအထဲမှာ လား…”
“နိုး …ဒါက ကားတွေ ထားတာလေ ..ကား ဂရပ်ဂ်ျ ..ငါးတွေက အဲ့နောက်မှာ ..”
ကားဂိုဒေါင်ကြီးဘေးက အုတ်လမ်းလေးအတိုင်း အနောက်ဖက်ကို သွားလိုက်တော့ အိမ်လေးတလုံး ကို ဘွားကနဲ တွေ့လိုက်ရသည် ..။ ဖရန်ကီက အိမ်လေးထဲကို ချစ်စုကို ခေါ်သွားသည် ..။
“ ဟယ် …လှလိုက်တာ …”
လူတရပ်ကျော် မှန်ကန်ကြီးတွေထဲ ရွှေငါး ရောင်စုံတွေ ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ ချစ်စု..ဒါက Oranda ..ဒါတေကွ ..Lion Head…ဒီဖက် ကန်ထဲက ကောင်ကြီးတွေက Oscar…တဲ့ … Oscar တွေက
..Agressive ဖြစ်တယ် … တခြားငါးတွေကို စားတယ် .. သူတို့ကို သပ်သပ် ထားရတယ် ….”
ဖရန်ကီက ချစ်စုကို ပြတဲ့အနေနဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေကို အော်စကာငါးကြီးတွေ ရှိနေတဲ့ ကန်အပေါ် ဖက်ကို ထည့်ပြလိုက်သည် ။ ငါးကြီးတွေက တရှိန်ထိုး ဖရန်ကီ့လက်ချောင်းတွေကို ထိုးဟပ်သည် ။ ချစ်စု လန့်သွားသည် ..။ ငါးကြီးတွေက ဖရန်ကီ့လက်ချောင်းတွေကို ကိုက်လိုက်ပြီ ထင်လို့ ..။ ဖရန်ကီက ရယ်သည် ..။
“ သူတို့က ကိုက်ချင်တယ်..တွေ့လား ….ဟားဟား…”
ငါးတွေ ထားတဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ ငါးတွေကို ထိုင်ကြည့်ဖို့ လားမသိဘူး ..။ ဆိုဖါအရှည်ကြီးတလုံး ရှိနေသည် ။ အဲဒီဘေးမှာ ရေခဲသေတ္တာတလုံး ..။ ဖရန်ကီက ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်ပြီး ကိုကာကိုလာ အချိုရည်ဘူးကိုထုတ်ပြီး ချစ်စုကို ပေးသည် ..။ ဆိုဖါကြီးပေါ်မှာ အတူတူပူးကပ်ပြီး ထိုင်ကြသည် ..။ လူးလာကူးခတ်နေကြတဲ့ ရွှေငါးတွေကို ထိုင်ကြည့်ကြသည် ။ ချစ်စု မသွားချင်တဲ့ ဆိတ်ကွယ်ရာနေရာ ကို ချစ်စုတို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်နေကြပြီ ..။
ချစ်စု နဲ့ ဖရန်ကီ ပူးပူးကပ်ကပ် နေကြတော့ မနမ်းမိဘဲ ဘယ်နေမလဲ ..။ ဖရန်ကီ နမ်းလာတော့ ချစ်စုက တုန့်ပြန် နမ်းမိသည် ..။ ဖွဖွလေး ညင်ညင်သာသာလေး မထိတထိလေး နမ်းကြတာ ..။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအနမ်းတွေက ရပ်လို့မရဘူး ဖြစ်လာသည် ။ မထိတထိ ကနေ မိမိရရတွေ ဖြစ်လာကြသည် ။ အသက်ရှုပြင်းလာသလို အနမ်း တွေကလဲ ဖွဖွလေး မဟုတ်တော့ဘူး ..။ စောစောက အော်စကာငါးကြီးတွေလို ဖြစ်လာသည် .။ အငမ်းမရ ငုံဟတ် စုတ်ယူလာသည် ။ ဖရန်ကီရဲ့ လျာက ချစ်စု ပါးစပ်ထဲက ချစ်စုလျာလေးကို လာကလိသည် ..။ လျာတွေ ပူးကပ် လူးလှိမ့် လိန်ယှက်ကုန်တဲ့အချိန် ဖရန်ကီ သည် ချစ်စု ခါး သိမ်သိမ်လေးကို ဖက်ထားရာက ခါးလေးအောက်ဖက်ကို လက်တွေ ရွေ့သွားပြီး ချစ်စု တင်ပါးအိအိတွေကို ဆုပ်နယ်ကိုင်တွယ်လာသည် ။ ချစ်စုလဲ သူ့အနမ်းတွေမှာ မိန်းမော နေပြီး သူ့ကို ဘာမှ မတားဆီးမိဘူး ..။ သူ့အနမ်းတွေက ချစ်စု နှုတ်ခမ်းတွေ ဆီက ချစ်စုရဲ့ လည်တိုင်ဖွေးဖွေးလေး ဆီကို ရွေ့သွားသည် ..။ ချစ်စုနှုတ်ခမ်းတွေ လဲ ထူအမ်းကုန်ပြီလေ ..။လည်တိုင်ကို လျောက်နမ်းနေတော့ ယားကျိကျိ နဲ့ ကြက်သီးတွေ ထ..ရင်တွေ ဖိုရသည် ..။
သူ ချစ်စု အကျ င်္ီပွပွအောက်ဖက်ကနေ သူ့လက်ကို အထဲကို သွင်းပြီး ချစ်စု နို့တွေကို စမ်းကိုင်လာတော့..“ ဟိတ်..မကဲနဲ့ကွာ …” လို့ ချစ်စု သူ့ကို ပြောလိုက်သည် ..။ သူက ပြန်မပြော နားမထောင် ဆိုတဲ့ လူစားမျိုး ..။ ချစ်စု ရင်စိုင်တွေကို ဆုပ်နယ်နေသည် ..။ ဘရာလေးပေါ်က ကိုင်လို့ အားမရတော့ ဘရာထဲကို လက်သွင်းပြီး စမ်းသည် ..။ သူ့လက် ဘရာထဲ သွင်းနေတဲ့ဆီ စိတ်အာရုံရောက်နေတုံး နောက်ထပ် စစ်မျက်နှာတခုနဲ့ ရင်ဆိုင်လိုက်ရပြန်သည် ..။
အောက်ပိုင်း စစ်မျက်နှာ ပါ ..။ လျော့ရည်းနေတဲ့ ချစ်စု ထမိန်စလေးကို ဆွဲဖြေဖြုတ်ပြီး ထမိန်ထဲ သူ့နောက် လက်တဖက်ကို သွင်းပြန်လို့ ချစ်စုလဲ ဟိုဖက်တားရ ဒီဖက်ကာရ ဖြစ်နေသည် ..။
“ အို..ယူ သိပ်ကဲနေတာဘဲကွာ…အို..ဟင့်ဟင့် …” “ ချစ်တယ် ..ချစ်စုရယ် ….အရမ်းချစ်တယ် …..”
ဖရန်ကီ့အကိုင်အတွယ်တွေက တဖြေးဖြေး ကြမ်းလာသည် ။ ချစ်စု အကျ င်္ီလေး ကိုယ်ပေါ်ကနေ ကွာကျ ဖယ်ခွာသွားရသည် ..။ နောက်က လိုက်သွားတာက ဘရာ ဖြူဖြူလေး .။ အပေါ်ပိုင်း အဝတ်မဲ့သွားတဲ့ ချစ်စုလဲ ရှက်လို့ သူ့ရင်ခွင်ထဲ အတင်းတိုးသည် ..။ ဒီလိုတိုးတော့လဲ ချစ်စုရင်သားစိုင် တင်းတင်းလေးတွေ နဲ့ သူ့ ရင်ဘတ်ကြီးက ဖိမိပူးကပ်နေသည် ..။ သူ့လက်တဖက်က ချစ်စု ရင်သားတွေကို ကိုင်သည် ..။ သာသာလေး ဆုပ်နယ်တာ ..။ သူ့လက်ချောင်းတွေက ရင်သီးဖုလေးတွေကို စမ်းနေသည် ။ ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်နေသည် ..။ ရင်သီး ဖုလေးတွေက ကာမစိတ် ထကြွနေလို့ တင်းမာ ထောင်ထနေသည် ..။ ချစ်စု မုချ ပြောရဲတာ ချစ်စု ဖုတ်ဖုတ်လေး သည် အခု အချိန်အခါမှာ စိုစိုရွှဲနေလောက်ပြီ …။ ဖရန်ကီ သိသွားသည် ..။ ချစ်စု စိုရွှဲနေတာကို ..။ သူ့လက်က ပင်တီ အထဲကို သွင်းထိုးပြီး ဖုတ်ဖုတ်ကို စမ်းလို့ ..။
ထမိန်ကလဲ ပြေကျ .. ပင်တီလေးကိုလဲ သူ ဆွဲချွတ်.. ချစ်စု တကယ့်ကို အဝတ်မဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး ဘဝကို ရောက်လို့နေပြီ ..။ ဖရန်ကီသည် ချစ်စုကို ဆိုဖါကြီးပေါ် ပက်လက်လှဲစေပြီး သူက အပေါ်က အုပ်မိုးထားသည် ..။ ချစ်စု ရင်သားတွေကို စို့သည် ..။ ချစ်စု သူ့ကို မလုပ်နဲ့ကွာ.. တော်ပြီ.. ရပ်တော့ လို့ တားဆီးပေမယ့် မရတော့ ..။ သူ့ကိုယ်ကို အောက်ပိုင်းကို လျောဆင်းသွားပြီး ချစ်စု ဖုတ်ဖုတ် ကို သူ နမ်းနေပြီ …။
အာ..ဟာ….ဟိတ်……အို . . .။
သူ့လျာကြီးက အပြားလိုက်ကြီး ချစ်စု အင်္ဂါစပ် အကွဲကြောင်းကို ယက်နေသည် ..။ လျာပြားပြားကြီးက ချစ်စု အဖုတ်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားနုနုလေးတွေကို ဖိဖိ ပွတ်တိုက်သွားတော့ ချစ်စု ခါးလေးကော့ပြီး တုန်ခါနေရသည် ..။ အို.. ဖရန်ကီရယ် .. ချစ်စုကို မသနားတော့ဘူးလား …။ ဖရန်ကီရဲ့ လျာထိပ်က ချစ်စု အစိကို ထိုးကလော်နေသည် ..။ ချစ်စု အင်္ဂါစပ်လဲ တအား ယားလာသည် ..။ အဲဒီယားတာကို ဖြေဖျောက်ပစ်လိုက်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်နေသည် ..။ ခံချင်စိတ်တွေ မတရားကြီး ဖြစ်ပေါ်နေသည် ..။ ခံချင်နေသည် ..။ အရမ်း ..။ ကြောက်လဲကြောက်သည် ..။ ဘာကို ကြောက်လဲ..။ နာမှာ..စောက်ပတ်လေး ပြဲသွားမှာ ..ဘိုက်ကြီးမှာ …။ ချစ်စုရဲ့ အဖုတ်ကို ယက်ရာက သူ ချစ်စု နှုတ်ခမ်း တွေကို ပြန်လာ စုတ်နမ်းသည် ..။ သူ့လျာကြီးနေရာမှာ အခု နေရာဝင်ယူ ရောက်ရလှိာတာက သူ့ မာမာ အချောင်းကြီး ..။ ချစ်စု အရမ်းလန့်သွားသည် ..။ သူ…သူ…ချစ်စု ကို ဟိုဒင်း လုပ်တော့မည် …။
“ အို..မလုပ်နဲ့..မလုပ်နဲ့ ….”
သူ့အချောင်းကြီး ကို ကြည့်မိလိုက်ပြီး လန့်သွားလို့ အော်လိုက်မိတာ ..။ သူ့ရင်ဘတ်ကိုလဲ တွန်းတား မိသည် ..။
“ မနာစေရဘူး..ချစ်စုရယ်..ချစ်စု မနာအောင် လုပ်ပေးမှာ ..သိလား ..မကြောက်နဲ့ …”
“ အို …ဘိုက်..ဘိုက်ကြီးလိမ့်မယ် ….” “ မကြီးစေရပါဘူး..ချစ်စု ….”
သူ့အတန်မာမာကြီးနဲ့ ချစ်စု အဖုတ်ထဲကို ဖိသွင်းနေသည် ..။ အိုး …ဟင့် . .။
အောက်ဖက် စစ်မျက်နှာမှာ ရင်ဆိုင်နေရတုံး အထက်ဖက်မှာလဲ တဖက်က ကျူးကျော်မှုတွေနဲ့
ကြရုံ ပြန်သည် ..။ တင်းထောင် ဖူးထနေတဲ့ ချစ်စုရဲ့ နို့သီးနီညိုညိုလေးတွေကို တချိန်ထဲမှာ ဖရန်ကီ့ နှုတ်ခမ်း ထူထူတွေက ငုံလာ စို့လာလို့ ..။ အောက်ဖက်မှာလဲ မှိုပွင့်ပုံစံ ထိပ်ဖူး အထစ်ကြီးက အတင်းကြီးဖိဝင် လာသည် ..။ ချစ်စုရဲ့ နှုတ်ခမ်းသား နုနုလေးတွေထဲ ထိပ်ဖူး အထစ်က တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး တဖျစ်ဖျစ် နဲ့ ဝင်ရောက်လာသည် ။ နမ်းရုံ သက်သက် ဆိုပြီး ဘာမှ မလုပ်ခဲ့တဲ့ မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်ရိုးလေး ပုံနဲ့ ဖရန်ကီသည် လုပ်မယ့် လုပ်တော့လဲ ချစ်စုကို အတင်း ထည့်သွပ်နေပြီ ..။တသက်လုံး ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ အပျိုစင် ဂိတ်တံခါးကို အတင်း တွန်းဖွင့် ဝင်ရောက်နေသည် ..။ အထိအတွေ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ ချစ်စုမှာ လိုလဲ လိုချင် ကြောက်လဲ ကြောက်ပေါ့ ..။ အတင်းကြီး ဝင်လို့မရဘဲ တစ်လစ်ကြီး ဖြစ်နေတော့ ဖရန်ကီသည် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် တွေ နဲ့ မရရအောင် ဖိထိုးသွင်းသည် ..။ သူ ဖိဖိ ထိုးလိုက်တိုင်း ချစ်စု အဖုတ်က အရေတွေ တရွှမ်းရွှမ်း ယိုစီးထွက်သည် ..။ ဒီအရေ တွေကြောင့်ဘဲ ဖရန်ကီ့ထိပ်ဖူးက ချဉ်းနင်း ဝင်ရောက်လာနိုင်သည် ။
ချစ်စုမှာတော့ သူ့ကို တအားကြီးဖက်ထားရင်း သူလုပ်သမျှကို ခံနေရသည် ..။ ချစ်သူကို အလိုလိုက်မိပြီ..။ ချစ်သူစိတ်ကြိုက် သူ့တကိုယ်လုံးကို ခြယ်လှယ်ခွင့် ပေးလိုက်မိပြီ ..။ သူ့အတန် တုတ်တုတ်ကြီးက ချစ်စုအတွင်းသား တွေကို ထိုးခွဲပွတ်တိုက်လို့ အတွင်းပိုင်းကို ဝင်သည် ..။ နာကျင်မှု ဝေဒနာနဲ့အတူ ကောင်းခြင်း အရသာထူးက အတူတူ တွဲလိုက်ပါလာသည် ..။ ဖရန်ကီက ဖြေးဖြေးချင်း အသွင်းအထုတ် လုပ်နေသည် ..။ ကာမရဲ့ အရသာထူးနဲ့ ချစ်သူရဲ့ ယုယမှုတွေကို ရရှိခံစားရတာနဲ့ တပြိုင်နက် ချစ်စုရဲ့ အပျိုစင် ဘဝလေးလဲ ဆုံးရှုံးသွားသည် ..။ အတန်ညိုညို တုတ်တုတ်ကြီး အပြည့်အသိပ်ဘဲ ချစ်စု ရဲ့ အဖုတ်ထဲ စိုကဝ်င်နေသည် ။ အို..ချစ်စု အဖုတ်လေးတော့ ပြဲပြီလား မသိတော့ပါဘူး . .။ ဖရန်ကီက ချစ်စု တင်ပါးတွေ အောက်ကို သူ့လက်ကိုသွင်းပြီး တင်ပါးတွေကို တအား ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဖိဖိသွင်းနေသည် ..။
ချစ်စု တအားအား တအီးအီး ညည်းနေတုံးဘဲ ဖရန်ကီရဲ့ အရေပျစ်ပျစ်တွေ ချစ်စုရဲ့ ဘိုက်သားချပ်ချပ်လေး
ပေါ်ကို တဖျတ်ဖျတ် နဲ့ ပန်းထွက်လာတာ တွေ့လိုက်ရသည် ..။ ဖရန်ကီ ခေါင်းကိုမော့ကာ အရိုင်းတကောင်လို အော်ညည်း ရင်း ချစ်စု ကိုယ်ပေါ်ကို လဲကျလာသည် ..။ ဒီအချိန်မှာ သူတို့ ရောက်နေတဲ့ ငါးကန်တွေ ထားတဲ့ အိမ်ကလေး ထဲကို တစုံတယောက် ဝင်လာတဲ့ ခြေသံလိုလို ကြားလိုက်ရလို့ ချစ်စုလဲ ပုံရက်သား ကျနေတဲ့ ထမိန်လေးကို ကမန်းကတန်း ကောက်ယူပြီး ဆွဲဝတ်လိုက်မိသည် ..။ အင်္ကျီဝတ်ချိန် မရလိုက် ..။
“ ဟင် …ဘာလုပ်နေကြတာလဲ ..”
ဖရန်ကီရဲ့ မာမီ ခါးကြီးထောက်လို့ သူတို့ကို ကြည့်နေသည် ..။
“ သားသား..မင်း ဘယ်က ဟာတွေ ခေါ်လာပြီး ဆက်စ်လုပ်နေတာလဲ …ဟေ့..မိန်းကလေး ..မင်း သူများ အိမ် မှာ ကိုယ်တုံးလုံး နဲ့ အရှက်မရှိဘူးလား..ဘယ်လို အောက်တန်းစားတွေပါလိမ့်…”
“ အို..အို..ကျမ…ကျမ ….”
ချစ်စု ခြုံးပွဲချ ငိုလိုက်မိသည် ။
“ ဟိတ်..ငိုမနေနဲ့..ကျက်သရေ မရှိလိုက်တာ…မသာအိမ် ထင်နေလား …”
“ မာမီ…ဒါ ကျနော့်ကျောင်းက ကျနော့်ရီးစား ..ကျနော် လက်ထ်မှာ..သူ့ကို ဘာမှ မပြောပါနဲ့ ..ကျနော် သူ့ကို
ဖရန်ကီက သူ့အမေကို ပြန်အော်သည် ..။
“ ချစ်စု အဝတ်ပြန်ဝတ် ….”
ချစ်စုရဲ့ ဘရာ ချိတ်ကို ဖရန်ကီက ပြန်တပ်ပေးသည် ..။
“ သားသား…မင်းတော့ အမှားကြီး မှားနေပြီ …ကိုယ်နဲ့ အဆင့်တူတဲ့ လူတွေကို သွား အရောဝင်မိနေပြီ သားသား
“ မာမီ ..ဒါ သား လက်ထပ် မယ့် ချစ်သူပါ ….မရိုင်းပါနဲ့ …”
“ ဖရန်ကီ …သားသား..ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ..မင်း ယရမှာက ဇလပ်ဖြူလေ ..ဇလပ်ဖြူနဲ့ မင်းကို ပေးစားဖို့ လပ်ုထားပြီးပြီလေ ..မင်း ဒို့စကား နားထောင်ရမယ် …”
“ မာမီ…ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ ..မကြားချင်ဘူးဗျာ…..ရပ်တော့ …”
“ သားသား..ဇလပ်ဖြူကိုဘဲ ယူရမယ် …ဇလပ်ဖြူကိုဘဲ ယူရမယ် ….ဇလပ်ဖြူ …”
“ မာမီ ရူးနေလား …ရှပ်အပ်ပ် …”
ဖရန်ကီက ချစ်စု လက်ကို ဆွဲပြီး အိမ်လေးထဲက ထွက်သည် ..။ သူ့အမေကြီး အနောက်က ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ပါလာသည် ..။ အရူးမကြီး တယောက်လိုဘဲ ဇလပ်ဖြူကိုဘဲ ယူရမည် ဆိုတာကို တတွတ်တွတ် ရွတ်နေသည် ..။ ဖရန်ကီက ကားဂိုဒေါင်ရှေ့မှာ ရှိနေတဲ့ ကားတစီးပေါ် တက်လိုက်သည် ..။ချစ်စုလဲ သူ့နောက် လိုက်တက်သည် ။ ချစ်စုလဲ ရေရေလည်လည် ငိုမိသည် ..။ အပျိုရည် ပျက်တဲ့နေ့.. အရှက်ကွဲတဲ့နေ့ …။ ဘယ်သူမပြုမိမိမှု
..သူဌေးသား ကို ချစ်ချင်တာကိုး ..။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖရန်ကီက ချစ်စုကို ကတိတွေ တပုံကြီး ပေးသည် ..။ ချစ်စုကို သူ တကယ်ချစ်သည်…တဲ့ ..။ တနေ့ ကျရင် လက်ထပ်ကြမည်…တဲ့ ..။ ဖရန်ကီ နဲ့ လမ်းဘေး ကော်ဖီဆိုင်
သေးသေးလေး တခုမှာ ကော်ဖီ ဆင်းသောက်သည် ..။ ချစ်စုပုံစံက ကပိုကရိုနဲ့ ..။ အဝတအ်စားတွေလဲ ကြေမွလို့ ..။ အဝတ်အစား ကြေမွတာထက် ချစ်စုရဲ့ အပျိုစင်ဘဝလေး ချေမွခံလိုက်ရတာက ဆိုးသည် ။ ဒီထက် အိုဆိုးတာက သူတို့ကို ကော်ဖီဆိုင်ဘေးက ဒန်ပေါက်ဆိုင်ကနေ လူတယောက်က စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်နေသည် ..။
“ ဟင် …ကိုသူရိန်ထွန်း ……”
ဖရန်ကီသည် ချစ်စု ခါးလေးကို ဖက်ထားနေသည် ။ ချစ်စုလဲ ငိုထားလို့ မျက်လုံးတွေ နှာခေါင်းတွေ နီရဲနေသည် ..။ ကော်ဖီဆိုင်ထဲက လူငယ်တွေကလဲ ကြည့်လိုက်ကြတာ အရမ်းဘဲ ..။ သူရိန်ထွန်း ကြည့်နေတာက ချစ်စုအတွက် ငရဲ ဘဲ ..။ သူရိန်ထွန်းသည် စိတ်ပျက်နေတဲ့ ပုံနဲ့ ကြည့်နေသည် ..။ မေမေနဲ့ မမကြီးတို့ကို ပြန်တိုင်တော့မလား မသိဘူး …။
ဖရန်ကီက ချစ်စုကို လမ်းထိပ်အထိ လိုက်ပို့ပေးသည် ..။ သူ့အမေ ပြောဆိုရိုင်းပြတာတွေကို ဂရုမစိုက်ဖို့ ပြောသည် ..။ ချစ်စု ကို သူ တကယ်ချစ်..အရမ်းချစ်တာမို့ သူ့မိဘတွေ သဘောမတူလဲ လက်ထပ်မည် လို့ အထပ်ထပ် အကြိမ်ကြိမ် ပြောသည် ..။ ချစ်စုကလဲ သူ ပြောတာတွေကို ယုံသည် ။ ချစ်စု ဖရန်ကီ အချစ်ကြမ်းထားခဲ့လို့ လမ်းလျောက်ရင် နာနေသည် ..။ အိမ်ထဲကို အဝင် မေမေနဲ့ မမကြီးတို့ ရှိမနေလို့ တော်သေးသည် ..။ ရေအေးအေးနဲ့ ရေချိုးလိုက်ရင် ပေါင်ကြား ပိပိက နာနေတာများ သက်သာသွားမလားလို့ ထင်မိပြီး ရေချိုးလိုက်သည် ..။ ရေချိုးလိုက်တော့ အဲဒီနေရာတဝိုက်က ညစ်ပေနေတာတွေ သန်စ့ င်သွားပေမယ့် နာကျင် ကျိန်းစပ်တဲ့ ဝေဒနာ ကတော့မပျောက်သွားဘူး ။
အိပ်ရာထဲမှာဘဲ ခွေနေမိသည် ..။ ဖရန်ကီရဲ့ အကိုင်အတွယ် အထိအတွေ့ တွေကို ပြန်သတိရနေမိသည် ။ ပိပိက နာကျင်ပေမယ့် သူပေးသွားတဲ့ အထိ အတွေ့ အရသာတွေက နာကျင်တာထက် ပိုလို့ ဖရန်ကီ့ကို လွမ်းသလိုကြီး ခံစားရသည် ..။ ဖရန်ကီရဲ့အမေရဲ့ ဆက်ဆံရေး ကျဲတာကို နာကျည်းပေမယ့် ဖရန်ကီက ချစ်စုကို ချစ်ဖို့ဘဲ အရေးကြီးတာ မဟုတ်လား ..။ ဖရန်ကီ့အချစ်ကို ချစ်စု ယုံသည် ။ ချစ်စု ကို သူ တကယ် ချစ်တာ ..။
မေမေနဲ့ မမကြီး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ချစ်စုက ကုတင်ပေါ် စောင်ခြုံကွေးနေလို့ နေမကောင်းဘူးလား ဆိုပြီး လာမေးကြ နဖူးစမ်းကြ လုပ်ကြသည် ..။ ချစ်စု က ဆေးသောက်ထားလို့ အိပ်လိုက်တော့မယ်လို့ ပြောပြီး အိပ်ခန်းထဲက မထွက်တော့ဘူး ..။ ဖရန်ကီ့ ရင်ခုံစရာ အထိအတွေ့တွေကို ပြန်ပြန် စဉ်းစားတော့ စိတ်တွေက တမျိုးကြီး ဖြစ်လာရပြီး ပေါင်ကြားက ပိပိကလဲ ယားသလိုလို တခုခုကို လိုချင်သလိုလို ဖြစ်လာလို့ လက်နဲ့ စမ်းကိုင် မိတော့ အရေတွေ စိုနေတာ သိလိုက်ရသည် ..။
နောက်တနေ့မှာ ချစ်စု ကျောင်းမတက်ဘူး ..။ ပိပိ နာရက်ကြီးနဲ့ လမ်းဝေးဝေး မလျောက်ချင်ဘူး ..။ ဖရန်ကီက ဖုန်းဆက်သည် ..။ ချစ်စုကို တွေ့ချင်ကြောင်း ပြောသည် ..။ ချစ်စုက ဒီနေ့တော့ မတွေ့တော့ဘူးလို့ ပြောလိုက်သည် ..။ ချစ်စု လမ်းလျောက်ရင် နာသည်လို့ သူ့ကို ပြောပြလိုက်သည် ..။ သူက ချစ်စု အနာ သက်သာအောင် သူ အနမ်းတွေ ပေးချင်သည်လို့ ပြောတော့ ချစ်စု ရင်ထဲမှာ ဖိန်းဖိန်းရှိန်းရှိန်း နဲ့ ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်း ထရသည် ..။ သူ့အနမ်းတွေကို သတိရသွားလို့ ..။
ချစ်စု ပိပိကို သူ နမ်းတာ ချစ်စု လောကကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ် သွားရလောက်အောင်ဘဲ စိတ်တွေ လှုပ်ရှား တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့ရသည် ..။ ချစ်စု ပိပိကို သူ လျာနဲ့ ယက်ပေးတာ ..။ ချစ်စု သူ့လျာနဲ့ ဝေးရာကို နောက်ဆုတ် ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတာ မရဘူး..။ သူက ချစ်စု ဖင်တုံးတွေကို ဆုပ်ညှစ်ပြီး ချုပ်ထိန်းထားခဲ့တာ ..။ ချစ်စုလဲ ဖရန်ကီ့ အမေ လာဆဲတာက လွဲပြီး ဖရန်ကီနဲ့ အချစ်လွန်ရတာတွေကို ကျေနပ်သည် ..။ ချစ်သူကို ကိုယ့်ကိုယ်တွေကို ပေးအပ်ရတာကို နောင်တ မရဘူး ..။ ဝမ်းမနည်းဘူး ..။ ချစ်သူ နဲ့ မကြာခင် လက်ထပ်ကြမှာဘဲ လေ ..။
ဖရန်ကီက မေမေနဲ့ မမကြီးတို့ ဆိုင်သွားကြတဲ့အချိန် ဖုန်းထပ်ဆက်သည် ..။ ချစ်စုကို သူ ဒီနေ့ မတွေ့ ရရင် မနေနိုင်ဘူးတဲ့ .။ တွေ့ကို တွေ့မှ ဖြစ်မည်…တဲ့ ..။ ချစ်စုလဲ နောက်နေ့မှ တွေ့ကြရအောင် လို့ သူ့ကို အထပ်ထပ် ပြောပေမယ့် မရဘူး ..။ ချစ်စုကို ချစ်တယ်..အရမ်းတွေ့ချင်တယ် ..မျက်နှာလေး မြင်ရရင် ကျေနပ်ပါပြီ.. ဘာညာ ကွိကွတွေ ချွဲပြ ငိုပြသည် ..။
ချစ်စုအိမ်ကို သူ လာခဲ့မည် လို့ ပြောပြီး ဖုန်းချသွားသည် ..။ ချစ်စု ပြန်ခေါ်လို့လဲ မရတော့ ..။ ခက်တာ ဘဲ..။ ဖရန်ကီ့ကို တိုက်ခန်း ကျဉ်းလေးပေါ်ကို မခေါ်ချင်ဘူး ..။ သူက သူဌေးသား..။ နဲနဲပါးပါး ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးသား လဲ မဟုတ်ဘူး ..။ ချစ်စုတို့ တိုက်ခန်းလေးက သူတို့အိမ်က အိမ်ဖေါ်တွေ နေတဲ့ တိုက်ခန်းလေးတွေ လောက်ဘဲ ရှိသည် ..။ ချစ်စု တို့က ကောင်းကောင်းလဲ ရှင်းလင်း မထားဘူး ..။
ပိပိ နာကျင် ကျိန်းစပ်နေတဲ့ ကြားက ချစ်စု အိမ် အမြန်ရှင်းရသည် ..။
ဖရန်ကီ လာတဲ့အခါ နဲနဲကြည့်ကောင်းနေအောင် ..။
အို တံခါးဘဲလ် မြည်နေပြီ ..။ သူ..သူ..သူ ရောက်လာပြီ …။
ချောင်းကြည့်ပေါက်က ချောင်းကြည့်လိုက်တော့…ဟင်..ဖရန်ကီလဲ မဟုတ်ဘူး …။ ကိုသူရိန်ထွန်းကြီး …။
ဒါကြောင့် ဖရန်ကီ လာတာ ဒီလောက် မမြန်နိုင်ပါဘူး လို့ တွေးနေတာ ..။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တံခါးဖွင့်ပြီး သူဘာလို့ လာလဲ မေးလိုက်မည် လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး တံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည် ..။
“ ကိုသူရိန်ထွန်း ….ဘာ…ဘာ ကိစ္စရှိလဲဟင်..မေမေနဲ့ မမကြီးတို့ ဆိုင်ကိုသွားကြပြီ …”
“ သိတယ်..ချစ်စု..ကိုယ် သူတို့ဆီကို လာတာ မဟုတ်ဘူး …ချစ်စုဆီကိုလာတာ …”
“ ဟုတ်..ကိုသူရိန်ထွန်း ..ဘာပြောစရာ ရှိလဲဟင် …”
“ ချစ်စုကို ကိုယ်တကယ် ချစ်တယ်..ကြိုက်တယ်…လက်ထပ်ချင်တယ် …မနေ့က ချစ်စုကို ကောင်လေးတယောက် နဲ့ တွေ့လိုက်ရတာ ကိုယ့်နှလုံးသားတွေ ကျေပျက်သွားတယ် ..ချစ်စုကို ဆုံရှုံးသွားရပြီလား ..ဆိုပြီး …ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ.. ကိုယ် ချစ်စုကို ပြောချင်တာက ချစ်စုကို ကိုယ် အမြဲ ချစ်နေမယ် ဆိုတာပါဘဲ ..ချစ်စု အကယ်လို့များ ..ဒီကောင်လေး နဲ့ မရခဲ့ရင် သူရိန်ထွန်း ဆိုတဲ့ ကောင်က အမြဲ ကြိုဆို စောင့်နေတယ် ဆိုတာ သတိရပေးပါ ….”
“ ဆောရီး ဘဲ..ကိုသူရိန်ထွန်းရယ် …ချစ်စု နဲ့ ဖရန်ကီက သိပ်ချစ်ကြတာ..ချစ်စုတို့ မကြာခင် လက်ထပ်ကြမှာပါ …မရစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး …”
“ ကောင်းပါတယ်..ကိုယ် ပြောချင်တာက ကိုယ်က ချစ်စုကို တသက်လုံး ချစ်နေမယ် ဆိုတာကိုပါဘဲ.. ဒီအကြောင်း
တွေကိုလဲ ချစ်စု ရဲ့ မမ နဲ့ အမေကို ကိုယ် ပြန်မပြောပါဘူး ..စိတ်ချပါ .. ချစ်စု စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ် …ဒါပါဘဲ
သူရိန်ထွန်း ခြာကနဲ လှည့်ပြီး တိုက်ပေါ်က ပြန်ဆင်းသွားသည် ..။
ချစ်စု ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူရိန်ထွန်းက မေမေတို့နဲ့ ပြန်မတိုင်ဘူး ဆိုတာကိုဘဲ ကျေနပ်သည် ..။
တင်းတောင်..တင်းတောင် …။ ဟာ..လာပြန်ပြီ …။
ချောင်းကြည့်လကိုတော့..ဒီတခါတော့ ဖရန်ကီ …။
တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့ အရမ်းချောတဲ့ ချစ်သူ့ မျက်နှာကို ချစ်စု မြင်လိုက်ရသည် ..။ ချစ်စု ကြွေသွားသည် ..။ အရည်ပျော်ကျသွားသည် ..။ ဖရန်ကီ လဲ အိမ်ထဲ ဝင်ဝင်ချင်းဘဲ ချစ်စုနှုတ်ခမ်းလေးကို စုတ်ပစ်သည် ..။ အို ..ချစ်စု ဘာမှ မကြောက်တော့ဘူး ..။ အရာရာကို ရင်ဆိုင်မည် ..။ ချစ်သူကို ချစ်လွန်းတဲ့ စိတ် ကြောင့် ပိပိ နာကျင်
နေတာတောင် ပျောက်သွားသလိုဘဲ ..။ ဖရန်ကီ့ကို ပြန် နမ်းစုတ်မိသည် ..။ အနမ်းတွေက အစမှာ သိမ်မွေ့
နူးညံ့သလောက် တဖြေးဖြေးနဲ့ ကြမ်းတမ်းလာသည် ..။ နှုတ်ခမ်းစုတ်ရင်း အိမ်ရှေ့က ဆိုဖါပေါ်မှာ လဲကျသွားသည် ..။ ချစ်စုက အောက်က..။ ဖရန်ကီက အပေါ်က ..။
ဒီတခါ ဖရန်ကီ ချစ်စု ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေကို ချွတ်ပစ်တဲ့အခါ ချစ်စု မတားမြစ်ရုံမက သူ့ကိုကူညီပြီး ချွတ်ပေးလိုက်သည် ..။ ချစ်စုရဲ့စိတ်တွေက ချစ်စု ကိုယ်တွေကို ချစ်သူကိုပေးအပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဘေဲ လ ..။ ချစ်စု ကိုယတ်ုံးလုံး ဖြစ်သွားတော့ ရှက်တော့ရှက်သား ..။ မျက်စိတွေကို ပိတ်ထားလိုက်သည် ..။ ဖရန်ကီက ချစ်စု ရင်သား တွေကို နမ်းနေသည် ..။ ရင်သား အသီးလေးတွေကို စို့နေသည် ။
သူစို့တာက ဖွဖွလေး ..။အသီးလေးတွေက အပြင်ကို ကောင်းကောင်း စူမထွက်သေးဘူး ..။ သူက
နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ညှပ်ပြီး ဆွဲဆွဲထုတ်သလို လျာထိပ်လေးနဲ့ ၀ိုင်းပေးနေတာ ..။ ချစ်စု ပိပိကတော့ အရမ်းကို စိုရွှဲ နေတော့တာဘဲ..။ ဖရန်ကီ့ လက်တဖက်က ချစ်စု ပိပိကို လာစမ်းကိုင်နေသည် ..။ ချစ်စုလဲ အရေတွေ စိုနေတာမို့ သူ့ကို အားနာတယ် ..။ သူက ဂရုမစိုက်တဲ့ ပုံနဲ့ ရင်သီးလေးတွေကို ကလိ ကစားနေရာက ချစ်စု ပေါင်ကြားကို ခေါင်း သွင်းလိုက်သည် ..။
“ အို …ဘာလုပ်မလို့လဲ…မရံဘွူးလား…”
ဖရန်ကီက ဘာမှ ပြန်မဖြေဘူး ..။ ချစ်စု ပိပိကို တအားနမ်းတော့တာဘဲ…။ “ အို …ဖရန်ကီရယ် ….အင်းဟင် …..အို ….အ……အ……ဟာ…..ဟင့်ဟင့် ….”
ဖရန်ကီ့လျာက စောစောက ရင်သီးလေးတွေကို မထိတထိ ကလိသလိုဘဲ ချစ်စုရဲ့ အစိလေးကို ထိုးဆွ ကစား ကလိပေးနေတော့ ချစ်စု ရဲ့ စိတ်တွေ ထိန်းသိမ်းလို့ မရတော့ ..။ သူ့ကို ချစ်စုကို ချစ်ပေးဖို့ တောင်းဆို ချင်လာမိရသည် ..။ ချစ်စု နုတ်က ထုတ်မပြောပေမယ့် ဖရန်ကီက သိသည် ..။ ချစစ်ုတအား လိုချင်နေပြီ ဆိုတာ ..။ ချစ်စုကို ဆက်မနမ်းတော့ဘဲ ချစ်စု ပိပိထဲကို သူ့ဟာ ထိုးသွင်းဖို့ လုပ်ပါတော့သည် ..။ ချစ်စု သူ့ကို တင်းတင်းဖက်.. မျက်လုံးတွေ မှိတ်ပြီး ပေါင်တွေကို ကားပေး ထားလိုက်သည် ..။ ဖရန်ကီ့ရော့ကက်ကြီး ချစ်စု ပိပိထဲကို တထစ်ထစ်နဲ့
ဝင်လာသည် ..။ အရင် တခါကလောက်တော့ ခက်ခက်ခဲခဲ မဟုတ်တော့ ..။ ချစ်စုရဲ့ ပိပိက အရမ်း စိုရွှဲနေတာ
ကြောင့်လဲ ဖြစ်မယ်ထင်သည် ..။
ဖရန်ကီ နဲ့ အချစ်ပင်လယ်ကြီးကို အတူတူ လက်ပစ်ကူးကြသည် ..။ ဒီတခါတော့ တက်ညီလက်ညီ ကြိုးစား ပမ်းစား ကူးခတ်ကြတာ ..။ ပြပြလေး မြင်နေရတဲ့ ကမ်းဆီကို ရောက်ဖို့ အားနဲ့ ကူးခတ်ကြသည် ..။ အသံတွေက ဆူညံနေသည် ..။ ချွေးတွေ တလုံးလုံးနဲ့ ..။ ချစ်သူနဲ့ အတူတူ ကူးခတ်နေတာမို့ ချစ်စု မောလို့ မောမှန်းမသိ ..။ မကြာခင်ဘဲ လမ်းဆုံး ကမ်းပါးကို တက်လှမ်းမိသွားရသည် ..။ ဖရန်ကီ နဲ့ ချစ်စု နှစ်ကိုယ့် တကိုယ် ဖြစ်မိနေကြသည်။
ချစ်စု နဲ့ ဖရန်ကီ ဆားငံရေကို သောက်မိကြသည် ။ သောက်ပြီးရင်း ထပ်သောက်ချင်ရင်း ဖြစ်နေသည် ။ ချိန်းတွေ့တိုင်း အချစ်လွန်မိနေကြသည် ..။ ဖရန်ကီ့အမေ က ခါးခါးသီးသီး ဖျက်နေလို့ ဖရန်ကီ့အိမ်ကို ချစ်စု ထပ်မရောက်ဖြစ်တော့ ..။ ဖရန်ကီက ဆယ်မိုင်ကုန်းက သူ့သူငယ်ချင်း ညီအကို နန္ဒနဲ့ ဆန္ဒတို့ အိမ်ကို ချစ်စုကို ခေါ် သွားပြီး ချိန်းတွေ့သည် ။ အချစ်တွေလန်ွသည် ..။
ချစ်စု ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဖရန်ကီ့ကို တွေ့ချင် နေမိတတ်သလို ဖရန်ကီ တောင်းခံတာတွေကိုလည်း ရက်ရက် ရောရော ပေးချင်နေမိတာ ..။ အခုလည်း ဖရန်ကီ ခေါ်သွားလို့ နန္ဒနဲ့ ဆန္ဒတို့ ခြံကို ဖရန်ကီနဲ့အတူ ရောက်သွားသည် ။ ဒီညီအကိုက သူတို့အဖေက စစ်သံမှူးတာဝန်နဲ့ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တခုကို သွားရတော့ အိမ်မှာ ညီအကိုနှစ်ယောက်ထဲ နေနေတာမို့ လွတ်လပ်သည် ။ ချစ်စုနဲ့ ဖရန်ကီတို့ ရောက်သွားတော့ ဆန္ဒက အိမ်တံခါးကို လာဖွင့်ပေးသည် ..။
“ နန္ဒ..အထဲမှာ ..စော်နဲ့ ချိန်းတွေ့နေတယ် …ဖရန်ကီ …မင်းတို့က ဒီဖက်ခန်းထဲမှာ အေးဆေး တွေ့ကြပေါ့ …” တကယ်တော့ အခန်းက နှစ်ခန်း မဟုတ် ..။ အခန်းကျယ်ကြီးတခုကို သုံးထပ်သား ချပ်တွေနဲ့ ခြားထားတာသာ ဖြစ်သည် ..။ ဆန္ဒက ဖရန်ကီ့ကို ဘာကားနဲ့ လာခဲ့လဲ လို့ မေးသည် ..။
“ မာစီဒီး နဲ့…”
“ ငါ လျောက်မောင်းချင်တယ်ကွာ..ကားသော့ပေး …”
ဖရန်ကီက ကားသော့ကို ဆန္ဒကို ပစ်ပေးလိုက်သည် ..။ ဆန္ဒ ထွက်သွားသည် ..။ ဖရန်ကီ နဲ့ ချစ်စု ကုတင်ပေါ် ထိုင်လိုက်ကြသည် ..။ သုံးထပ်သားချပ် တဖက်က နန္ဒ ရဲ့ အသံတွေကို ကြားနေရသည် ..။
“ ချစ်စု ..ဟိုဖက်တဖက်မှာ နန္ဒ စော်နဲ့ ကဲနေတယ် …”
“ ရှူး..တိုးတိုး..ကြားသွားလိမ့်မယ် …”
ဖရန်ကီက သုံးထပ်သား အကာနှစ်ချပ်ကြားကနေ တဖက်က နန္ဒတို့ကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ..။ ချစ်စုက ..“ ဟိတ် ..မကောင်းပါဘူးကွာ..မချောင်းပါနဲ့…” လို့ ဖရန်ကီ့ အကျ င်္ီစကို ဆွဲပြီး ပြောပေမယ့် မရ ..။ ဖရန်ကီက ကုတင်ပေါ်ကနေ ဝပ်လျားမှောက်ပြီး ချောင်းနေသည် ..။
“ ချစ်စု ..လာကြည့်..လာကြည့် …”
“ အို..မကြည့်ချင်ပါဘူး ….”
“ ကြည့်လိုက်ပါ ….ချစ်စု အရမ်း အံ့သြသွားမယ် …နန္ဒနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ စော် ကိုတွေ့ရင် ….”
ဖရန်ကီ့အပြောကြောင့် ချစ်စု စိတ်ဝင်စားသွားသည် ..။ ဘယ်သူပါလိမ့် …။ သိချင်လာသည် ..။ ဖရန်ကီ့ လိုဘဲ တဖက်ကို ချောင်းကြည့်လိုက်မိသည် ။ အသံမထွက်မိရအောင် မနည်း သတိထားလိုက်ရသည် ..။ နန္ဒနဲ့ အချစ်လွန်နေတာ မုမုအီးလို့ ခေါ်တဲ့ မိမိဦး ..။ အိုဟယ် ..။ ဘာတေ.ွ .ဖြစ်ကုန်သလဲ..။ မာနကြီး.. ပဲများ.. အထာကိုင်တဲ့ မိမိဦးသည် ဟော့ရှော့ နန္ဒ နဲ့ ဖြစ်နေတာ ချစ်စု မသိလိုက် ..။ နန္ဒ နဲ့ မိမိဦး..အဝတ်အစား မရှိကြဘူး ..။နန္ဒက ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက် အိပ်နေပြီး မိမိဦးက နန္ဒရဲ့ အပေါ်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေသည် ..။ သူတို့ ကြည့်ရတာ တော်တော် အတွေ့အကြုံများနေတဲ့ ပုံဘဲ..။
ဟယ် …အကြီးကြီးဘဲ..။
ချစ်စု တုန်သွားသည် ..။ နန္ဒရဲ့ ဒုတ်ကြီးကို တွေ့လိုက်လို့ ..။ လူနဲ့ဒုတ်နဲ့ မလိုက်ဘူး ..။ ပိန်ကပ်ကပ် နန္ဒရဲ့ ဒုတ်ကြီးက တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီး ..။ အကြောတွေ ထောင်ထနေသည် ..။ မိမိဦးက ဒီဒုတ်ကြီးပေါ်ကို တက်ထိုင်နေတာ ..။ ဒုတ်ကြီးက မိမိဦး ဟာထဲ တန်းလန်း တပ်ရက်ကြီး ..။ မိမိဦးကလည်း အဝတ်နဲ့ အမြဲ တွေ့နေတဲ့အချိန် ဒီလောက်
နို့တွေ ဖင်တွေ ကြီးမှန်း တောင့်မှန်း မသိခဲ့ဘူး ..။ ခေါင်းကို မော့ပြီး နန္ဒရဲ့ ဒုတ်ပေါ် ဖိထိုင်ချလိုက်တာ
တွေ့လိုက်ရတော့ ချစ်စုလဲ ယောင်ပြီး ဖရန်ကီ့ရဲ့ လက်မောင်းကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်မိသွားသည် ..။
အိုး ..။ မိမိဦး တအင်းအင်းနဲ့ ဖိဖိချနေပြီ ..။ နန္ဒ ကလည်း မိမိဦးရဲ့ နို့တွေကို စို့ရင်း အောက်ကနေ ပင့်ပင့် ထိုးပေးနေသည် ..။ သူတို့ လုပ်တာတွေကို ကြည့်ပြီး ချစ်စုနဲ့ ဖရန်ကီနဲ့လဲ အရမ်းစိတ်တွေ ထန်လာကြရသည် ..။ ချစ်စုတို့ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေကို အမြန်ချွတ်ပစ်မိရင်း တယောက်နဲ့တယောက် အငမ်းမရ နမ်းစုတ်မိကြသည် ..။ ဖရန်ကီက ချစ်စု ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းသည် ..။ ချစ်စုလဲ ချစ်စုတို့ အိမ်မှာ ဖရန်ကီ လာ အချစ်လွန်တုံးက ဖရန်ကီ တောင်းဆိုလို့ ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးဖူးတာမို့ အခုလဲ စိတ်တွေကလဲ ထကြွလွန်းနေပြီး သူ့အလုပ်ကို ခံချင်နေတာမို့သူလိုချင်တဲ့ ပုံစံ နေပေးလိုက်သည် ..။ ဖင်ပူးတောင်းထောင်ပေးနေတဲ့ ချစ်စုကို ဖရန်ကီက တအင်းအင်းနဲ့ ဆောင့်ထည့်သည် ..။ ချစ်စုလဲ သူ အနောက်က ဆောင့်ထည့်နေတဲ့အချိန် အရှေ့ကို အားလွန် လဲမကျအောင် မနည်း လက်နဲ့ ကျားကန်ထားနေရသည် ..။ ချစ်စု တင်ပါးတွေကို ဖရန်ကီ ဆွဲညှစ်ကိုင်ပြီး ချစ်စု ပိပိထဲကို အားနဲ့ ထိုးထိုး ဆောင့်ထည့်တာ ..။ ချစ်စုတို့ လုပ်တဲ့ တဖန်းဖန်း အသံတွေလဲ တဖက်က နန္ဒနဲ့ မိမိဦးတို့ ကြားကြမှာဘဲ ..။ ဖရန်ကီလည်း ဖင်ပူးတောင်းထောင် ပုံစံနဲ့ တဝကြီး လုပ်ပြီးတော့ ချစ်စုကို ပက်လက် အိပ်ခိုင်းပြီး အပေါ်က တက်လုပ်သည် ..။ ထုံးစံအတိုင်း ဖရန်ကီက သူ့အရေတွေကို ချစ်စု ပိပိထဲ မပန်းဘဲ ချစ်စု ဘိုက်ပေါ်မှာ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်သည် ..။
ဖရန်ကီ လည်း ပြီးလဲ ပြီးရော ချစ်စုဘေးမှာ ဝုန်းကနဲ လှဲအိပ်ပစ်လိုက်သည် ..။ ဘိုက်ပေါ်မှာ သုတ်ရေတွေနဲ့ ချစ်စု ခဏ လှဲနေမိသည် ..။ ခဏကြာတော့ သေးလဲ ပေါက်ချင်..ဒီအရေတွေကိုလည်း ရေဆေး လိုက်ချင်တာ
ကြောင့် ချစ်စုလဲ ရေချိုးခန်း ဆီကို ထွက်ခဲ့လိုက်သည် ..။ထမိန်ကို ရင်လျားပြီး ..။ ပေပွနေတဲ့ ချစ်စု ပိပိ ကိုလည်း
ဆေးကြောချင်လို့ ..။ ရေချိုးခန်းတံခါးကို ဆွဲဖွင့်ပြီး ဝင်လိုက်သည် ..။
နန္ဒ နဲ့ တည့်တည့်ကြီး တိုးနေသည် ..။ နန္ဒသည် ကိုယ်တုံးလုံးကြီး နဲ့ သေးပေါက်နေသည် ..။ သူ့အတန် အကြီးစား ကြီးထဲက သေးတွေ အိမ်သာခွက်ထဲကို တဗျန်းဗျန်း ပန်းထုတ်နေတာကို ချစ်စု တွေ့လိုက်ရသည် ..။
“ ဟိတ်..ချစ်စု ..”
နနက လှည့်ကြည့်ပြီး ခေါ်လိုက်သည် ..။
“ အိုး..ဆောရီး နန္ဒ….နန္ဒ ရှိနေမှန်း မသိလို့ …”
“ ရပါတယ်..ချစ်စုရယ်..အချင်းချင်းတွေဘဲ ..ဟီး..”
နန္ဒသည် သူ့ဟာကြီး တန်းလန်းနဲ့ဘဲ ချစ်စု အရှေ့ကနေ ဖြတ်ပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ပြန်လျောက်သွားသည် ..။ ချစ်စုလဲ ဆေးကြော သုတ်သင်ပြီး ဖရန်ကီ ရှိနေတဲ့ ကုတင်ဆီကို ပြန်လာခဲ့သည် ..။ မိမိဦးကတော့ နန္ဒနဲ့ စောစောက လုပ်နေတဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ခွေခွေလေး အိပ်နေသည် ..။ ဒီနေ့လည်း ချစ်စု ပိပိတွေ ဖရန်ကီ တအား ဆောင့်ထားလို့ နာကျင် ကျိန်းစပ်နေသည် ..။ စောစော အိပ်ရာထဲ ဝင်ပေမယ့် အိပ်လို့ကတော့ မပျော်ဘူး ..။ အရေးထဲ နန္ဒရဲ့ ဟာကြီးကို မျက်စိထဲ ပြန်ပြန် မြင်နေလို့ ..။
ချစ်စု ဒီနေ့ စိတ် မပျော်ဘူး ..။ ခါတိုင်းလို ကျောင်းသွားချိန် ဖရန်ကီ လာမကြိုဘူး ..။ ဖုန်းလဲ မဆက်ဘူး ..။ သူ ဘာဖြစ်လဲ..။ သူ့ဖုန်းကို ခေါ်ကြည့်တော့လဲမထူးဘူး ..။ ကျောင်းမှာ တယောက်ထဲ စားသောက်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတုံး ဟေမာငွေနှင်း ရောက်လာသည် ..။
“ ဟယ် ..ချစ်စု မျက်နှာလဲ မကောင်းပါလား ..ဘာဖြစ်လာလဲ…ဖရန်ကီ နဲ့ စိတ်ကောက်ကြလား ..ရန်ဖြစ်လား …”
“ မဖြစ်ပါဘူး …သူနဲ့ ဒီနေ့ မတွေ့ဘူး ..ဘာဖြစ်နေလဲ မသိပါဘူး..ဟေမာရယ် …..”
“ သူ့ဆီ ဖုန်း မဆက်ဖူးလား …”
“ ဆက်တယ်..မကိုင်ဘူး …”
ဟေမာငွေနှင်းက ဖရန်ကီရဲ့ အိမ်ဖုန်းကို ဆက်ကြည့်သည် ..။ ဖုန်းကိုင်တဲ့ လူက အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ မိန်းမကြီး ..။ သူမသိဘူးလို့ဘဲ ဖြေသည် ..။ အိမ်မှာ ဖရန်ကီရဲ့ မိဘတွေလဲ မရှိကြဘူး လို့ ပြောသည် ..။
ဟေမာငွေနှင်းက .. “ သူ အရေးတကြီး တနေရာရာကို ထွက်သွားလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ..ချစ်စုရယ်.. စိတ်မညစ်ပါနဲ့.. ယူ့ကို ဖရန်ကီ သိပ်ချစ်တာ ဟေမာလဲ သိနေတာဘဲ …”
ချစ်စု မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်ပေါက်တွေ ကျလာသည် ..။
မနေ့ကဘဲ သူနဲ့ ထောက်ကြံ့ဖက်ကို ကားနဲ့ သွားကြသည် ..။ ဖရန်ကီတို့ ဝယ်လိုက်တဲ့ ပြိုင်ကား အသစ်လေး နဲ့ ..။ ခုတလော ရန်ကုန်မှာ ကားအသစ်တွေ အရမ်းများလာတဲ့ အချိန် ဖရန်ကီတို့ အိမ်မှာလဲ ကားဆန်းဆန်းတွေ မျိုးစုံ ရှိလာသည် ..။ ချစ်စု က ကားအကြောင်း နားမလည်ပေမယ့် အရင်က မတွေ့ဘူးတဲ့ ကားတွေ ဆိုတာတော့ သိသည် ..။ အမိုးဖွင့်ကားလေး နဲ့ လေတဖြူးဖြူးနဲ့ သူတို့ ကားမောင်းထွက်ကြတာ ဖရန်ကီက ဆံပင်တွေ လေထဲ လွင့်နေတဲ့ ချစ်စု ကို လက်တဖက်နဲ့ ဖုန်းကင်မရာ နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်သည် ..။ ချစ်စု က လက်နှစ်ချောင်းထောင်ပြီး မျက်စိမှိတ်ပြသည် ..။ အပြန်မှာ ဖရန်ကီက ချစ်စုကို ဖက်ထားရင်း စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန် သောင်းကျန်းလာသည် ..။ ချစ်စုနဲ့ ချစ်ချင်သည် လို့ ပြောသည် ..။ ချစ်စုလဲ ဖရန်ကီ အဲလို ပြောရင် စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှားသည် ..။ ဖရန်ကီ နဲ့အတူတူ ဆယ်မိုင်ကုန်းက နန္ဒ နဲ့ ဆန္ဒ တို့ ညီအကို အိမ်ကို ရောက်သွားသည် ..။
သူတို့ အိမ်ထဲအဝင် နန္ဒ နဲ့ မိမိဦးတို့ အိမ်ထဲက ထွက်လာသည် ..။ မိမိဦးက ချစ်စုကို မျက်စောင်းထိုးပြီး နှုတ်ခမ်း စူပြသည် ..။ နန္ဒက ဖရန်ကီ့ကို ဆွဲခေါ်ပြီး တီးတိုးစကားပြောနေခိုက် မိမိဦးက ချစ်စုကို ..“ နင် အဲ့ကောင်ကို ရေလည်ကုန်းနေတာ..အဲ့ကောင်က နင့်ကို အတည် ယူမှာ မဟုတ်ဘူး ..” လို့ ပြောလိုက်သည် ..။ ချစ်စု လဲ ရုတ်တရက် အပြောခံလိုက်ရလို့ အံ့အားသင့် ကြောင်သွားခိုက် နန္ဒက မိမိဦးကို ဆွဲခေါ်ကာ ထွက်သွားသည် ..။ ချစ်စုလဲ ပြန်လှန် ချေပခွင့် မရလိုက်ဘူး ..။ ဖရန်ကီက ချစ်စုကို အိပ်ခန်းထဲ ဆွဲခေါ်ပြီး အဝတ်တွေ အားလုံး ချွတ်ပစ်သည် ..။ ချစ်စု ရော ဖရန်ကီရော အဝတ်အစား မရှိကြချိန် ဖရန်ကီက ချစ်စုကို ပုလွေမှုတ်ပေးဖို့ ပြောသည် ..။ ချစ်စုလဲ အမြဲ လုပ်ပေးနေကျ ဖြစ်နေပြီ ဆိုတော့ အဆန်းတော့ မဟုတ်တော့ ..။ ဖရန်ကီ့ ကို မှုတ်ပေးသည် ..။ စိတ်ပါလက်ပါ နဲ့ ဖရန်ကီ့ဒုံးပျံကြီးကို စုတ်ပေးနေတုံး အခန်းနံရံကြားက လူရိပ်လို မြင်လိုက်လို့ မော့ကြည့်မိတော့ တဖက် နံရံ အကွယ်က ချောင်းကြည့်နေတဲ့ ဆန္ဒ ကို တွေ့လိုက်သည် ..။ မှုတ်ရက်တန်းလန်းကြီးမို့ ဒီအချိန်မှတော့ မထူးတော့တာနဲ့ ဖရန်ကီ ကျေနပ်အောင် ဆက် မှုတ်ပေးလိုက်သည် ..။ ဆန္ဒ ဆိုတဲ့ အကောင်က တော်တော် ဆိုးတာဘဲ ..။
ဆန္ဒ ချောင်းနေတာနဲ့ ဖရန်ကီနဲ့ ဆက်မလုပ်ချင်တော့ ..။ ဖရန်ကီ့ကို ပြီးသွားအောင် တတ်သမျှ မှတ်သမျှ ပညာလေးတွေ ကြိုးစားသုံးပြီး မှုတ်ပစ်လိုက်သည် ..။ ဖရန်ကီ က ပြီးချင်လာလို့ ချစ်စု ပါးစပ်ထဲက ထုတ်ဖို့ ကြိုးစား ပေမယ့် ချစ်စု သူ့ကို အထုတ်မခံတော့ဘဲ တအားဆက်မှုတ်ပေးလိုက်သည် ..။ ဖရန်ကီ သုတ်တွေ ချစ်စု ပါးစပ်ထဲကို ပန်းထုတ်ပြီး ပြီးသွားသည် ..။ ချစ်စုလဲ သုတ်တွေကို ကြိုးစားပြီး မြိုချပစ်လိုက်သည် ..။ အဝတ်အစားတွေကို အမြန် ပြန်ဝတ်သည် ..။ ဖရန်ကီလဲ အချိန်မရှိတော့ဘူး ဆိုပြီး ချစ်စုကို အိမ်ပြန်ပို့ပေးသည် ..။ နန္ဒတို့ အိမ်က အထွက် ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ ဆန္ဒ ဆိုတဲ့ မျက်နှာရူးကောင်ကို ချစ်စု စောက်မြင်ကပ်လိုက်တာ ..။ မနေ့က အကြောင်း တွေကို ပြန်စဉ်းစားပြီး မိမိဦး ပြောသလိုများ ဖရန်ကီက သူ့ကို ချန်ခဲ့မလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ခေါင်းထဲ ဝင်လာ သည် ..။ တညလုံး လူးလိုက် လှိမ့်လိုက် နဲ့ အိပ်လို့ မပျော်ဘူး ..။ စိတ်ဝေဒနာတွေ ပြင်းထန် ခံစားနေသည် ..။
ဖရန်ကီ ဘယ်ရောက်နေလဲ ..။ ဘာဖြစ်လို့ ဖုန်းမခေါ်လဲ …။ ချစ်စု ရင်တွေ တအား ပူနေသည် ..။
ညက မအိပ်နိုင်လို့ မနက်လင်းအားကြီးကျမှ အိပ်ဖြစ်လို့ အိပ်ရာထ နောက်ကျရသည် ..။ နေမြင့်မှ နိုးတော့ မမကြီးနဲ့ မေမေတို့ ဆိုင်ရောက်နေပြီ ..။ ချစ်စု ရေချိုးဖို့တောင် ခွန်အား မရှိဘူး ။ အိပ်ရာထဲ ခွေနေမိသည် ..။ဖရန်ကီ ခုထိလဲ ဖုန်းမခေါ် မက်ဆေ့လဲ မထားဘူး ..။ သူ..သူ ဘယ်ရောက်နေလဲ …။ သူ တခုခုများ ဒုက္ခရောက်နေသလား ..။ ဒါမှ မဟုတ် ချစ်စုကို သူ ချန်သွားပြီလား ..။ ဦးနှောက်တွေ ပူထူနေပြီ ..။ ချစ်ဒုက္ခ ချစ်စု ဖြစ်နေပြီ …။ ဟေမာငွေနှင်း ဆီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်သည် ..။ ဟေမာငွေနှင်းက ဖရန်ကီ့ သတင်း သိရပြီ လို့ ပြောသည် ..။
“ ဟင်…သူ…သူ…သူ ဘယ်မှာလဟဲင်..ဟေမာ . . .”
“ ဖရန်ကီ သူ့မိဘတွေ နဲ့ အင်္ဂလန်ကိုထွက်သွားတယ် လို့ သိရတယ်..ချစ်စု ….သူ ပြန်လာမှာပါ ….”
ဟေမာငွေနှင်း အသံက မကောင်းဘူး ..။
“ဟင်..ဟုတ်လား..ချစ်စုကိုလဲ သူ ဘာမှ မပြောပြဘူး …ဟေမာရေ…နိုင်ငံခြား သွားတယ် ဆိုတာ ခုချက်ချင်း ထသွားလို့ ရတာမှ မဟုတ်တာ…သူ ကြိုတင် ပြင်ဆင် ထားရက်နဲ့ ဘာလို့ ချစ်စု ကို မပြောပြတာလဲ…သူ တခုခု တော့ ဖုံးကွယ်ထားတာ အမှန်ဘဲ..သိလား ….”
“ ချစ်စုရေ..ခဏတော့ စောင့်ကြည့်အုံးကွာ..သူ ဆက်သွယ်လာနိုင်ပါတယ် ”
ချစ်စု အော်ဟစ် ငိုယိုမိရပြီ ..။ ဖရန်ကီ ချစ်စုကို ချန်သွားပြီလို့ တထစ်ချ သိလိုက်သည် ..။ ချစ်စု စိတ်တွေ လေလွင့်သွားသည် ..။ ကျောင်းလဲ မတက်ချင်တော့ ..။ စာလဲ စိတ်မဝင်စားတော့ ..။ ချစ်သူစွန့်ပစ် ခံရတာကြောင့် လူတွေရှေ့မှာ မျက်နှာ ဘယ်လို ပြရမလဲ မသိတော့ဘူး ..။ မမကြီးနဲ့ မေမေကလဲ ချစ်စု အရူးတပိုင်း ဖြစ်နေ
တာကြောင့် မေးကြမြန်းကြသည် ..။ ချစ်စုလဲဘာမှ မပြောပြဘူး ..။ မမကြီးက ချစ်စု ကို ကိုသူရိန်ထွန်း နဲ့ အမြန်ဆုံး နေရာချထားပေးလိုက်ရင် ကောင်းမယ် လို့ ပြောသည် ..။ မေမေကလဲ သဘောတူသည် ..။
ဒီနေ့ ကျောင်းထဲကို မသွားမဖြစ် သွားရသည် ..။ ချစ်စု တို့ ကျောင်းက မြို့ပြင်မှာ ဆိုတော့ လိုင်းကား အဝေးကြီး စီးရသည် ..။ ကားဂိတ်ကနေ ကားပေါ်တက်လိုက်ကထဲက စုံတွဲတွေ အများကြီးဘဲ ကားပေါ်မှာ
တွေ့ရသည် ..။ ချစ်စု အဖေါ်မဲ့သွားတာကို ပြန်စဉ်းစားမိပြီး မျက်ရည်ဝဲမိနေသည် ..။ စုံတွဲတွေလဲ သူများ ဝမ်းနည်း နေတယ် ဆိုကာမှ ပိုပြီး လုပ်ပြနေကြသည် ..။ ကဲပြနေကြသည် ..။ တတ်နိုင်ရင် ဒီလိုင်းကားကို ဆက်မစီးဘဲ ဆင်းပစ်လိုက်ချင်သည် ..။ ကျောင်းရောက်တော့ တနေကုန် စိတ်ဆင်းရဲနေသည် ..။ မိမိဦး ချစ်စုဆီ တန်းတန်း မတ်မတ် လျောက်လှမ်းလာနေသည် ..။ ပြုံးနေသည် ..။
“ ဟိတ်..ဘယ်လိုဘဲ..သူဌေးသားကို အထင်ကြီးပြီး ကြိုက်တဲ့သူ ..ကျန်ရစ်ကြီး ဖြစ်နေပြီလား …”
“ ဘာပြောတယ် မုမုအီး ..ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ချန်လို့လ.ဲ ..”
“ အော်…ယူက အ ချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား..တကယ်ဘဲ အူတာလား ..ဒုံးဝေးတာလား …..ဖရန်ကီ နိုင်ငံခြားမှာ
“ ဒီတော့..သူက ငါ့ကို ချန်သွားတယ်လို့ နင်က ဘယ်လို ပြောနိုင်တာလဲ …”
“ သူ့မိဘတွေ တောင် ရန်ကုန် ပြန်လာနေပြီ ..ဖရန်ကီက အကြာကြီးနေမှာ….ခိခိ ….ယူ့ကို သူ ဘာမှ မပြောပြဘူး မဟုတ်လား …ဟားဟားဟား……”
မိမိဦးရဲ့ ပြောစကားတွေက ချစ်စု နားထဲကို သံရေပူ နဲ့ လောင်းချနေသလိုဘဲ ..။ တတ်နိုင်ရင် ဒီကောင်မကို ပါးနား ဆွဲရိုက်ပစ်ချင်မိသည်
ဟွန်း …သူရှေ့က ခြာကနဲ လှည့်ထွက်လာလိုက်မိသည် ..။ မိမိဦး ရယ်မောသံတွေက နောက်မှာ ကျန်ခဲ့နေသည် ..။
ဒေါသစိတ် နဲ့ ကျောင်းထဲက အထွက် ကားတစီးက ချစ်စု ဘေးနားမှာ လာရပ်သည် ..။ အို..ရမ်းလှချည်လား …။
မော့ကြည့်လိုက်တော့ ဆန္ဒ …။ နေကာမျက်နှန်အမဲကြီး တပ်ထားတဲ့ ပြီတီတီ စပ်ဖြဲဖြဲ မျက်နှာ နဲ့ ဆန္ဒ …။
“ ချစ်စု …..”
ချစ်စု မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ခြေလှမ်း စလှမ်းလိုက်သည် ..။
“ ချစ်စု..နေအုံး …..”
ချစ်စု ဆက်လျောက်သည် ..။ လှည့်မကြည့်ဘူး..။ ဟိုနေ့က ချစ်စု ဖရန်ကီ့ကို ပုလွေကိုင်ပေးနေတာ လာချောင်းတဲ့ အကောင် ..။ ယုတ်မာတဲ့ ငဆိုး ..။
“ ချစ်စု ခဏနေအုံး..ပြစရာ ရှိလို့ ….”
ချစ်စု ကြည့်လိုက်သည် ..။
ဆန္ဒ ရဲ့ လက်ထဲမှာ ဖုန်းတလုံး ကိုင်ထားသည် …။
“ ချစ်စု ပုလွေကိုင်နေတဲ့ ပုံ ဒို့ ၇ိုက်ထားတယ် ……”
ချစ်စု ဒိန်းကနဲ မူးမိုက်သွားသည် ..။
ဟယ်..ကောင်စုတ် ..ယုတ်မာပြီ …။
ချစ်စု တအား လန့်သွားသည် ..။ စိတ်တွေ ခြောက်ခြားသွားသည် ..။ ဖရန်ကီ့ကို အလို လိုက်မိတာ
တွေကြောင့် ဒုက္ခလှလှ တွေ့ပြီ …။ မှားပြီ …။
“ ဟယ်..တကယ်လား …ဆန္ဒ…နင်…နင်…ယုတ်မာလှချည်လား ….” ဆန္ဒက ဖုန်းကို မပြ ..။
“ နင် ကြည့်ချင်ရင် ငါ နဲ့ လိုက်ခဲ့ …မလိုက်ချင်လဲ ရတယ်နော်..ကျောင်းထဲမှာရော..အင်တာနက်မှာရော ဖြန့်ပစ်လိုက်မှာ ….ဟီးဟီး ….”
“ဟာ…ယုတ်မာတဲ့ ခွေးကောင်…နင်…နင် …မကောင်းဆိုးဝါး …..”
“ ဟားဟားဟား….မခက်ပါဘူး….လွယ်ပါတယ် ..မချစ်စု သဲသဲ …….ပြေလည်အောင် လုပ်လို့ ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိနေပါတယ် …”
“ ဘာလဲ..နင် ငါ့ကို ခြိမ်းခြောက်နေတာလား ..နင့်ကို ရဲတိုင်မယ် ….”
“ တိုင်လိုက်လေ…တိုင်နေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ နင့် ပုံတွေ အင်တာနက် ဆိုက်တွေမှာ ပြန့်ပွားနေမယ် ….ဟိဟိ ….” ချစ်စု သူ့ကိုမုန်းတီးလွန်းလို့ အရှင်လတ်လတ် အရေခွံ ဆုပ်ခွာချင်သွားသည် ..။
“ ကဲချစ်စု …တက် ကားပေါ်ကို …ဒို့တတွေ ဒီ ကိစ္စကို တိုင်ပင် ညှိနှိုင်း ကြရအောင် ….”
ချစ်စုလဲ သူ့ လက်ခုပ်ထဲက ရေ ဖြစ်နေပြီမို့ မတတ်သာတော့ …။ သူနဲ့ လိုက်သွားရသည် …။ သူတို့ အိမ်ကို ရောက်သွားသည် ..။
ဆန္ဒက သူ့ဖုန်း ထဲမှာ ချစ်စု ပုလွေကိုင်နေတဲ့ ပုံတွေ ရှိတယ် လို့ ဖုန်းကို ထောင်ပြသည် ..။ ချစ်စုကို သေသေ ချာချာ တော့ မပြ ..။ ချစ်စုနဲ့ ဖရန်ကီ လုပ်နေတဲ့ အချိန် သူလာချောင်းတာ ချစ်စုလဲ တွေ့ဖူးတော့ သူ ဗီဒီယို ရိုက်လိုက်နိုင်တယ် လို့ သိလိုက်သည် ..။ ချစ်စု ငိုကြွေးရုံကလွဲလို့ ဘာမှ မတတ်နိုင် …။ ဆန္ဒ ပြုံးနေသည် …။
အောင်နိုင်သူအပြုံး ဆိုတာ ထက် ကောက်ကျစ်တဲ့ ဝံပုလွေတကောင်ရဲ့ အပြုံးမျိုး လို့ ဆိုရမည် …။ လူယုတ်မာ
ကောင်က ချစ်စု ကို အပိုင်ကိုင်ပြီ . .။ သူ့ဘောင်းဘီ ဇစ်ကို ဆွဲချနေသည် …။
“ လာ..ချစ်စု ….”
“ အို..ဘာလဲ..သွား……”
“နင့်မှာ ရွေးချယ်စရာ လမ်း မရှိပါဘူးဟာ ..နင်ဟာ ငါ လုပ်တာအားလုံးခံရမယ့် ငါ့ရဲ့ အစေအပါးလေး ဖြစ်သွားပြီ ချစ်စု .. နင် အရှက်မကွဲချင်ရင် ….လာခဲ့..ဒူးလေးထောက်ပြီး ငါ့လီးကို လာစုတ် …ပြီးရင် နင့်ကို ငါ လိုးမယ် ….”
အို ..လူယုတ်မာကောင် …။ သူ့ဒုတ်ကြီးကို ဆွဲထုတ်နေသည် ..။ ဖရန်ကီ့ဟာ ထက် ရှည်လဲ ရှည် တုတ်လဲ တုတ်တဲ့ နီညိုညို အတန်ချောင်းကြီး က ငေါငေါကြီး …။
“ နင် မရက်စက်ပါနဲ့ဟာ…နင့်ဖုန်းထဲက ပုံတွေ ဖျက်ပေးပါ…ငါ…ငါ…တောင်းပန်ပါတယ် ……”
“ ပါးစပ်ကနေ ဒီလိုလေး တောင်းပန်လို့တော့ ဘယ်ရမလဲချစ်စုရယ် …..လာ…လာ…လီးစုတ် …”
ချစ်စု ပုခုံးကို နှိမ့်ချပြီး ထိုင်ခိုင်းနေသည် ..။ ချစ်စု မျက်ရည်တွေ နဲ့ ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်လိုက်ရသည် ..။ဆန္ဒရဲ့ ဒုတ်ကြီးက ဒစ်ပြဲကြီးနဲ့ ချစ်စု မျက်နှာ နဲ့ ကပ်ရက် ရှိနေသည် …။
“ စုတ်…စုတ်..ချစ်စု..နင် အစုတ်ကောင်းတာ ငါ တွေ့ထားတာ….ငါ ကွင်းတောင် မထုဘဲ သုတ်တွေ စုထားတာ….
နင့်အတွက်… နင် မြိုချဖို့ … နင်စားဖို့ .. တောက် …ဘာငိုင်နေတာလဲ စုတ်လေဟာ….”
သူ့အထစ်ပြဲကြီး ကို ချစ်စု နှုတ်ခမ်းထဲ လာထိုးထည့်သည် …။ ချစ်စု နှုတ်ခမ်းတွေကို တင်းတင်း စိထားသည် …။
“ ကဲ..မစုတ်ပေးရင်လဲ..ငါ…အင်တာနက်မှာ ဖြန့်လိုက်တော့မယ် ….”
“ အီးဟီး…..ဟီး………မလုပ်ပါနဲ့…အီး…….” ချစ်စု ငိုတာ အရမ်း …။
“ ဒါဆို..စုတ် ..”
အထစ်လုံးကြီး ချစ်စု ပါးစပ်ထဲကို အတင်း တိုးဝင်လာသည် ..။ ရောက်လာသည် ..။ ဝင်လာသည် …။
ဆန္ဒက ချစ်စုနောက်စိကနေ ကိုင်ပြီး သူ့ဟာကြီးကို ထိုးသွင်းသည် ..။ ချစ်စုလဲ မထူးတော့တာမို့ ဆန္ဒ့ အတန်ကြီးကို စုတ်ပေးရတော့သည် ..။ ဆန္ဒသည် တကယ့် လူဆိုးကောင် ..။ လူရမ်းကား..။ လူယုတ်မာ …။ ချစ်စု စုတ်ပေးနေရက် နဲ့ ချစ်စု ပါးစပ်ထဲကို ထိုးညှောင့်နေသည် ..။ ချစ်စု စုတ်နေတုံး ….“ လျာနဲ့ ကလိပေးလေ … ကလိ… လျာနဲ့ ထိုး …..” ဆိုပြီး အော်ငေါက် ခိုင်းသည် …။ အကြာကြီး စုတ်ပေးနေရသည် …။ ချစ်စုကို သူ့ဂွေးစိ နှစ်လုံးကို ချေနယ်ခိုင်းလို့ ချေနယ် ပေးရသေးသည် …။ ချစ်စု မျက်လုံးပိတ်ထားပြီး စုတ်ပေးနေသည် …။ “ တော်ပြီ
…ရပ်တော့ …..” စောစောက သူ ချစ်စု ပါးစပ်ထဲ ပြီးမယ် ပြောခဲ့ပေမယ့် အခု ရပ်ခိုင်းနေသည် …။
“ ထုတ်လိုက်တော့..နင့်အဝတ်တွေချွတ်….”
အင်း ..ဆန္ဒကတော့ ချစ်စုသဲသဲကို သူ့လက်ခုပ်ထဲကရေ ဆိုပြီး ..သူ မှောက်လိုမှောက်သောက်လိုသောက် လုပ်တော့မည်…။
ချစ်စု စူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ ဆန္ဒရဲ့ အရှေ့မှာ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ရတာ တကယ်ဘဲ ရှက်သည် ..။ လူလဲ ကြေးစား ဖါသည်မလို ဖြစ်နေပြီ ..။ တဏှာခိုးတွေ ဝေနေတဲ့ ဆန္ဒရဲ့ အကြည့်တွေက ချစ်စု သာ ဖယောင်း ရုပ်ထုလေး ဆိုရင် အရည်ပျော်ကျသွားမလားဘဲ …။ ချစ်စု ပေါင်တန်တွေကို စိထားသလို ကော့ထောင်နေတဲ့ ရင်စိုင် နှစ်မွှာအပေါ် လက်နဲ့ အုပ်ကာထားမိသည် ..။
“ ရှက်မနေပါနဲ့ ချစ်စုရယ်…နင်နဲ့ ဖရန်ကီ လိုးကြတာ ငါအမြဲချောင်းခဲ့တာ…ဗီဒီယိုလဲ ရိုက်ခဲ့တာ…ဟီး ..နင့်ကို လိုးချင်တဲ့ ကောင်တွေ တန်းစီနေတယ်..သိလား …ဖရန်ကီက ဒို့ကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ နဲ့ စွန့်ကြဲလိုက်တာ…
“ ဟင်…နင်ပြောတာ တကယ်ဘဲလား …ဖရန်ကီ က ငါ့ကို တမင် ချန်ခဲ့တာလား …”
“ ဒါပေါ့..နင်ကလဲဟာ..ဒုံးဝေးလိုက်တာ…နိုင်ငံခြားကို သွားတယ် ဆိုတာ ခုချက်ချင်း ထပြီး ထွက်သွားလို့ ရတာမှ မဟုတ်တာ…ကြိုတင်ပြီး ပါ့စပို့လျောက် ..ဗီဆာယူ ..ကြို သိနေတာဘဲလေ …ခစ်ခစ်ခစ်ခစ် …”
ဆန္ဒက သူ့သွားဝါဝါတွေ အကုန်ပေါ်အောင် ရယ်လိုက်ပြီး..သူ့လိင်တန်ကြီးကိုကွင်းတိုက်သလို ရှေ့နောက် ပွတ်ချေ နေသည် ..။
“ ချစ်စု…နင် ဖင်လိုးခံဘူးတယ် မဟုတ်လား …”
“ ဟဲ့ ကောင်စုတ်..နင် မိုက်ရိုင်းလှချည်လား ..ဘာတွေ လာမေးနေတာလဲ ….”
ဆန္ဒက ချစ်စုကို ကုတင်ပေါ် တွန်းလှဲလိုက်သည် ..။
“ ဖြည်းဖြည်း လုပ်ပါဟာ..အရမ်းဘဲ ….”
ချစ်စု ကိုယ်ပေါ်ကို ဆန္ဒ တက်ခွလိုက်သည် …။ ချစ်စုရင်စိုင်တွေ ထိပ်က မာတင်းစူထောင်နေတဲ့ ရင်သီးလေးတွေကို ဆန္ဒ အငမ်းမရဘဲ စို့စုတ်လေသည် ..။ ချစ်စုလဲ မျက်လုံးတွေ ပိတ်ပြီး သူပြုသမျှ နုရတော့တာဘဲ..။ ချစ်စု ပေါင်တန် ကြားကို လက်ကြီးနဲ့ အုပ်စမ်း လိုက်တော့ အရေတွေ ပေစိုနေတာ ဆန္ဒ တွေ့သွားသည် ..။
“ ချစ်စု ..နင် စိတ်လာနေတာဘဲ…ခစ်ခစ်ခစ်..စောက်ရေတွေ စိုရွှဲနေတယ် ….ဟားဟား…..”
ဆန္ဒရဲ့ ကျက်သရေတုံးတဲ့ အသံကြီးက ကျယ်လောင်လွန်းလှသည် …။ ဆန္ဒ ရဲ့ လိင်ချောင်းကြီး အတင်း ထိုးထည့် တာ ခံရတော့ ချစ်စု ဆန္ဒရဲ့ ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားမိသည် ..။ ဆန္ဒကတော့ စီးစီးကျပ်ကျပ် ချစ်စု အဖုတ် လေးကို တအား ဆောင့်ပါတော့သည် ..။ သူ့ဂွေးစိနှစ်လုံးက တွဲလောင်းကျနေပြီး ချစ်စု ဖင်ကြားကို တဖတ်ဖတ် နဲ့ ရိုက်ခတ်နေသည် …။ ရင်စိုင်တွေကို တအား ဆုပ်ညှစ်လိုက် စို့လကိုလည်း လုပ်သည် ..။ ဆန္ဒလဲ တအားနင်း ဆောင့်တာ ကြောင့် သိပ်မကြာလိုက်ဘဲ သုတ်ရေတွေ တထပ်ထပ် နဲ့ ပန်းလွှတ် လေသည် …။ ဆန္ဒ လဲပြီးသွားပြီး အခန်း အပြင်ဖက်ကို ထွက်သွားရော..နန္ဒ အခန်းထဲ ဝင်လာသည် ..။
“ ဟင်..နန္ဒ…နင်…နင်..ဘာလို့ ဝင်လာတာလဲ….ထက်ွသွားဟာ….”
“ ချစ်စု ..ဒါ ငါတို့ အိမ်..ငါ ထက်ွသွားစရာ မလိုဘူး…..ဟီးဟီး…ငါ့ကိုလဲနင် ပေးလိုးဟာ…..”
“ အို..မလုပ်နဲ့..ငါ ပြန်တော့မယ် ….”
“ မရဘူး ချစ်စု..နင် ငါတို့ကို အလိုးမခံရင် နင့်ပုံတွေ တကမ္ဘာလုံးကို ပျံ့သွားမယ် ….ဟီး..ငါ့မှာလဲ ကော်ပီ ရှိနေတယ်
…နင် မပေးလိုးဘူး ဆိုရင် ငါ ဖြန့်ပစ်လိုက်မှာ….”
ချစ်စု ရင်မောသွားသည် ..။ တကယ့်ကို အပေါစား ဖါမ ဖြစ်နေပြီ …။ တယောက်ပြီး တယောက် လုပ်တာကို ခံနေရသည် ..။ ကြေးစားဖါမ ကမှ ပိုက်ဆံရသေးတယ် .. ။ အခုဟာက ခြိမ်းခြောက်ပြီး အလကား တက်လုပ် နေကြတာ …။ နန္ဒက တောင်မတ်နေတဲ့ သူ့လိင်ချောင်းကို ချစ်စု ပါးစပ်နား လာတေ့ပေးနေသည် …။ စုတ်ပေး… ဆိုတဲ့ သဘော …။ ချစ်စုလဲ လတ်တလော ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူး ..။ သူတို့ အလိုကို မလိုကရ်င်လဲ တကယ်ဘဲ ရူးပေါက်ပြီး ဂေါက်ပြီး အင်တာနက်မှာ တင်လိုက်ရင် ချစ်စု ဘဝတော့ မတွေးရဲစရာဘဲ မဟုတ်လား …။ နန္ဒရဲ့ နံစော်နေတဲ့ လိင်တန်ထစ်လုံးကို ငုံပြီး စုတ်ပေးလိုက်ရပါတော့သည် ..။
နန္ဒ က ချစ်စု နောက်စိ ကနေ လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ချစ်စု ပါးစပ်ထဲကို သူ့ အတန်ကို ထိုးထိုးညှောင့်လာသည် ..။ ချစ်စု အာခေါင်ထဲကို လိင်တန် အရှည်ကြီး တအား တိုးဝင်လာနေသည် ..။ ချစ်စု ငရဲကျနေသလို ခံစားနေရသည် …။
“ အား..တော်ပြီ..ပြီးသွားလို့ မဖြစ်သေးဘူး…..တော်ကြာ ပြီးသွားရင် လီး နောက်တခါ ထပ်တောင်ဖို့ ကြာနေမယ် …”
ချစ်စု ပါးစပ်ထဲက သူ့အတန်ကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည် …။
“ ဖင်ကုန်းပေးစမ်း..ချစ်စု …နင့်ကို ဖရန်ကီ ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး လိုးတာ ငါ ခဏခဏ တွေ့တယ် . ..”
ချစ်စုလဲ တတက်စားလဲ ကြက်သွန်…နှစ်တက်စားလဲ ကြက်သွန် ဘဝမို့ မထူးတော့ဘူးဆိုပြီး သူ့ကို ကုန်းပေး လိုက်ရသည် ..။ နန္ဒသည် မညှာမတာဘဲ ချစ်စုကို ဖင်ကုန်းရက် နဲ့ လုပ်သည် ..။ တအား ဆောင့်ထည့် လုပ်သည် …။ တဖန်းဖန်း အသံတွေ ဆူညံနေသည် ..။ ချစ်စုရဲ့ ခါးကို လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူ တအားဘဲ
ချစ်စုလဲ သူ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမို့ ကိုယ့်အမှားတွေကို နောင်တ ရလို့မဆုံး ဖြစ်ရင်း မျက်လုံးတွေ စုံမှိတ်ထားပြီး သူ လုပ်သမျှ ခံနေလိုက်ဆဲ ရုတ်တရက်ကြီး သူ့အတန်ကြီး ချစ်စု ပိပိထဲက ထွက်သွား သည် …။ ချစ်စုလဲ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဖင်ကုန်းရက် အတိုင်းဘဲ ငြိမ်နေလိုက်သည် ..။ ခဏကြာတော့ အတန်ကြီး နဲ့ ပြန်ထိုးသွင်းလာပြန်သည် ။ သူ့အတန်ကြီးက ပို ကြီးလာသလိုလို ထင်မိလိုက်သည် ..။ တဖြေးဖြေးချင်း အသွင်း အထုတ် လုပ်နေသည် ..။ ဒီအချိန်မှာ ချစ်စု နှုတ်ခမ်းတွေကြားကို တခုခု ထိတွေ့လိုက်တဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် ချစ်စု မျက်လုံးတွေ ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိရသည် ..။
နန္ဒ က ချစ်စု မျက်နှာရှေ့ လာရပ်ပြီး သူ့လိင်တန်ကြီးကို ချစ်စု ပါးစပ်ထဲကို လာထိုးထည့်နေတာ …။
“ စုပ်လိုက်..ချစ်စု…ငါ့လီးကို စုပ်လိုက် . . .” လို့ ပါးစပ်က ပြောရင်း ….။
ဟင်…ဒါ…ဒါဆို …အနောက်က ဆောင့်ထည့်လုပ်နေတာ ဘယ်သူလဲ ……။
ချစ်စု အနောက်ကို သမင်လည်ပြန် ပြန်ကြည့်လိုက်မိတော့ ..နန္ဒရဲ့ သူငယ်ချင်း ကက်နက်ကြီး ဖြစ်နေသည် ..။ ဆံပင်ရှည်ရှည်ကြီးနဲ့ ကလန်ကလား ပိန်ရှည်ရှည် ဆေးသမားကြီး ..။ ချစ်စု ရှက်လဲရှက် ..ဒေါသလဲ ဖြစ်ပေမယ့် ကက်နက်က တဖန်းဖန်း နဲ့ ဆောင့်ထည့်နေပြီးပြီ ..။ သူ့ဂွေးဥကြီးတွေကလဲ တဘတ်ဘတ်နဲ့ လာရိုက်နေတဲ့ အသံတွေ ကြားနေရသည် ။
“ ချစ်စု..ဘာကြောင်နေတာလဲ..ငါ့လီးကို စုပ်ပါ ဆို . . .”
နန္ဒက သူ့အတန်ချောင်းကို အရင်းက ဆုပ်ကိုင်ပြီး ချစ်စု ပါးပြင်ကို ရိုက်လိုက်သည် …။
“ ဟ..ပါးစပ် ဟ ….”
ချစ်စု ပါးစပ်ထဲကို ထိုးထည့်လာတဲ့ သူ့အထစ်လုံးကြီးကို မကျေမနပ်နဲ့ဘဲ ငုံစုပ်ပေးရတော့သည် …။
ရှေ့ကနေ ပါးစပ်ထဲ အတန်တချောင်း..အနောက် ဖင်ကြားကနေ အတန်တချောင်း ..ချစ်စု ဘဝလဲ ဖါသည်မ လို ဖြစ်နေပြီ ..။ ဖရန်ကီ နဲ့ အတူတူ ကြည့်ဘူးတဲ့ နိုင်ငံခြားက အပြာ ဒီဗီဒီကားတွေ ထဲကလို နှစ်ယောက် တယောက် ဖြစ်နေပြီ …။ တော်တော်ကြာကြာ လုပ်နေကြပြီး ကက်နက် က နေရာပြောင်းကြရအောင် လို့ ပြောပြီး သူ့အတန်ချောင်း ကို ပြွတ်ကနဲ ချစ်စု ပိပိထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ..။ နန္ဒက ချစ်စု ဖင် အနောက်တဲ့တဲ့ကို လာရပ်ပြီး သူ့အတန်ကို ချစ်စု ပိပိထဲကို ပြန်ထိုးသွင်းလိုက်သလို ကက်နက်က ချစ်စု ပါးစပ်ထဲကို သူ့အတန်ကြီး နဲ့ လာတေ့သည် ..။ အရေတွေ ချွဲကျိကျိနဲ့ ပေပွနေတဲ့ ကက်နက်ရဲ့ လိင်တန်မဲမဲရှည်ရှည်ကြီးကို ရွံပေမယ့် အောင့်အည်း ပြီး ငုံစုပ်ပေးရပြန်သည် ..။
နန္ဒ နဲ့ ကက်နက် တယောက်လှည့် တချီပြီးတချီ တက်ဆောင့်ကြတာတွေကို ခံရပြီး ချစ်စု ကို လမ်းထိပ် အထိ ပြန်လိုက်ပို့ပေးကြသည် ..။ နောက်နေ့တွေ မှာ ထပ် လုပ်ကြဖို့ ချိန်းနေကြလို့ ချစ်စုလဲ သူတို့ လက်ခုပ်ထဲက ရေ ဖြစ်နေပြီ …။ ခြိမ်းခြောက် အနိုင်ယူထားတဲ့ သူတို့ လက်ထဲက ဘယ်လို ရုန်းထွက်ရမလဲ မသိတော့ဘူး ..။ ချစ်စု လူ့လောကမှာ ဆက် မနေလိုတော့ဘူး …။ ရက်ရက်စက်စက် စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ဖရန်ကီ့ကိုလည်း စိတ်အရမ်း နာကျည်း မိသည် ..။ မုန်းမိသည် ..။ ချစ်စု ဘဝလေးကို ချေမွသွားတဲ့ လူ…။ အိမ်ကိုလည်း မပြန်ချင်ဘူး …။ မေမေနဲ့ မမကြီးတို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း ဘယ်လို ဖြေရမလဲ မသိဘူး …။ ခြေဦးတည့်ရာ သွားတော့မည် လို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပြီး အိမ်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် အရပ်ကို ထွက်ခဲ့လုက်သည် ။
အနောက်က ခေါ်သံကြောင့် ချစ်စု လှည့်ကြည့်လိုက်မိသည် …။
ဟင်…ကိုသူရိန်ထနွ်း …..။
“ ချစ်စုအိမ် မပြန်သေးဘူးလား…ဘယ်သွားမလို့လဲ …..”
ချစ်စုဘာမှ ပြန်မဖြေဘူး ..။ လမ်းကိုဘဲ ဆက်လျောက်နေသည် …။
“ ချစ်စု အမ နဲ့ အမေတို့ ချစ်စု ပြန်မလာလို့ စိတ်ပူနေကြတယ် …..လာ…ကိုယ် လိုက်ပို့ပေးမယ်…အိမ်အထိ ….”
ချစ်စု သူ့ကို မကြည့်ဘဲ လမ်းဆက်လျောက်နေမိသည် …။ သူ အနောက်ကနေ လိုက်လာသည် …။ လမ်းမ ကြီးပေါ်ကို ရောက်လာသည် ..။ လမ်းဘေး ပလက်ဖေါင်းအတိုင်း ချစ်စု လျောက်နေသည် ..။ ကိုသူရိန်ထွန်း တောက်လျောက် လိုက်လာသည် ..။ ချစ်စုကို အိမ်ပြန်ဖို့ ပြောနေသည် …။ ချစ်စု သူ့စကားကိုနားမထောင်.. လက် မခံတော့ သူ ချစ်စုကို လက်နဲ့ ဆွဲခေါ်ဖို့ ကြိုးစားသည် …။
“ အို…လွှတ်…လွှတ်…ချစ်စု ကို လွှတ် ….”
ချစ်စု ရုန်းသည် ..။ တနွ်းပစ်သည် ..။ သူက ပို ချုပ်ကိုင် လာသည် ..။
“ လွှတ်…လွှတ်….ကယ်ကြပါရှင်..ကျမကို အတင်း ဆွဲခေါ်နေပါတယ် …..ကယ်ကြပါ ……”
ချစ်စု အော်သည် …။ ကိုသူရိန်ထွန်းက ဂရုမစိုက်ဘူး …။ တအားဆွေဲ ခ်ါသည် …။ ချစ်စုတို့ ဘေး လမ်းမကြီးပေါ်က တအားဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးတစီး ခပ်လှမ်းလှမ်း အရောက် ထိုးဆိုက်သွားသည် …။အမြင့်စား အကြီးစား ဆိုင်ကယ်ကြီး …။
ဆိုင်ကယ်ပေါ်က လူကြီးတယောက် ဆင်းလာသည် ..။ အရပ်မြင့်မြင့် လူကြီးတယောက် …။
“ဟေး..ဘာတွေ ဖြစ်နေကြတာတုန်း …”
ကိုသူရိန်ထွန်းက ..“ ငါ့ညီမ စိတ်ကောက်လို့ ငါ အိမ်ပြန်ခေါ်နေတာ …” လို့ အော်ပြောသည် ..။ ချစ်စုက..“ မဟုတ်ဘူး …. မဟုတ်ဘူး ..ကျမ သူ့ညီမ မဟုတ်ဘူး …..ကျမကို မတရား လာဆွဲခေါ်နေတာ …” လို့ အော်သည် …။ ဆိုင်ကယ်သမား လူကြီး အနားတိုးလာသည် …။ သူ့ပုံက လူလတ်ပိုင်း အရွယ် ရင်အုပ်ကားကား ဗလ ခပ်တောင့်တောင့်နဲ့ ဆံပင်လိန်ကောက်ကောက် နဲ့ ..တီရှပ်လက်ရှည် အပြာရင့်ရောင် နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ အနက် ..လည်ရှည် ရှူးဖိနပ်အနက် ဝတ်ထားသည် ..။ လည်ပင်းမှာက ရွှေဆွဲကြိုး တုတ်တုတ်ကြီးတွေ သုံးကုံးလောက် ဆွဲထားသည် ..။
“ ဟေ့လူ…လွှတ်လိုက်ဗျာ..ကြည့်မကောင်းဘူး..မိန်းကလေးက သူ့အကို မဟုတဘ်ူး ပြောနေတယ် …နောက်မှ.. ကျုပ် ကို အဆိုးမဆိုနဲ့နော် ….”
“ ကျုပ်ညီမ က စိတ်မနှံ့ဘူး ….ခင်ဗျား ဝင်မပါပါနဲ့ ..ဘေးဖယ်နေဗျာ…..”
“ ကျမ စိတ်ကောင်းတယ်..ကျမ ကောလိပ်ကျောင်းသူ ပါ ….သူ …သူ….မတရားဆွဲခေါ်နေတာ …ကယ်နိုင်ရင် ကယ်ပါအုံး..အကိုကြီး ……”
ချစ်စုလဲ လူထွားကြီး ဖက်ကို ပြေးသွားလိုက်သည် …။ လူထွားကြီးက ကိုသူရိန်ထွန်းကို ..ဘယ်နှယ့်ရှိစ…ဆိုတဲ့ အမူအရာနဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို မြှောက်ပြလိုက်ပြီး …“ ညောင်းတော့ သူငယ်ချင်း ….ညောင်းတော့…..ခင်ဗျား ဒီမှာ မရှိသင့်တော့ဘူး ….” လို့ ပြောလိုက်သည် ..။
ကိုသူရိန်ထွန်းက ..“ မညောင်းဘူး ဆိုရင်ကော..ကျုပ်ကို ဒီလောကမှာ ဘယ်သူမှ အမိန့်ပေးလို့ မရဘူး …” လို့ ခပ်မာမာ ပြန်ပြောရင်း လက်သီးကို ဆုပ်ရင်း ရှေ့တိုးလာသည် ..။ ဆိုင်ကယ်သမားကြီးက ကိုသူရိန်ထွန်း ဆီကို တိုးကပ်သွားသည် …။ ပွဲကြီးပွဲကောင်းဘဲ..။ ချစ်စုလဲ ငေးကြည့်နေမိသည် ..။ စိတ်ထဲမှာ ကိုသူရိန်ထွန်း ခံရပါစေ လို့ ဆုတောင်းနေသည် ..။
“ ဝင်ရှုပ်ချင်တဲ့ အမှိုက် ….”
ကိုသူရိန်ထွန်းက ဆိုင်ကယ်သမားကြီးကို စထိုးသည် ..။ ကိုသူရိန်ထွန်းသည် တက္ကသိုလ် တုံးက လက်ဝှေ့ သမားတယောက်လို့ မမကြီး ချစ်စုကို ပြောပြခဲ့ဖူးတာ အမှတ်ရသည် ..။ သူထိုးတဲ့ လက်သီးတွေကို ဆိုင်ကယ် သမားကြီးက ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ရှောင်တိမ်းလိုက်ပြီး ပြန်ထိုးထည့်လိုက်တာ တွေ့လိုက်ရသည် ..။ ကိုသူရိန်ထွန်း ပလက်ဖေါင်းပေါ်ကို ပက်လက် လန် လဲကျသည် …။
“ လာမစမ်းနဲ့လေ..ကျုပ် ပြောနေသားဘဲ…နောက်မှ အဆိုး မဆိုနဲ့ လို့ ….”
ဆိုငက်ယ်သမား လူထွားကြီးက လဲကျနေတဲ့ ကိုသူရိန်ထွန်း နံကြားကို တအား လွှဲကာ ကန်နေသည် ..။
ကိုသူရိန်ထွန်းရဲ့ နာနာကျည်းကျည်း အော်သံကြီး ထွက်လာသည် ..။ သူ့ခါးကို သူ လက်နဲ့ ဖိကိုင်ပြီး ခွေလဲကျနေသည် …။
“ ငါ့ကို လာမလုပ်နဲ့..မင်းနာသွားမယ် …ခွေး သား ….ငါ့ကို ဘာထင်နေလဲ ….”
ထပ်ကန်ထည့်နေသည် ..။ ကန်လို့ ဝမှ ချစ်စုဆီကို သူ လျောက်လာသည် …။
“ ညီမလေး ….မင်း ဘယ်သွားချင်လဲ ….”
“ ကဲ…ကဲ..ဆိုင်ကယ်ပေါ် တက်..နောက်မှပြော…ညီမလေး သွားချင်တဲ့ နေရာကို အကို လိုက်ပို့မယ် …….”
“ ဟုတ်…ဟုတ် …..”
သူ့ဆိုင်ကယ် အနောက်ကနေ သူ့ခါးကို ဖက်ပြီး ချစ်စု ပါသွားပြီ ….။
ဒီလူကြီး ဆိုင်ကယ်ကို ကားတွေ ကြားထဲ ပွတ်ခါသီခါလေးတွေ မောင်းနေတာ ချစ်စု ကြောက်လိုက်တာ ..။ သူ့ခါးကို တင်းတင်း ဖက်ထားမိသည် ။ ဘယ်သူမှန်းမသိ ..ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ လူကြီးတယောက် နောက်ကို
ကောက်ကောက် ပါအောင် လိုက်ခဲ့မိပြန်ပြီ ..။ ချစ်စုတော့ မှားပြီးရင်း မှားရင်း ဖြစ်နေပြီလား …။ မသိဘူး ..။ ချစ်စု ဘဝ က တော်တော်ဆိုးနေပြီ ..။ အိမ်လဲ မပြန်ချင်တော့ဘူး ..။ ဒီလူကြီးက ဆိုင်ကယ်စီးတော့ အရမ်းကျွမ်းသည် ..။
မိုးကြီးချုပ်တော့မည် ..။ အမိုက်မ ချစ်စုတယောက် လူစိမ်းတယောက် နဲ့ လိုက်သွားနေမိသည် ..။ မှောင်လာပြီ ..။ မြို့သစ်တခု ရဲ့ စည်ကားတဲ့ လမ်းမကြီး ပေါ် ရောက်နေသည် …။ ကော်ဖီဆိုင်လေးတဆိုင် မှာ သူ ရပ်လိုက်သည် ..။ ဆိုင်နံမည်က ..“ ဆုံဆည်းရိပ် ” တဲ့ ..။
“ အေးအေးဆေးဆေး မင်းလေးနဲ့ စကားပြောရအောင် …”
ကော်ဖီဆိုင်မှာ ထိုင်လိုက်ကြသည် ။
“ ငါ့နံမည် ..တိမ်တိုက် ..မင်း က …”
“ ချစ်စုသဲသဲ ….”
“ နံမည်ကတော့ အလန်းဘဲ …လူက ဘာတွေ ညစ်နေလဲ ….”
“ ချစ်စု ပြောပြပါမယ် ….လူတစုက ချစ်စု စုတ်ပြတ်သပ် သွားအောင်ကို ချစ်စု ဘဝလေးကို ချေမွပစ်လိုက်ကြတယ်
“ မင်းလေးကို ချေမွပစ်တဲ့လူတွေထဲ စောစောက ငါနဲ့ ဖိုက်တဲ့ ဘဲကော ပါလား …”
“ မပါဘူး..သူက ချစ်စု ကို ကြိုက်နေတဲ့ လူကြီး..ချစ်စု အမရဲ့ မိတ်ဆွေ ပေါ့ …”
“ အော်..အော် ..ကဲ..ဘယ်လို ဖြစ်သလဲ အကုန်သာ ပြောပြ …”
ချစ်စုက ဖရန်ကီ နဲ့ စတွေ့တဲ့ အချိန်ကနေ နန္ဒတို့ ၀ိုင်းဖြုတ်ကြတဲ့ အထိ ပြောပြလိုက်သည် ..။
တိမ်တိုက်က သေသေချာချာ နားထောင်သည် ..။
“ မင်းပြောတာတွေ အမှန်တွေ ချည်းဘဲ နော် …”
“ ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီး …”
“ ငါဆိုတဲ့ကောင်က မတရားရင် လက်ပိုက်ကြည့်မနေတတ်ဘူး ..မင်းကို ချစ်ဟန်ဆောင်ပြီး လုပ်ချင်သလို လုပ်သွားတဲ့ ဖရန်ကီ ဆိုတဲ့ အကောင်ရော..မင်းကို ဓါတ်ပုံရိုက် ခြိမ်းခြောက်ြပီး မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြတဲ့ ဆန္ဒ..နန္ဒ နဲ့ ကက်နက် ဆိုတဲ့ ခွေးသူတောင်းစား တွေကိုရော ငါ မင်းကိုယ်စား ပြန်ပြီး လက်တုံ့ပြန်ချင်တယ် ….”
တိမ်တိုက် ပုံစံက ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်မယ့်ပုံ ..။
“ကဲ ကော်ဖီသောက်လိုက်အုံး…မုန့်လဲစား …”
တိမ်တိုက်က စီးကရက်တလိပ်ကို ထုတ်ပြီး မီးညှိသည် ..။
“ ချစ်စု..မင်း ဘာလုပ်ချင်လဲ ..ဘယ်သွားချင်လဲ ….ပြော ”
“ ကျမ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ပါဘူး..အကိုကြီးရယ် …”
“ သူငယ်ချင်း အိမ်..ဆွေမျိုးအိမ် သွားချင်လား ..ငါ မင်းကို ဘယ်ကို လိုက်ပို့ရမလဲ ….”
“ ဘယ်မှသွားစရာ မရှိပါဘူး အကိုကြီး ..”
“ ငွေရော ဘယ်လောက်ပါလဲ …”
“ ငွေလဲ မပါဘူး ….”
“ မင်းဟာက မလွယ်ပါလား …ကဲ..ဒါဆို မင်း ငါ့အိမ် လိုက်ခဲ့ …”
“ ဟုတ်ကဲ့ …”
မထူးတော့တယ့် ဘဝ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ပါစေတော့ …။ တိမ်တိုက် ဆိုတဲ့ လူကြီး နဲ့ လိုက်သွားလိုက်သည် ..။
သူက တာမွေဖက်က တိုက်အမြင့်ပေါ်က တိုက်ခန်းတခန်းမှာနေသည် ..။
“ ကဲ..အေးအေးဆေးဆေး နား..ချစ်စု ..ရေချိုးချင် ချိုး ..စားစရာ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ရှာစား…ငါ လဲ အိပ်တော့မယ်
…မနက်ဖန်က စပြီး မင်းကိစ္စတွေ ငါစုံစမ်းမယ် …”
တိမ်တိုက်များ ညဖက် သူ့ကို တခုခု လာလုပ်လေမလားလို့ ချစ်စု တထိတ်ထိတ် နဲ့ စိုးရိမ်နေခဲ့ပေမယ့် တိမ်တိုက်သည် တဖက်ခန်းမှာ အိပ်တာမှ ဟောက်သံတွေတောင် ကြားနေရသည် ။ နောက်တနေ့ မနက် ချစ်စု
အိပ်ရာက နိုးတော့ တိမ်တိုက် အိမ်မှာ မရှိတော့ ..။ ထမင်းစားတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ ဘူးသီးကြော် တပုဂံ.. ပေါင်မုန့် ထောပတ်သုတ် နှစ်ချပ်နဲ့ စာလေးတစောင် တွေ့သည် ..။
( ချစ်စု …စားစရာတွေ စား..ဓါတ်ဘူးထဲမှာ ကော်ဖီ ရှိတယ် …အေးအေးဆေးဆေး နား ..)
ချစ်စု ရေမိုးချိုး..သူထားခဲ့တဲ့ ကော်ဖီ နဲ့ မုန့်တွေ အကြော်တွေ စားလိုက်သည် ..။ တိမ်တိုက် ပြန်ရောက်လာတော့ နေ့လည် ၁၂နာရီ ကျော်နေပြီ ..။
“ ဟေ့..ချစ်စုသဲသဲ…ဘိုက်ဆာနေပြီလား….ငါ မင်းအတွက် စားစရာ ဝယ်လာတယ် …လာ..စားလိုက်အုံး…..”
တိမ်တိုက်ရဲ့ လက်ထဲမှာ စားစရာထုပ်တွေ နဲ့ ..။ ချစ်စုလဲ ဆာနေပြီ ဆိုတော့ သူ ဝယ်လာတာတွေကို သူနဲ့ အတူတူ
ထိုင် စားလိုက်သည် ..။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ချစ်စု ကြိုက်တဲ့ မြေအိုးမြီးရှည် နဲ့ ဝက်သားလိပ် ..။စားသောက်ပြီးတော့ တိမ်တိုက်က သူ့ဘောင်းဘီအိပ်ထဲက ကင်မရာလေး တလုံးကို ထုတ်ယူလိုက်သည် ..။
“ မင်းကို စောစောက အစား မစားခင် ပြောပြရင် မင်း အစား မစားတော့မှာ စိုးလို့ အစား စားပြီးမှဘဲ ပြောပြတာ….ငါ ဒီမနက် လှုပ်ရှားလိုက်တာ မင်းရီးစား ဆိုတဲ့ ဖရန်ကီ ရဲ့ အကြောင်းတွေ တော်တော် များများ သိလာရတယ် ..
“ အင်း..စိတ်တော့ မကောင်းပါဘူး …မင်းရီးစား ဆိုတဲ့ ကောင်က နိုင်ငံခြားမှာ မဟုတ်ပါဘူး …သြဇီ သွားနေတယ် ဆိုတာ ညာတာ …နိုင်ငံခြားသွားတာ ဘန်ကောက်တင်ဘဲ..သူတို့က လတိုင်းလို ဈေးဝယ်ထွက်လေ့ရှိတဲ့အတိုင်း ဘန်ကောက် နဲ့ စင်္ကာပူ ကို သွားတာ….ခဏဘဲ..ခု ပြန်ရောက်နေပြီ ….”
“ ဟင်..ဟုတ်လို့လား …..”
“ ဟုတ်တာပေါ့..မင်းတို့လို စိတ်သဘောထား ကောင်း..ရိုးသား ဖြူစင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အပျော်တမ်း ကစားပြီး စားသွားတဲ့ ဖရန်ကီ လို ကောင်တွေ က တပုံကြီး ကွ…”
“ သူ…သူ…သူ့ကို တွေ့…တွေ့…….တွေ့ခဲ့လို့လားဟင် ….”
“ ဒါပေါ့..ဒီမှာ ကြည့်..ငါ သူ့ခြံထဲက ရေကူးကန် နားမှာ ကောင်မလေးတယောက် နဲ့ ပြုံးပျော်နေတာကို ရိုက်လာတာ
တိမ်တိုက် က ကင်မရာလေးထဲက သူရိုက်လာတာတွေကို ပြသည် …။
“ ဟင် …..”
ဟုတ်သည် ..။ ဖရန်ကီသည် ပိုးဟတ်ဖြူ နဲ့ ရယ်မောနေကြသည် …။
ဒါ..ဒါ….ဒါဆို…ချစ်စု ကောင်းကောင်းကြီး လှည့်စားခံခဲ့ရတာပါလား …။
ဖရန်ကီသည် ချစ်စုကို သူစိတ်တိုင်းကျ အသုံးပြုခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ နန္ဒ…ဆန္ဒ…နဲ့ ကက်နက် တို့ကို စွန့်ကျဲခဲ့တာ….။
“ ချစ်စုသဲသဲ..မင်း အတွက် ဖရန်ကီက ပထမဆုံး ရီးစား လား …”
“ ဟုတ်ပါတယ် ….”
“ အင်း..ငါ စုံစမ်းလို့ သိရသလောက်က ဖရန်ကီက မင်းလို ယောက်ျားနဲ့ တခါဘူးမှ မတွေ့ဖူး မကြုံဖူးသေးတဲ့ အပျိုစင် နုနုထွတ်ထွတ်လေးတွေကို အယုံသွင်းပြီး လိုက်ဖျက်စီးနေတာ ကြာပြီ တဲ့ …”
ချစ်စု မျက်ရည်တွေ ဖြိုင်ဖြိုင်ကျ ငိုနေရပြီ …။
“ ချစ်စု သဲသဲ …..”
“ ရှင် …..”
“ မင်း ခံလိုက်ရတာ မှန်ပေမယ် ..ဒီကောင်တွေ အတွက် အရမ်း ကံဆိုးသွားတာက မင်း နဲ့ ငါ တွေ့လိုက်လို့ဘဲ ….”
“ အေး..မင်းကတော့ ငါ့အကြောင်းကို မသိသေးဘူးပေါ့ …ငါဆိုတဲ့ တိမ်တိုက်က အစုံလုပ်တဲ့ကောင် ….”
“ ဟားဟား…မင်း နားမလည်ဘူး ထင်တယ် …အစုံ လုပ်တယ် ဆိုတာက .. မဟုတ်တာလို့ လူတွေ သတ်မှတ် ထားတာတွေ အကုန် လုပ်နေတဲ့ လူ ..လို့ ပြောတာ …ငါ မင်းကို စတွေ့ တွေ့ချင်းထဲက သနားမိတယ် ….
ခင်မိသွားတယ် ….မင်းအကြောင်းကို ကြားလိုက်ရတော့ ငါ ဟတ်ထိသွားတယ် ….ငါ မင်းကို ကူညီချင်တယ် …မင်း အတွက် လက်တုန့်ပြနခ်ျင်မိတယ် ….ဒါ သူတို့ ကံဆိုးသွားတာဘဲ ….”
“ အကြိုကီးက သူတို့ကို ချစ်စုအတွက် ..လက်စားချေပေးမှာလား …”
“အေး….မင်းကိုယ်စားပေါ့ …ငါ တခု စဉ်းစားမိတာ ရှိလို့ မင်းကို အရင် မေးရအုံးမယ် ….မင်း နဲ့ ဖရန်ကီ အိပ်တာ တွေကို နန္ဒတို့က ဗီဒီယို ရိုက်ထားတယ် ဆိုတာ အဲဒီဗီဒီယို ကို မင်းမြင်ရလား..သူတို့က ပြလား …ဆိုတာ သိချင်တယ် …”
“ သူတို့က သေသေချာချာ မပြပါဘူး…ကင်မရာကိုဘဲ ထောင်ပြပြီး သူတို့ ရိုက်ထားတယ် လို့ ပြောတာပါ …”
“ အေး..သူတို့ တကယ် ရိုက်ချင်မှ ရိုက်ထားမယ်..သက်သက် မင်းကို ညာတာဘဲ ဖြစ်မယ် ….တောက် …ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ..ဒီကောင်တွေ ငါ နဲ့ တွေ့တော့မှာပါ ….”
ချစ်စုကို သူ ထားခဲ့ပြီး အပြင် ပြန်ထွက်သွားပါသည် …။
ချစ်စုလဲ တယောက်ထဲ ငိုနေမိသည် …။
ဘာတွေ ဖြစ်လာအုံးမလဲ ….။
တိမ်တိုက် ဆိုတဲ့ လူကြီးက တကယ့် လူဆိုးကြီး တယောက် လား ….။
ထူးဆန်းတာက ချစ်စု နဲ့ တိုက်ခန်းတခန်းထဲ အတူတူ နေနေ ပေမယ့် ချစ်စုကို သူ ဘာမှ မကြံစည်ဘူး …။ လူဆိုးကြီး တယောက် ဆိုရင် ချစ်စုကို မုဒိန်းကျင့်မှာဘဲ မဟုတ်လား …။ အင်းလေ …မုဒိန်းမကျင့်ဘဲ တခြား ဆိုးတာ
တွေဘဲ လုပ်တဲ့ လူဆိုးတွေလည်း ဒီ လောကမှာ ရှိနိုင်တာပါဘဲလေ …။
ချစ်စုလဲအဝတ်တထည် ကိုယ်တခု နဲ့ သူ့နောက် လိုက်လာတာ ဆိုတော့ ဝတ်လာခဲ့တဲ့ အဝတ်အစား
တွေကို လျော်ချင်လို့ တိမ်တိုက်ရဲ့ ရှပ်အင်္ကျီတထည် နဲ့ ပုဆိုးတထည်ကို ခဏယဝူတ်ထားလိုက်ပြီး အဝတ်တွေ
လျော်လိုက်သည် …။ ညနေဖက် သူ ပြန်လာတော့ အရင်တခါလိုဘဲ စားစရာ အထုပ်တွေ လက်ထဲမှာ ပါလာသည် ..။
ချစ်စု ရှုပ်ပွနေတဲ့ သူ့အိပ်ခန်းကို ဝင် ရှင်းပေးနေတုံး သူ အော်ခေါ်လို့ ပြေးထွက်ခဲ့ရသည် …။
“ ဟင် ….မင်း..ငါ့အဝတ်တွေ ယူ ဝတ်ထားပါလား …..ဟားဟား…..မင်း က အဝတ်အစားမှ မပါဘဲကိုး….အေးလေ
…ငါ မင်းကို ဝယ်ပေးအုံးမှပါဘဲ…က.ဲ .စားစရာတွေပါလာတယ် … မင်းနဲ့ ငါနဲ့ စားကြရအောင် ….”
ခေါက်ဆွဲကြော် နဲ့ ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်တွေ ဝယ်လာတာ …။ သူနဲ့ ချစ်စု စားကြသည် ..။
သူက …“ မင်းကို လှည့်ဖျားပြီး အနိုင်ယူတဲ့ လူတွေကို မကြာခင် လှလှပပကြီး လက်စားချေနိုင်တော့မှာပါ..ချစ်စု ….” လို့ ပြောသည် ။
ချစ်စုလဲ တကယ်တော့ လက်စားချေတာတွေ မလုပ်စေချင်ပါဘူး ..။ တခုဘဲ ….ဟိုကောင်တွေ လက်ထဲမှာ ချစ်စုရဲ့ အပြာပုံတွေ ရှိနေမယ် ဆိုတာကိုတော့ ချစ်စု အရမ်းလန့်တယ် …။ အွန်လငိုးမှာ ပျံ့သွားရင် သေရော …။ ချစ်စုတော့ ဆက် အသက်ရှင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး …။
“ ငါကလဲ ငယ်ငယ်က ငါ့မိသားစုတွေ နဲ့ ကွဲသွားခဲ့ရတော့ ငါ့ညီမလေးနဲ့လည်း တသက်လုံး ပြန်မတွေ့ခဲ့ရတော့ မင်းကို ဆုံလိုက်တဲ့အချိန် ညီမလေးပြန်တွေ့သလို ခံစားလိုက်ရတယ်….”
တိမ်တိုက်က ..“ မင်း ငါ့အခန်းကို ဘာဝင်လုပ်တာလဲ …” လို့ မေးသည် ..။
“ ပွနေလို့ ချစ်စု ရှင်းပေးနေတာပါ ….” လို့ ချစ်စုက ဖြေသည် …။
“ အင်း..ရှင်းစရာ မလိုပါဘူး …မင်း ငါ့ကုတင်ပေါ်မှာ ဘာတွေ တွေ့သေးလဲ ….”
“ ဘာ…ဘာမှ မတွေ့ပါဘူး ….”
“ အင်း..မတွေ့ရင် ပြီးရော….ငါ့ခေါင်းအုံးအောက်မှာ ကျည်ထိုးမောင်းတင်ထားတဲ့ သေနတ်တလက် ရှိတယ် ….”
“ ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ့ ….”
“ မင်းကောင်တွေကို ငါ လက်တုံ့ပြန်ပြီးရင် မင်း ဘာဆက်လုပ်ချင်လဲ ပြောပေါ့..ငါ ကူနိုင်တာ ဆိုရင် ကူမယ် …”
“ ဟုတ်ကဲ့ ….”
ဒီညလဲ သူနဲ့ ချစ်စု တိုက်ခန်းထဲ အတူတူ ရှိနေကြပေမယ့် သူချစ်စု ကို ဘာမှ မလုပ်ဘူး ..။ ချစ်စု တကယ်တော့ ဘာဆက်လုပ်ရမယ် ဆိုတာ မသိသေးဘူး ..။ စိတ်တွေ လေလွင့်ပြီး ကျောင်းလဲ ဆက်မတက်ချင်..အိမ်ကိုလည်းး မပြန်ချင်ဘူး …။ အိပ်လို့မပျော်တဲ့ ည က ရှည်လျားလွန်းတယ် လို့ ထင်ရသည် ။
ချစ်စု ညက အိပ်မရလို့ မနက်ကျ နေမြင့်မှ နိုးသည် ..။ ချစ်စု နိုးတော့ တိမ်တိုက် မရှိတော့ဘူး …။ သူ ဘယ်အချိန်က အပြင်ထွက်သွားလဲ ချစ်စု မသိလိုက်ဘူး…။ ထုံးစံအတိုင်း နေ့လည် ၁၂နာရီကျော်တော့ သူပြန်ရောက်လာသည် ။ သူ့လက်ထဲမှာ စားစရာအထုပ်တွေ ခါတိုင်းလိုဘဲ ပါလာသည် …။ ချစ်စုနဲ့ သူသူဝယ်လာတဲ့ ဒန်ပေါက်ထမင်းတွေ ထိုင်စားကြသည် …။
“ ရှင် …”
“ မင်း ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့..ပြစရာ ရှိလို့ ….”
ချစ်စု သူနဲ့ လိုက်သွားသည် ..။ သူ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီး ပေါ် သူ့ခါးကို ဖက်ပြီး ..။ လေကတဟူးဟူး တိုက်နေလို့ ချစ်စု ဆံပင်တွေ လေထဲ လွင့်နေသည် ..။ မြို့ပြင်ကို ဦးတည်နေသည် …။
ထောက်ကြံ့ကို ကျော်လာသည် ..။ လမ်းဘေးတဖက်တချက်မှာ လယ်ကွင်းတွေ တွေ့နေရသည် ..။ စိမ်းစိုတဲ့ လယ်ကငွ်းတွေ….။ သူ ဆိုင်ကယ်ကို အရှိန်မြှင့်လိုက်လို့ ချစ်စု သူ့ကိုတင်းတင်း ဖက်လိုက်မိသည် …။အိမ်လေးတွေ သစ်ပင်တွေ ကို ပြန်တွေ့ရပြန်သည် ..။ ဆိုင်ကယ်ကို သူ အရှိန်လျော့လိုက်တာ သတိထားမိသည် …။
မြေနီလမ်း လေးတခုထဲ သူ ချိုးကွေ့လိုက်သည် …။ လမ်းကြမ်းကြမ်းကို ခပ်မှန်မှန် သူ မောင်းနေပြီး သစ်ပင်အုပ်တွေ ထဲမှာ ခြံကြီးတခြံကို ရောက်လာသည် …။ ခြံကြီးထဲမှာ သွပ်မိုး ရေနံချေးသုတ် အိမ်ဟောင်းကြီးတလုံး ကို တွေ့ရသည် ဆိုင်ကယ်ကို သူ စက်သတ်လိုက်သည် ..။
“ ကဲ..ချစ်စု …ရောက်ပြီ ….”
“ ဒါ…ဒါက …”
“ ဒါ..ငါ့ နေရာတခု..ငါ့ စားကျက်..ငါ့နေရာ…..ငါ့စခန်း ပေါ့..ချစ်စု …”
ချစ်စု သူနဲ့အတူ အိမ်ကြီးထဲကို ဝင်ခဲ့သည် …။ ဝင်လိုက်တာနဲ့ လူသုံးယောက်ကို တွေ့ရသည် …။ ထိုင်ပြီး ဖဲကစားနေတဲ့ ဒီလူသုံးယောက်သည် တိမ်တိုက်ကိုလဲ မြင်ရော ..ချက်ချင်း မတ်တပ် ထရပ်လိုက်ကြတာ တွေ့ရသည်
“ သူရဲ ….”
“ ဗျာ..ဆရာတိမ်တိုက် ….”
“ ပစ္စည်း ကို ဘယ်မှာ ထားလဲကွ …..”
“ မြေတိုက်ထဲမှာပါ …ဆရာ …”
“ အေး..ငါ ကြည့်ချင်တယ် ….”
“ ဟုတ်ကဲ့..ကျနော် လိုက်ပြပါမယ် ….”
သူရဲဆိုတဲ့ ရုပ်ခပ်ဆိုးဆိုး လူကြီးက ရှေ့ကနေပြီး မြေတိုက်ခန်းကို ဆင်းသည် ..။ ချစ်စု ဘဝမှာ ပထမဆုံး မြေအောက်ခန်း ဆိုတာကို ဆင်းဘူး တွေ့ဘူးရတာ …။ မှောင်မဲနေတဲ့ လှေခါးထိပ်က မီးခလုပ်လေးကို သူရဲဆိုတဲ့ လူကြီးက ထောက်ကနဲ ဖွင့်လိုက်သည် ..။
“ ဟိုးရှေ့က အခန်းမှာပါ ဆရာ…”
“ အေး ရပြီ..မင်းအပေါ်က ပြန် စောင့် …..”
သူရဲ အပေါ် ပြန်တက်သွားသည် …။
“ ချစ်စု …မင်း အဲဒီအခန်းထဲမှာ ဘယ်သူ ရောက်နေလဲ ဆိုတာ ဟောဟိုက အပေါက်လေးကနေ ချောင်းကြည့်လိုက်
ချစ်စုလဲ သူပြောတဲ့အတိုင်း လက်မလောက် အရွယ် အပေါက်သေးသေးလေးကနေ အခန်းထဲကို ချောင်းကြည့် လိုက်ပါသည် ..။ ချစ်စု တအား အံ့သြသွားသည် …။
ဖရန်ကီ ရောက်နေသည် …။ ဖရန်ကီကို မျက်နှာကျက်က တန်းလန်းကျနေတဲ့ ကြိုးတချောင်းနဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူးပြီး တုပ်နှောင်ထားသည် …။
“ တွေ့လား….ဟားဟား……တ်ိမ်တိုက်တို့က မြန်တယ်…..ဟားဟားဟား……..အရမ်းကို မြန်တယ် . .. သွက်တယ် ……လျင်တယ် …….ဟားဟားဟား…….”
“ ကိုကြီးတိမ်တိုက် …သူ့ကို ဘာလုပ်မလို့လဲဟင် ….”
“ ချစ်စုကို လိမ်ညာပြီး ချေမွခဲ့တဲ့ အတွက် ဒဏ်ခတ် မလို့လေ …ဒီကောင်က မိန်းကလေးတွေကို ဟန်ဆောင်ချစ်ပြီး အသွေး အသားတွေကို ၀ါးမြိုနေခဲ့တာ ကြာပြီလို့ သိရတယ် ….”
“ ကိုကြီးရယ်..ချစ်စု ဘဝပျက်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ကိုတော့ ပြန်မနှိပ်စက်စေချင်ပါဘူး ….ချစ်စု မကြည့်ရက်ပါဘူး ….ချစ်စု ဘဝနဲ့ ချစ်စု ရှိပါစေတော့ ….”
“ ချစ်စုက သိပ် အသဲနုတာကိုး …ကဲ လာ..ဒီဖက်အခန်းမှာ ကြည့်လိုက်အုံး…….”
ချစ်စုကို တဖက်အခန်းထဲကိုလဲ ချောင်းကြည့်ခိုင်းသည် …။
“ ဟင် ….”
နန္ဒ..ဆန္ဒ နဲ့ ကက်နက်တို့ကို ဖရန်ကီလိုဘဲ ကြိုးတန်းလန်း နဲ့ ချည်နှောင်ထားတာ တွေ့လိုက်ရသည် …။
“ တွေ့ပြီလား …ဒါကြောင့် ငါပြောနေတာ…ငါ ဆိုတဲ့ ကောင် နဲ့ ချစ်စု တိုးလိုက်တာ ဒီကောင်တွေ အတွက် ကံဆိုး မိုးမှောင် ကျတာဘဲ…..ဟားဟားဟား…….”
ချစ်စု သည် တိမ်တိုက် ကို အတန်အတန် တောင်းပန် သည် ..။ သူတို့ကို ပြန်လွှတ်လိုက်ဖို့ …။ တိမ်တိုက်က လက်မခံဘူး ..။ ချစ်စုကို အပြင်ကနေ ကြည့်နေဖို့ ပြောပြီး ဆန္ဒ..နန္ဒ နဲ့ ကက်နက်တို့ ရှိနေတဲ့ အခန်းထဲကို ဝင်သွားသည် …။
“ ဟေ့ကောင်တွေ..ဘယ်လိုလဲ…မင်းတို့ က အားနွဲ့တဲ့ မိန်းကလေးကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး မုဒိန်းကျင့်ကြတဲ့ လူစွမ်းကောင်း ကြီးတွေလား…ဟားဟား……ငါက မင်းတို့ကို တူသောအကျိုး ပေးမလို့ က.ွ ..ဟားဟား……..”
“ အကိုရယ်….ကျနော်တို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးပါဗျာ…..ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ မတိုင်ပါဘူး..အကိုလိုတဲ့ ငွေလဲ ကြိုက်သလောက် ပေးပါမယ် ….ကျနော်တို့ တောင်းပန်ပါတယ် ….” နန္ဒတို့က ငိုယိုတောင်းပန်သည် …။ “ မရဘူး….မရတော့ဘူး…ငါ ဆိုတဲ့ ကောင်က ဘူးဆိုရင် ဖရုံမသီးဘူး ……ဆုံးဖြတ်ထားပြီးရင် ပြင်ဖို့ ခက်တယ် ….. မင်းတို့ကို ဘယ်လို ဒဏ်ခတ်မလဲသိလား….ဟားဟား……ငါ့ မှာ ထောင်ဖေါက်ပြေးလာတဲ့ ရာဂျာ ဆိုတဲ့ ဘော်ဒါ တကောင် ရှိတယ် …သူက ထောင်ထဲမှာ မင်းတို့လို ဖြူဖြူ ပိန်ပိန်ပါးပါး ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ကောင်လေးတွေကို ယောက်ျားချင်း မုဒိန်းကျင့်နေကျ ….သူ့ကို မင်းတို့ကို မုဒိန်းကျင့်ခိုင်းမလို့…ဟားဟားဟား………”
တိမ်တိုက် ပြောစကားကြောင့် ဆန္ဒတို့ သုံးယောက် မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ် …ထိတ်လန့်ကုန်ပြီ …။ အပြင်က နားထောင် ချောင်းနေတဲ့ ချစ်စုလဲ တအား ကြောက်လန့်သွားသည် ..။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေ တော့ ဖြစ်ကုန်တော့မည် ….။
“ မလုပ်ပါနဲ့ အကိုရယ်..ကျနော်တို့ အကို ကျေနပ်လောက်တဲ့ ငွေပေးပါမယ် ….ခွင့်လွှတ်ပါ …”
“ တိတ်စမ်း..မင်းတို့ ညီမတွေ…အမတွေ..အမေတွေကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး ငွေနဲ့ ပြန်လျော်မယ် ဆိုရင် မင်းတို့
ကျေနပ်မလား….ခွေးသူတောင်းစားတွေ …ထွီ ……..”
တိမ်တိုက် သည် နန္ဒ…ဆန္ဒ နဲ့ကက်နက်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ တွေကို လက်ဝှေ့ထိုးတဲ့ သဲအိတ်တွေလို ဘဲ တဖုန်းဖုန်းနဲ့ ထိုး သည် …။ အပြင်က ချောင်းကြည့်နေတဲ့ ချစ်စု မကြည့်ရဲတော့ ..။ တတ်နိုင်ရင် တိမ်တိုက်ကို
ပြေးဆွဲ ပြေး တားလိုက်ချင်သည် ..။ ဆန္ဒက မခံနိုင်တော့လို့ အော်ဟစ်သည် ..။
“ တော်ပါတော့…..တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ……”
“ အေး…ငါမေးတာ အမှန်အတိုင်းဖြေ …..”
“ မေးပါ…ဘာမေးမှာလဲ …..”
“ မင်းတို့ တကယ်ဘဲ ချစ်စုကို ဗီဒီယို ရိုက်ခဲ့တာလား ….”
“ မရိုက်ပါဘူးဗျာ….သူ့ကို ညာပြီး ခြိမ်းခြောက်တာ..တကယ် မရိုက်ခဲ့ပါဘူး …”
“ သေချာလား ..ခွေးမသား….မှန်မှန်ပြော ….”
တိမ်တိုက်က ဆန္ဒကို တဖုန်းဖုန်း နဲ့ ကန်ထည့်ပြန်သည် ။
ဆန္ဒရဲ့ ပေါင်ကြားကို ကန်မိလို့ ဆန္ဒ စကားမပြောနိုင်တော့ဘဲ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်နေသည် ။ နန္ဒက..“ သေချာပါတယ်.. ကျနော်တို့ သူ့ကို ညာပြောခဲ့တာပါ..ကျနော်တို့ ဖုန်းတွေကိုလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ် …” လို့
“ အင်း ….မင်းတို့ ဖုန်းတွေကို ငါ စစ်ကြည့်မယ် ….ငါ့ကို ညာတယ် ဆိုရင်တော့ မင်းတို့ ကို မဲဆောက် ပို့ပြီး ဘဝပြောင်းပစ်မယ် …”
တိမ်တိုက် စကားကြောင့် နန္ဒတို့ တော်တော့်ကို ကြောက်လန့်နေကြသည် …။ တိမ်တိုက် နန္ဒတို့ သုံးယောက် ရှိနေတဲ့ အခန်းက ထွက်ပြီး ဖရန်ကီ ရှိနေတဲ့ အခန်းကို ဝင်ဖို့ ပြင်သည် …။ ချစ်စု တိမ်တိုက်ဆီကို ပြေးပြီး..“ ကိုကြီး…တော်ပါတော့ရှင်..ချစ်စု ဒီလို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေ မမြင်ပါရစေနဲ့တော့…” လို့ တားဆီးမိသည် ..။
တိမ်တိုက်က ..“ ဒီမှာ ချစ်စု ..မင်းအတွက် နာ လို့ လုပ်နေတာ…သိလား …ငါက လက်စားချေရတာ ၀ါသနာ ပါလွန်းလို့ လုပ်နေတယ် လို့ မထင်နဲ့ ….ငါက မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်နေတယ် ဆိုပေမယ့် ဒီလို ပိုက်ဆံမရတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး …ငါက ဘိန်းရောင်းတယ် ..ဆေးပြားရောင်းတယ် …ခိုးထုတ်ခိုးသွင်းတွေ လုပ်တယ် …မင်းအတွက် နာလို့…ဒါတွေ လျောက်လုပ်နေတာ…ချစ်စု …..” လို့ ပြန်ပြောသည် ။
ချစ်စုလဲ ရှိုက်ရှိုက်ငိုနေသည် …။
“ ကဲ..ဖရန်ကီကို ဝင် စစ်လိုက်အုံးမယ် ….”
တိမ်တိုက် အခန်းထဲကို ဝင်လိုက်သည် …။
“ ဟေ့ကောင် ….ဒီမှာ ကြည့်စမ်း ….”
ဖရန်ကီ လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ တိမ်တိုက်က ဖရန်ကီရဲ့ မျက်နှာကို တံတွေးနဲ့ လှမ်းထွေးလိုက်သည် ။
“ မင်းတို့ကို သောက်ဂရုမစိုက်လို့ကို ငါ့မျက်နှာကြီး ပြောင်ပြပြီး ထားထားတာ….မင်း ကို ငါ မေးစရာတွေ ရှိလို့ …”
“ ဘာမေးမလို့လဲ ..မေးလေ..ကျုပ် ဖြေမယ် …ပြီးရင် ကျုပ်ကို ပြန်လွှတ်..ခင်ဗျား ဘာလိုချင်လဲ..ပြော…အကုန် ရ ရစေမယ် ….”
“ လာပြန်ပြီ…..မင်းတို့က တော်တော် ငွေစကား ပြောတာဘ.ဲ ..ဟားဟား………”
တိမ်တိုက် သည် ဖရန်ကီ ကို တအား ထိုးကြိတ် ကန်ကျောက်သည် …။
“ တော်…တော်ပါတော့ …ကျုပ် တောင်းပန်တယ် …ကျုပ် ကို ဘာမေးချင်လ.ဲ …မေး…….”
“ မင်း……ချစ်စု ကို ဘာကြောင့် ပစ်ထားခဲ့လဲ…”
“ ဟာ…ခင်ဗျား က ဘယ်လို သိနေလဲ…..ချစ်စု နဲ့ ခင်ဗျား ဘာပတ်သက်လဲ …..”
“ ခွေးမသား..မင်းက ဖြေရမယ့်ကောင်..ငါ့ လက်ခုပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ကောင် …ငါ့များ ပြန် မေးခွန်းထုတ်နေတယ်
တဖုန်းဖုန်း နဲ့ ထိုးကြိတ် ပြန်သည် ….။
“ ငါမေးတာဘဲ ဖြေ..ငါ့ ပြန်မမေးနဲ့ ….မင်း ဘာကြောင့် ချစ်စု ကို ထားခဲ့တာလ.ဲ ..”
အပြင်က အပေါက်လေးက ချောင်းကြည့်နေတဲ့ ချစ်စု သည် အခန်းထဲက သွေးအလိမ်းလိမ်း နဲ့ ဖရန်ကီ ဘာများ ဖြေမလဲ စောင့်ကြည့် နားထောင်နေသည် ..။ ဖရန်ကီသည် ပါးစပ်ထဲက သွေးတွေကို ပျစ်ခနဲ ထွေးထုတ် လိုက်ပြီး..“ သူ့ကို အစထဲက ကျုပ် အပျော် လုပ်တာဘဲဗျာ….မထားခဲ့လို့ ဘာလုပ်ရမှာလ.ဲ ….” လို့ ဖြေသည် …။ ချစ်စုသည် ကြားလိုက်ရတာ ကို မယုံနိုင်အောင်ပါဘဲ ..။
သူသိပ်ချစ်တဲ့ သူ့ကို သိပ်ချစ်တယ် လို့ သိထား ယုံထားခဲ့လို့ ကိုယ်ကို ပုံအပ်ပြီး လိုရာသုံးစေ လို့ ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ ချစ်သူရဲ့ နုတ်ဖျားက ဒီလို စကားမျိုး ကြားလိုက်ရလို့ အလွန် နာကျည်းသွားရသည် …။ တိမ်တိုက်က
တော့ လက်သီးကို ကျစ်ကျစ် ဆုပ်ပြီး….“ ဒါဆို မင်းက ညာပြီး ချစ်တာပေါ့ ….” လို့ မေးသည် …။
ဖရန်ကီက ..“ ဟေ့..ခင်ဗျားက ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်က လို ..အချစ်စစ် အချစ်မှန် နဲ့ တယောက်ဆို တယောက် ချစ်တတ်တဲ့ ဒိတ်အောက်နေတဲ့ ဘူဒါးကြီး လား ….ကျုပ်တို့က တွဲမယ်..ဖြုတ်မယ် ..ဒါဘဲ ..ဘယ်သူက အတည် ယူမှာလဲ..ချစ်စုလို မုန့်ဟင်းခါးသည် သမီးကို ….” လို့ မဲ့ရွဲ့ပြီး ပြောလိုက်သည် …။
“ အို…ပြောရက်လိုက်တာ ….”
ချစ်စု အရမ်း စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရသည် …။ နံရံကို နဖူးအပ်ပြီး ငိုနေရသည် ..။ ဒူးတွေမခိုင်တော့ …။ တိမ်တိုက် က စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဖရန်ကီ ကို ပိတ်ကန်သည် ..။ ဖရန်ကီ က “ ခင်ဗျား..ကျုပ်ကို ရေလည် နှိပ်စက်တယ် ..ကျုပ် ပြန် လွတ်လို့ကတော့ ခင်ဗျား ကို အရေဆုတ်ပစ်မယ်..ကျုပ် အဖေ ဘယ်သူ ဆိုတာ သိရဲ့လား ….” လို့ ဒေါသ တကြီး အော်ဟစ်သည် ။
“ ကြိုက်သွားပြီ..မင်းက အောက်ကလဲ နေသေး..ငါလီးလဲ မလျော့ဘူး ဆိုတဲ့ အကောင်မျိုးပါလား ….ဟားဟား…. မင်းကို ရိုးရိုး ဘယ်ပြန်လွှတ်ပေးမလဲ …လီးကြီးကြီး နဲ့ ဘဲတွေကို ၀ိုင်း ဖွင့်ခိုင်းပြီး မဲဆောက်မှာ ဖြတ်ဖေါက်ချုပ် လုပ်ပေးပြီး မှ ပြန်လွှတ်မှာ…ခွေးသား ဝက်မြေး ရဲ့ …..”
“ ဘာ….ခင်ဗျား..လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ရမလား..မင်းမဲ့တိုင်းပြည်မှ မဟုတ်တာ …..ခုလောက်ဆို ကျုပ်အဖေတို့ ပိုက်စိပ် တိုက် လိုက်ရှာနေလောက်ပြီ ……”
“ဟေ …..ဟုတ်လား…အယ်…တဒတ်ဒတ် နဲ့..ဟတ်စကီး အသံတေလွား …..ဟားဟားဟား……. ရှာနေကြပြီ…
.ကြွက်တွင်းတွေထဲ……ဟားဟားဟား……..”
တိမ်တိုက်က ပြောင်ချော်ချော်တွေ လုပ်နေပြီးမှ ချက်ချင်းဘဲ မျက်နှာ ပြန်တည်သွားသည် …။ ဘောင်းဘီထဲက လမ်းလျောက် စကားပြောစက်လေး ကို ထုတ်ယူသည် ..။
“ သူရဲ…..သူရ.ဲ …..” လို့ ခေါ်ပြောလိုက်သည် …။
သူရဲ ပြန်ထူးသည် …။
“ ဆရာ..သူရဲပါ…ဘာလိုလဲ …”
“ ဖမ်းထားတဲ့ ၂ယောက် ခေါ်လာခဲ့ …”
“ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ…..”
တိမ်တိုက် က ဖရန်ကီ့ ကို ပိတ်ပိတ် ကန်ထည့်နေသည် …။
တံခါး ကျွီကနဲ ပွင့်လာသည် …။
ကြိုးတုပ်ထားတဲ့ ဝတ်လစ်စလစ် မိန်းမ နှစ်ယောက် ကို အတင်းဆွဲခေါ်လာနေသည် …။
ဖရန်ကီ အထိတ်တလန့် အော်ဟစ်လိုက်သည် …။ “ဟာ ….”
ဖရန်ကီ မကြည့်ရဲ ..။ မျက်လုံးတွေကို လွှဲဖယ်လိုက်သည် ..။ မျက်နှာကို တဖက်ကို လှည့်ထားလိုက်သည် …။
“ မာမီ…မာမီ…..ဇလပ်ဖြူ …….”
သူ့အမေ နဲ့ သူ့ရီးစား တို့ ကိုယ်တုံးလုံးတွေ ဖြစ်နေသည် ….။ တိမ်တိုက်အားပါးတရ အော်ရယ်လိုက်သည် …။
“ ဖရန်ကီ ..မင်း လေသံကို နဲနဲ လျော့လိုက်ကွာ……တိမ်တိုက်တို့က မပိုင်ရင် ခြင်တောင် မရိုက်ဘူးကွ ….. မင်းလို
ကောင် .. လေမာမယ်မှန်းသိလို့ ..မင်း မာမီ နဲ့ မင်းစော်ကို ဖမ်းဆွဲလာခဲ့တာ…”
ဖရန်ကီသည် ခေါင်းငိုက်ဆိုက်ကျကာ ခေါင်းကို တဖက်ကို လှည့်ထားရင်း ဘာမှ မပြောနိုင်တော့ …။ တိမ်တိုက်က ဖရန်ကီရဲ့ အမေ ဒေါ်ဝင်နီ ဖက်ကို လျောက်သွားလိုက်သည် …။
“ ဒီမယ် …ခရိုနီ ကတော်ကြီး …နင် သမီးချင်း မစာမနာဘဲ တော်တော် မိုက်ရိုင်းတဲ့ စကားတွေ ပြောခဲ့တယ် …. နင်တို့ က ချစ်စုသဲသဲ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး က ဆင်းရဲတဲ့ ကောင်မလေး ဆိုပြီး အနိုင်ကျင့် ချင်ကြတယ် ….အခု ငါ့လို လူမိုက် က ဒီအထဲ ဝင်ပါလာတော့ နင်တို့ နာပြီ….ဟားဟား…..တိမ်တိုက်တို့က သေမထူးနေမထူး …..ငါနဲ့ ပြိုင်မိုက်ရင် မင်းတို့ဘဲ နာမယ် ….. ဟားဟားဟား…”
“ ကျုပ်အမေ ကို ဘာလို့ ဆွဲထည့်တာလဗျဲာ…..မကောင်းပါဘူး ….”
“ ဟိုးရှေးရှေး ဟာမူရာဘီခေတ်က ကိုဓ ဥပဒေလို An eye for an eye မျက်လုံးတလုံး ဆုံးရှုံးရင် မျက်လုံးတလုံး ပြန်ပေးဆပ်ရမယ် ..ဆိုတဲ့သဘောတရား ကို ငါကြိုက်တယ် ….ခုခေတ် ဥပဒေတွေက မတရားဘူး …..မုဒိန်းကျင့်တဲ့ ကောင်ကို ထောင်ဒဏ်နဲနဲ နဲ့ အပြစ်ပေးတာ.မတရားဘူးကွ …တကယ်ဆို မုဒိန်းကျင့်တဲ့ကောင်ကို ခံရတဲ့ လူ ဘယ်လို ခံစားရတယ် ဆိုတာ သိစေဖို့ ကိုယ်ချင်းစာ စေဖို့ မုဒိန်းပြန်ကျင့်သင့်တယ်ကွ …..”
တိမ်တိုက် က ဖရန်ကီ ကို ပြောနေရင်း ..သူရဲ ဆိုတဲ့ သူ့တပည့်ကို ရာဂျာ ဆိုတဲ့ကောင်ကိုခေါ်လာခဲ့ဖို့ ပြောလိုက်သည် ..။ ဖရန်ကီသည် သူ့အမေ ဒေါ်ဝင်နီ နဲ့ ရီးစား ဇလပ်ဖြူတို့ အဖြစ်ကို လုံးဝ မကြည့်ရဲ..။ ဒေါ်ဝင်နီ နဲ့ ဇလပ်ဖြူတို့ သည် လက်ပြန်ကြိုး အတုပ်ခံနေကြရပြီး အဝတ်အစားမပါ ကိုယ်တုံးလုံးတွေ နဲ့ ခေါင်းတွေ ငုံ့ကာ ရှက်ကြောက်နေကြသည် ။
“ ခရိုနီ ကတော်ကြီးက ဖင်တော်တော် လှတာဘဲ…ဟီး …..”
တိမ်တိုက်ကတော့ ဒေါ်ဝင်နီ နဲ့ ဇလပ်ဖြူတို့ရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်စိုင်တွေ နဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကြားက ခုံးမို့ နေတဲ့ မိန်းမကိုယ်တွေကို တပ်မက်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်နေသည် ။ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက သူ့ဟန်းဖုန်းကို
ထုတ်ယူပြီး ဗီဒီယို ရိုက်သည် ..။ ရှေ့ဖက်က ရိုက်ရုံမက အနောက်ဖက်က ပါ ရိုက်သည် ..။ သူရဲ နဲ့အတူ ရာဂျာ ဆိုတဲ့ အသားမဲမဲ ဗလကောင်းကောင်း လူတယောက် ပါလာသည် ..။
“ ရာဂျာရေ..မင်း အဝတ်တွေကို ချွတ်လိုက်ပါကွာ..ဖရန်ကီ့ကို ပြဖို့ …” လို့ တိမ်တိုက်က ပြောလိုက်လို့ ရာဂျာလဲ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေ ကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။
“ ဖရန်ကီ…ကြည့်စမ်း ..ရာဂျာရဲ့ လတန်ကို ….”
တိမ်တိုက်က ပြုံးရယ်လျက် ပြောပေမယ့် ဖရန်ကီ က ရာဂျာဖက်ကို မကြည့် ..။ ခေါင်းကို တဖက်ကိုဘဲ လှည့် ထားသည် ..။
“ ဟေ့ကောင်..ငါပြောနေတယ်လေ …မင်း မကြည့်ဘူးလား ….”
တိမ်တိုက်လဲ ဖရန်ကီမကြည့်လို့ သူရဲကို ဖရန်ကီ့ခေါင်းကို အတင်း ဆွဲလှည့်ခိုင်းလိုက်သည် ..။ သူရဲလဲ ဖရန်ကီ့ပါးကို သုံးလေးချက်လောက် ရိုက်လိုက်ပြီး ဆံပင်ကနေ ဆွဲလို့ ခေါင်းကို ဆွဲလှည့်လိုက်သည် …။ တုတ်ခိုင်ကြီးမားတဲ့ ရာဂျာရဲ့ လိင်တန်ကြီးက မတ်မတ်ထောင်နေသည် …။
“ ကဲ.ဖရန်ကီ..မင်းကို လမ်း ၂လမ်း ရွေးခိုင်းမယ် ….( ၁ ) က မင်းအမေနဲ့ မင်းရီးစားကို ရာဂျာ့ကို ကျင့်ခိုင်းမယ် ….. ဒါကို မင်း မရွေးချင်ရင် ( ၂ ) က မင်း ဖင်ကို ရာဂျာက ဖွင့်မယ် …ကြိုက်ရာ တလမ်း ကို ရွေးနိုင်တယ် …အားလုံးကို ဗီဒီယို ရိုက်ထားမယ် …မင်းတို့က ရဲတိုင်လို့ ရှိရင် ဒီဗီဒီယိုတွေကို အွန်လိုင်းမှာ ဖြန့်ပေးလိုက်မယ် ….ကဲ ကြိုက်ရာ ရွေးပေတော့ …”
တိမ်တိုက် အမိန့်နဲ့ သူရဲက ဖရန်ကီ့အမေ ဒေါ်ဝင်နီ နဲ့ ဇလပ်ဖြူ ဆိုတဲ့ အသားဖြူဆွပ်ဆွပ် ကောင်မလေး ကို ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည် …။ အပြင်က ချောင်းကြည့်..နားထောင်နေတဲ့ ချစ်စု ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ဆက် မကြည့်ရဲအောင် ဖြစ်နေရသည် ..။ တိမ်တိုက်ကို သူ့အခက်အခဲတွေ..သူ ခံရတာတွေ ပြောလိုက်မိတာတောင် မှားသွားပြီ လို့ တွေးမိလိုက်သည် …။ ဖရန်ကီမှာ ဆုတ်လဲ စူး စားလဲ ရူး..ဘယ်လမ်းလိုက်ရမှန်း မသိတော့ …။ အမေ နဲ့ ရီးစားကိုလည်း မကျင့်မခံစေချင်ဘူး …။ သူ့ဖင်ကို လုပ်မှာလဲ မခံချင်ဘူး ….။
“ ကဲ ကြာတယ် ဖရန်ကီ …တခုခု ရွေးတော့..ရာဂျာလဲ စောင့်နေရတယ် ….”
သူရဲက ဖရန်ကီရဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုလဲ တခုမကျန် ချွတ်ပစ်နေသည် …။ တိမ်တိုက် ခါးကြားက သေနတ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည် …။
“ ကဲ…မြန်မြန်ရွေး…စိတ်မရှည်တော့ဘူး ..တယောက်ယောက်တော့ နာတော့မယ် ….”
ချစ်စု တိမ်တိုက် ကို တားဆီးချင်နေသည် …။ တော်လောက်ဖို့ ကောင်းပြီ …။ ဒီထက် လွန်တာတွေ
ဖြစ်ကုန်ရင် မကောင်းတော့ဘူး …။ ချစ်စု နံရံကို ထုရိုက်ပြီး….“ တော်ပါတော့..ရပ်တော့…မလုပ်ပါနဲ့တော့…” လို့ အော်ဟစ်သည် …။
တမ်ိတိုက် က ချစ်စု ပြောနေ တာကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်ဘူး …။ ဖရန်ကီရဲ့ အမေ ဒေါ်ဝင်နီ နဲ့ ဇလပ်ဖြူတို့ ထိုင်နေ တဲ့ နေရာကို လျောက်သွားသည် …။
“ ဖရန်ကီ မင်း ဆုံးဖြတ်ရ ခက်နေလား …အဲ..ဒါဆိုလဲ မင်း မာမီ ကိုဘဲ ပထမဆုံး စ ကိုင်ရတာပေါ့..ရာဂျာရေ .. ဒီဆော်ကြီး ကို စိတ်ကြိုက် ဖြုတ်စမ်းကွာ..နောက်ပေါက်ပါ ဖွင့်ပစ် …”
တိမ်တိုက် စကားကြောင့် ဒေါ်ဝင်နီ အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်သွားသည် ..။ ကတုန်ကယင် နဲ့..“ မောင်တိမ်တိုက်ရယ်…အန်တီ မင်းကို ရှိခိုး တောင်းပန်ပါတယ်..ဟို ကလေးမကိုလဲ ကျေနပ်တဲ့အထိတောင်းပန် ပါ့မယ် ..မင်းတို့ ကြိုက်တာ တောင်း…ပေးမယ်… အန်တီ့ကိုတော့ ချမ်းသာပေးပါကွယ်..အန်တီတို့ မှားပါတယ် …
ဒီအတွက် တခြား အပြစ်ဒဏ်ဘဲ ပေးပါ….”
လို့ တတွတ်တွတ် နဲ့ တောင်းပန်သည် …။ ရာဂျာကတော့ တိမ်တိုက် အမိန့်အရ ဒေါ်ဝင်နီ့ကို လုပ်ဖို့ ဒေါ်ဝင်နီဆီကို ရောက်လာနေပြီ …။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ ဒေါ်ဝင်နီ ရဲ့ အရှေ့တဲ့တဲ့မှာ ရပ်လိုက်သည် ..။ သူ့လိင်ချောင်း မဲမဲကြီးက ဒေါ်ဝင်နီ့ မျက်နှာနဲ့ တထွာတောင် မကွာ …။ သပြေသီးရောင် လထစ်ကြီးက သူ့မျက်နှာနား နီးကပ် လွန်းနေလို့ ဒေါ်ဝင်နီ မျက်နှာကို တဖက်ကို လှည့်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည် …။
ရာဂျာက..“ ဟိတ်..ဘာလ.ဲ ..မျက်နှာကို တည့်တည့်ထား….ပါးစပ် ဟ …” လို့ အော်ငေါက်လိုက်သည် …။
ဖရန်ကီလဲ..“ ကျုပ် အမေကို မလုပ်ကြနဲ့….” လို့ အော်သည် …။
တိမ်တိုက် က တဟားဟား အော်ရယ်နေသည် …။ ချစ်စုသည် နံရံ ကို တဘုန်းဘုန်း ထရိုက်ပြီး ..မလုပ်ဖို့ အော်ဟစ် တောင်းပန်နေသည် ….။ တိမ်တိုက်သည် သူရဲဘီလူး စီးနေတဲ့ လူတယောက်လိုဘဲ ချစ်စု ဘာပြေပြော နားမထောင်ဘဲ ဖရန်ကီ နဲ့ သူ့အမေ ကို လက်စားချေဖို့ဘဲ စိတ်ရောက်နေသည် …။
“ က.ဲ ..ဒေါ်ဝင်နီ ..လေးဖက်ထောက်စမ်း ….”
တိမ်တိုက် အမိန့်ကို ဒေါ်ဝင်နီ နားမထောင် ..။ လူလည်ခေါင် ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေရလို့ သေချင်စော် နံရအောင် ဘဲ ရှက်ကြောက် နေရတဲ့အထဲ ထပ်ပြီး လေးဖက်ကုန်းခိုင်းနေသည် ။
“ ဒေါ်ဝင်နီ…ပြောတာ နားမထောင်ဘူးလား ….လေးဖက်ထောက်ဖို့ ပြောနေတာ …”
ရာဂျာက ပါ ဝင်ဟောက်သည် …။ တိမ်တိုက် က ဒေါ်ဝင်နီကို ရိုက်မယ် လို့ လက်နဲ့ ရွယ်လိုက်တော့ ဒေါ်ဝင်နီလဲ ကြောက်လန့်တကြား လေးဖက်ထောက်လိုက်လေ သည် ..။
“ ဖင်ကြီးတေကွို ထောင်….အဲ..ဟုတ်ပြီ..ဖင်ပူးတောင်း ထောင် …ဟုတ်ပြီ….ဟားဟား…..”
ဒေါ်ဝင်နီ ရဲ့တင်ပါးကားကားဖွေးဖွေးကြီးတွေကို သူ့လက်ဖဝါးကြီးတွေနဲ့ တဖျန်းဖျန်း ရိုက်သည် …။
“ အမလေး…နာတယ် …မရိုက်ပါနဲ့ ….”
“ ဟားဟားဟား….လှလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး ….ဖေါင်းပြူးနေတာဘဲ ……”
တိမ်တိုက်က ဖင်ထောင်ပေးထားလို့ ပြူးထွက်နေတဲ့ ဒေါ်ဝင်နီ ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို ဗီဒီယို ရိုက်နေသည် …။
“ ဖရန်ကီ ….”
“ ဘာ…ဘာလ.ဲ ..”
“ ငါ စိတ်ကူး နဲနဲလေး ပြောင်းသွားတယ် …..မင်း ငါနဲ့ညှိချင်လား ……”
“ ညှိမယ်..ညှိမယ် …..ပြော..ခင်ဗျား ဘာလိုချင်လဲ..ငွေလား….ဘယ်လောက် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေးမယ်..ကျုပ်အမေ နဲ့ ကျုပ်ကို လွှတ် ……..”
“ အေး…..ငါတောင်းတဲ့ ငွေ ပေးနိုင်ရင် မင်းတို့ကို လွှတ်မယ် ….မင်းတို့ ချေမွပစ်လိုက်တဲ့ ချစ်စုရဲ့ ဘဝလေးဟာ
ငွေကြောင့် ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ပေမယ့် သူ့ဘဝရှေ့ရေးအတွက် ဆက် အသက် ရှင်သန်ဖို့ တော့ ငွေလိုတယ် ….ငါ စဉ်းစားမိတာက မင်းကို အခု ပြန်လွှတ်လိုက်မယ် …ငါ ပြောတဲ့ နေရာကို မင်း ငွေတွေ သွားပို့တာနဲ့ ငါ မင်း အမေကို ပြန်လွှတ်ပေးမယ် … ဘယ်လို သဘောရလဲ ….”
“ ရတယ်..ရတယ်….ကျုပ်အမေကို ဘာမှ မလုပ်ကြပါနဲ့တော့ ..ကျုပ် …ခင်ဗျား လိုတာအားလုံး ပေး ပေးမယ်
“ အိုကေ…လေ…လုပ်လိုက် …မင်း ငါ့ကို ရဲနဲ့ ဖမ်းဖို့ တော့ မကြံနဲ့နော..မင်းအမေ ဘဝ သိပ် ဆိုးသွားမယ် ….”
“ စိတ်ချ….အားလုံး..ခင်ဗျား သဘောကျဘဲ …”
“ သူရဲရေ ……”
“ ဗျာ..ဆရာတိမ်တိုက် …..”
“ ဖရန်ကီကို ခေါ်လာတုံးကလိုဘဲ မျက်နှာကို အဝတ်အိတ် နဲ့ စွပ်…ပြန်ခေါ်သွားပြီး အိမ်နဲ့ နီးရာမှာ ပြန်ချ ထားပစ်လိုက် …”
“ ဟုတ် ဆရာ …”
ရာဂျာက မျက်နှာမဲ့ရွဲ့ပြီး …“ ကိုတိမ်တိုက်..ခင်ဗျား..ဘာဖြစ်သွားတာလဲ..ဒီလို လူယုတ်မာကောင် ကို ငွေကြောင့် ပြန်လွှတ် ပေးလိုက်မလို့လား …အနဲဆုံး ဖင်ဝိုင်းချ ပြီးမှ လွှတ်ဖို့ ကောင်းတယ် ….” လို့ ပြောလေရာ တိမ်တိုက်လဲ..“ ဟားဟားဟား…..ရာဂျာရယ်…မင်းက အရေးထဲ ဖင်ချချင်နေသေးလားကွာ…ရတယ်…ရတယ်….မပူနဲ့ ….ချရစေမယ်
…. တဖက်ခန်းမှာ ဆန္ဒ….နန္ဒ နဲ့ ကက်နက် ဆိုတဲ့ ကောင်လေး သုံးယောက် ရှိနေတယ် …အဲဒါ ကို မင်း တာဝန်ယူလိုက် .. .ပီပီပြင်ပြင်လေးပေါ့ကွာ …..” လို့ ပြောသည် ..။
ရာဂျာလဲ လိင်တန်မဲမဲကြီး တရမ်းရမ်း နဲ့ တဖက်ခန်းကို ဝင်သွားသည် …။
ချစ်စု သည် ငိုယိုပြီး….“ ကိုကြီး..ချစ်စု ငွေမလိုဘူး..မယူချင်ဘူး …ချစ်စု ကျေနပ်ပါပြီ..ဒါလောက် နဲ့ဘဲ တော်လိုက် ပါတော့ …” လို့ ပြောဆိုသည် ..။ တိမ်တိုက် က ဖရန်ကီ့ကို ငွေတွေ ဘယ်ကို ပို့ဖို့ ပြောနေသည် …။
“ မင်း လူပါးဝတာ နဲ့ မင်းအမေ ကို လိုးနေတဲ့ ပုံတွေ ရန်ကုန် မြို့လည် လမ်းမကြီးတွေမှာ ပုံကြီးတွေကပ်ပစ် လိုက်မယ် …..ကြားလား …”
ဖရန်ကီ က ခေါင်းညှိမ့်ပြသည် …။
“ သူရဲ ….ကဲ..ဖရန်ကီကို ခေါ်သွားတော့ ….”
“ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ ….”
“အော်..ဒေါ်ဝင်နီ နဲ့ ဒီပိန်တာရိုးမလေး ကို လဲ အခန်းထဲ ပြန်လှောင်ထားလိုက် …အဝတ်တွေ ပြန်ပေးဝတ်လိုက်ကွာ …..”
ရုတ်တရက် စိတ်ပြောင်းသွားတဲ့ တိမ်တကို ကို ချစ်စု နားမလည် …။ ဖရန်ကီတို့ဆီက ငွေတွေ တောင်းတာ ကို ချစ်စု မကြိုက်ပေမယ့် ဆက် မနှိပ်စက်တော့တာကို ကျေနပ်သည် ..။ ဒီအချိန်မှာ တဖက်ခန်းက ငယ်သံပါအောင် အော်လိုက်တဲ့ ဆန္ဒ ရဲ့ အသံကြီးကို ကျယ်ကျယ် လောင်လောင်ကြီး ကြားလိုက်ကြရသည် …။ တိမ်တိုက် က တဟားဟား အော်ရယ်သည် …။
“ အလှည့်ကျရင် မနွဲ့စတမ်း တဲ့ ဆန္ဒ…ရေ..မင်းတို့ တူဖြစ်တုံးက နှံခဲ့တာဘဲ…တဖန်တလဲ ပေဖြစ်လာတော့လ.ဲ …
ချစ်စု လက်ကို ဆွဲပြီး အခန်းထဲက ထွက်သည် …။ အပြန်ခရီးမှာ တိမ်တိုက် ခါးကို ဖက်ပြီး ဆိုင်ကယ်အနောက်မှာ လိုက်ပါ စီးခဲ့ရင်း.. ဖြစ်ခဲ့တာတွေ တွေ့ရတာတွေ အတွက် စိတ်တွေ လှုပ်ရှား ရင်တုန်နေရဆဲ ဘဲ …။
သုံးလခန့် ကြာပြီး ချိန် ….
မြန်မာပြည် နယ်စပ် တဖက်ကမ်း မဲဆောက်မြို့ ဈေးဆိုင်တန်းတွေ မှာ ချစ်စု သဲသဲ လမ်းလျောက်နေသည် …။ တိမ်တိုက် က အလုပ်ကိစ္စ ရှိလို့ ညနေမှ ပြန်ဆုံမည် လို့ ပြောသွားသည် ..။ အခုဘဲ ဒီမြို့က နံမည်အကြီးဆုံး ထမင်းဆိုင်လေးမှာ စားသောက်ပြီးလို့ ချစစ်ုသဲသဲ ဘိုက်တအားတင်းနေသည် …။ မနေ့က အိမ်ကို ချစ်စု ပထမဆုံး ဖုန်းဆက်ဖြစ်သည် …။ မေမေ နဲ့ မမကြီးတို့ နဲ့ စကားပြောသည် …။ သူတို့ ချစ်စု နဲ့ ပြန်စကားပြောရလို့ အရမ်းကို ဘဲ ဝမ်းသာလိုက်ကြတာ ….။
မမကြီးက သူတို့ ကိုသူရိန်ထွန်း အပေါ်မှာ တင်နေတဲ့ အကြွေးတွေကို အရင်းနဲ့ အတိုး အားလုံး
ဆပ်ပေးလိုက်လို့ အရမ်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ….သူတို့ကို တောင်ဒဂုံမှာ တိုက်အသစ်လေး နဲ့ ကားသစ် လေး တစီး
ဝယ်ပေးလို့ လဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ..ချစ်စု နဲ့ ကိုတိမ်တိုက်ကို ဘယ်တော့ ပြန်တွေ့ကြရမှာလဲ ….လို့ ပြောသည် ..။ မေးသည် …။ ချစ်စု လဲ မေမေနဲ့ မမကြီးကို ဘန်ကောက်မြို့မှာ ပြန်ဆုံကြဖို့ လုပ်နေကြောင်း ..ကိုတိမ်တိုက် ရဲ့ တပည့်တွေ လာပြီး နိုင်ငံကူး လက်မှတ် လုပ်ပေးကြလိမ့်မည် ..မကြာခင် ဆုံမည် လို့ပြောလိုက်သည် …။ ချစ်စု ဈေးဆိုင်တွေ တဆိုင်ပြီး တဆိုင် လျောက်ကြည့်ပြီး လိုတာတွေ ဝယ်ချမ်းနေဆဲ ဖုန်းတခု လာလို့ ထူးလိုက်တော့ တိမ်တိုက် ဖြစ်နေသည် …။
“ ချစ်စု …..ဘယ်မှာလဲ…”
“ ဈေးဝယ်နေတယ် …ပြီးပါပြီ …ကိုကြီးကော…အလုပ် ပြီးပြီလား ….”
“ ပြီးပြီ …ပြန်လာပြီ ..ဟိုတယ်မှာ ဆုံမယ် …..”
“ အိုကေ..ကိုကြီး …..ဆီးယူး ……”
ချစ်စု ဒီနေ့ တိမ်တိုက် လိုချင်တဲ့ အဖြေ ကို ပေးမလို့ …။ လှုပ်ရှား ယိမ်းယိုင်နေတဲ့ စိတ်တွေ လဲ အနယ်ထိုင် တည်ငြိမ် လာပြီမို့ တိမ်တိုက် ကို ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ အဖြေစကား ပေးတော့မလို့ ပါ …။ တိမတ်ိုက် နဲ့ ဟိုတယ်ခန်းမှာ ပြန်တွေ့ဆုံဖို့ ခပ်သွက်သွက် လျောက်လှမ်းလိုက်သည် ….။
ချစ်စု ဟိုတယ်အခန်း ကို ပြန်ရောက်တော့ တိမ်တိုက် မရောက်သေးဘူး ..။ ချစ်စု နဲ့ သူနဲ့ ရန်ကုန်ကနေ ဒီ မဲဆောက်ကို ထွက်လာကြပြီး အတူတူ နေနေကြတာ နှစ်လလောက် ရှိပြီ ..။ ဒါပေမယ့် ချစ်စု နဲ့ သူ ဘာမှ လွန်လွန် ကျူးကျူး မဖြစ်ကြသေးဘူး ..။ သူက ချစ်စု က ဖရန်ကီ ဆန္ဒ နဲ့ နန္ဒ..ကက်နက်တို့ နဲ့ ကြုံခဲ့ပြီး အဓမ္မ ကာမကို ရွံရှာ မုန်းတီးနေမှာကို သိသည် ..ဆိုပြီး ချစ်စုကို ချစ်မိတဲ့အကြောင်းဘဲ ပြောပြီး ချစ်စု ပြန်ချစ်နိုင်မလား မေးတာကလွဲပြီး ဘာအခွင့်အရေးမှ မယူခဲ့ဘူး…။
ချစ်စုလဲ မေမေနဲ့ မမကြီးတို့ တင်နေတဲ့ အကြွေးတွေကိုလည်း ပြန်ဆပ်နိုင်ခဲ့ပြီး တိုက်တလုံး နဲ့ ကားတစီး
လဲ ဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဝမ်းသာ ကျေနပ် သည် ..။ ဖရန်ကီ က တိမ်တိုက် တောင်းသ လောက် ငွေတွေ လာပို့တော့ တိမ်တိုက်လဲ သူ့အမေ ဒေါ်ဝင်နီ နဲ့ သူ့ကောင်မ ဇလပ်ဖြူ တို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက် ခဲ့သည် ။
ဖရန်ကီနဲ့ သူ့အဖေ က ရဲနဲ့ ရန်ရှာမှာမို့ ဒေါ်ဝင်နီ နဲ့ ဇလပ်ဖြူ တို့ရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ် ဗီဒီယိုတွေ ဓါတ်ပုံတွေ ကိုတော့ တိမ်တိုက် က ကိုင်ထားသည် ..။ အခုအထိတော့ ဖရန်ကီ နဲ့ သူ့အဖေ တို့ဖက်က ဘာမှ ရန်ရှာတာ မရှိပါဘူး ..။ ဒါပေမယ့် တိမ်တိုက် လဲ စားကျက်ပြောင်းမယ်…ဆိုပြီး အရင်ဆုံး မြဝတီ ကို ရွှေ့ခဲ့ကြသည် ..။ နောက်ပိုင်း မဲဆောက်မှာ လာ အလုပ်လုပ်နေသည် ..။
ချစ်စုကို သူက အရမ်း ဂရုစိုက်တာကြောင့် ချစ်စုလဲ သူ့အပေါ် သံယောဇဉ် ရှိလာသည် ..။ သူ့အချစ်ကို
လက်ခံပြီး သူနဲ့ အတူတူ နေတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတလ်ိုက်မိသည် ..။ သူပြန်မလာခင် ချစ်စု ရေချိုးလိုက်သည် ..။ တနေကုန် အပြင် လျောက်သွားထားတာကြောင့် ချွေးတွေ ထွက် နံစော် နေမှာကို မလိုလားဘူး …။ ရေချိုးပြီး ထမိန်ရင်လျားနဲ့ ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန် တိမ်တိုက် ပြန်ရောက်လာသည် …။
“ ချစ်စု …ဆာလား …ကိုကြီး စားစရာတွေဝယ်လာတယ် …”
“ ကိုကြီးရယ်….ချစ်စုကို အစားတွေ တအား ကျွေးမနေနဲ့…တော်ကြာချစ်စု ဝလာပြီး ဖက်တီးပုတ်ကြီး ဖြစ်လာရင် ကိုကြီးဘဲ မကြိုက်တော့ဘူး ဖြစ်နေမှာ …..”
“ ဟားဟားဟား…ချစ်စုရယ် …ကိုကြီးက ချစ်စုကို ပိန်ပိန်..၀၀ အမြဲ ချစ်နေမှာ….လာစမ်း ….မေးစရာ ရှိလို့ …”
သူ ချစ်စုကို ဖက်လိုက်သည် ..။
“ ဘာမေးမလို့လဲ …”
သူ့ခါးကြားမှာ ထိုးညှပ်ထားတဲ့ သူ့သေနတ်ကြီးက ချစ်စု နဲ့ သူနဲ့ ကြားမှာ ခိုးလိုးခုလု ခံနေသည် ..။
“ ကိုကြီး..သေနတ်ကြီး ဖယ်လိုက်ပါလားကွာ….”
“ ဟားဟားဟား….ဟုတ်တယ်..ဆောရီး …ချစ်စု…”
တိမ်တိုကက် သူ့သေနတ်ကို အနားက စားပွဲလေးပေါ်ကို တင်လိုက်သည် ..။
“ ကိုကြီး မေးလေ …ဘာလဲ ….”
“အော်..ချစ်စုကို ကိုကြီး မေးထားတာလေး ပြန်ဖြေတော့လေ …ချစ်လား ဆိုတာ..”
“ ကိုကြီးက မသိသေးဘူးလားဟင် …”
“ သိဘူး ….”
လူဆိုးကြီး လုပ်စားနေတဲ့ တိမ်တိုက်သည် အရမ်းနုပြနေသည် …။
“ ပြော…ချစ်စု ချစ်တယ် လို့ ပြော….”
“ ကိုကြီးကို ချစ်စု ချစ်တယ်..သိလား …ချစ်စု ကို တသက်လုံး ကြင်ကြင်နာနာ နဲ့ ပေါင်းမှာလား ….”
“ အင်း …ပေါင်းမှာပေါ့…အခုက စပြီး …..”
တိမ်တိုက်က ချစ်စု ကို နမ်းလိုက်သည် ..။ ပါးတွေကို နမ်းသည် ..။ နဖူးကို နမ်းသည် …။ ချစ်စု
နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်နမ်းသည် ..။ ချစ်စုလဲ သူ့ကို တအား ပြန်နမ်းမိသည် …။ တိမ်တိုက် က ..“ ချစ်စု ရယ်…အရမ်း ချစ်တယ်ကွာ …” လို့ အားမလို အားမရ အသံနဲ့ ပြောရင်း ချစ်စုရဲ့ လျော့ရည်းရည်း ဖြစ်နေတဲ့ ထမိန်ကို ဆွဲဖြည်လိုက်သည် ..။
“ အို..ကိုကြီး ….”
ချစ်စုက ဟန်ဆောင် ဆွဲလိုက်ပေမယ့် ထမိန်က ကွင်းလုံးပုံ ကျွတ်ကျသွားသည် ..။ ချစ်စုရဲ့ ရင်သားစိုင်တွေက ကော့ချွန်တင်းမာနေသလို ရင်သီးလေးတွေကလဲ စိတ်တွေ လာနေလို့ တင်းပြီး မာထောင်နေကြသည် ..။ တိမ်တိုက် က ချစ်စု လည်ပင်းကို နမ်းစုတ်နေရာက ရင်သားတွေကို နမ်းသည် …။
“ အို …ကလဲိုက်ထာ…ဟင့်ဟင့်…..”
တိမ်တိုက်သည် ကလေးလေးတယောက် နို့စို့သလိုဘဲ ချစ်စုရဲ့ ရင်သီးလေးတဖက်ကို တပြွတ်ပြွတ် နဲ့ စို့လိုက်တော့ ချစ်စုလဲတကိုယ်လုံး ဖိန်းဖိန်း ရှိန်းရှိန်း နဲ့ ကြက်သီးတွေ ထသွားရသည် …။ သူ့လက်တဖက်က ချစ်စု ပေါင်ကြားကို စမ်းလိုက်သည် ..။
ချစ်စုက စောစောကဘဲ အမွှေးတွေ ပြောင်နေအောင် ရိပ်ထား တာ ..။ ချစ်စု အင်္ဂါစပ် အကွဲကြောင်းကို
သူ့လက်ချောင်းတွေက ရေရေလည်လည် သမနေသည် ..။ ထိုးမွှေနေသည် ..။ ချစ်စု ကုတင်ပေါ် လဲကျသွားရသည် ..။ သူက ထပ်ချပ်မကွာ ချစ်စု ကိုယ်ပေါ် ခွရက်သားကြီး ပါလာာသည် ..။ ရင်သီးတဖက်ပြီးတော့ နောက်တဖက်ကို စို့ပြန်သည် ..။ အို ..သူ့အတန်ကြီးက တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီး …ချစ်စုပေါင်ကြားကို လာတေ့ထောက် နေသည် ..။
အမလေး ….နဲနဲနောနော ဟာကြီး မဟုတ်ဘူး …
သူ့ပစ္စည်းကြီးကို ပထမဆုံး နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံရတာဘဲ …။ ထိပ်က အထစ်ကြီးကို မြင်တာ နဲ့ တကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားရသည် …။ အိ …..ဒါကြီးနဲ့ ကြုံရတော့မှာ ဆိုတဲ့ အသိ ကချစ်စု ကို ကျောချမ်းသွားစေသည် …။ ကြောက်လဲကြောက် ..လိုလဲ လိုချင် ပေါ့ …။ သူက ချစ်စု အင်္ဂါထဲ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ထိုးဆွကလိတာ သူ့လက်ချောင်း တွေမှာလဲ ချစ်စုရဲ့ အရေတွေ ပေစိုနေပြီ …။
သူ လုပ်တော့မယ် ထင်တာ..မလုပ်သေးဘဲ ချစ်စု ပေါင်တန်နှစ်ဖက် ကို ဆွဲကားလိုက်ပြီး ချစ်စု အင်္ဂါကို
လျာနဲ့ ယက်ပေး သည် ..။ တကယ်ဆို စောစောထဲက ချစ်စု က တအား လိုလားနေမိတာ …။ အခုလို ချစ်စု အစိကို သူ့လျာနဲ့ ကလော်ထိုးပြီး ဆွပေးနေတော့ ချစ်စု မခံနိုင်ဘူး …။ တအားရွ.. တအားထ …တအား ယားနေပြီ ….။
“ ကိုကြီးရယ် …တော်ပါတော့ …..အရမ်း လိုချင်နေပြီ ….” လို့ မရှက်တမ်း ဖွင့်ဟ တောင်းခံမိရတော့တာဘဲ….။
တိမ်တိုက် က သူ့အတန်မာမာကြီးကို ချစ်စု လက်ထဲကို လာထည့်သည် …။ နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး ….
တကယ် ကြီးတယ် …..။ ချစ်စုလဲ ခံချင်လှပြီ ဆိုတော့ သူ့ဟာကြီးကို ချစ်စု အင်္ဂါစပ်အပေါက်မှာ တေ့ပေး မိလိုက်သည် ..။ သူက ချစ်စု ရင်သီးတဖက်ကို ငုံလိုက်ရင်း ဖိသွင်းထည့်သည် …။ သူ့လိင်ချောင်းကြီး စီးစီးကြီး ချစ်စု အထဲထဲ တိုးဝင်လာသည် …။
“ အား…ကိုကြီးရယ် ….”
အင်္ဂါစပ် အခေါင်းထဲ အတန် တုတ်တုတ်ကြီး ဝင်လာတာက တဖျစ်ဖျစ်နဲ့ ….။ ချစ်စု တင်ပါးတွေကို သူ ဆုပ်ကိုင် ညှစ်ပြီး အတန်တဆုံး သွင်းထည့်တာ …။ သူ့တန်ဆာကြီး တခုလုံးဟာ ချစ်စု အင်္ဂါစပ်ထဲ ရောက်နေပြီ …။ သူ့ခါးကို ဆွဲဖက်မိသည် ..။ အို..သူ ဖြေးဖြေးချင်း ထုတ်လိုက် ထည့်လိုက် လုပ်နေပြီ ..။
အချက်တိုင်း ဟာ ချစ်စု ကို ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကောင်းကောင်းသွားစေတော့ ချစ်စုလဲ အောက်ကနေ
မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဖြစ်လာပြီး တင်ပါးတွေကို ဝေ့ဝိုက် လှုပ်ရှား ပေးမိရသည် …။ ချစ်စု တုန့်ပြန်မှုတွေ လုပ်တာ သူ ကြိုက်တဲ့ ပုံဘဲ…။ သူဆောင့် ကိုယ်ပင့် နဲ့ တက်ညီလက်ညီ ဘဲ ..။ အားရပါးရ ဆောင့်ထည့်လာသည် ..။ ချစ်စု ကလည်း အဆောင့်ခံတာကို ဖရန်ကီနဲ့ ကြုံကထဲက အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးသား ဆိုတော့ တိမ်တိုက် ဆောင့်တာတွေကို အောက်ကနေ ပြန် တုံ့ပြန် ကော့ပေး ပင့်ပေး..စကောဝိုင်း မွှေ့ပေးလိုက်သည် …။
တိမ်တိုက် ကြာကြာ မဆောင့်နိုင်ဘဲ သုတ်ရေတွေ အချက်ပေါင်း တော်တော်များများ ပန်ထုတ်ပြီး လိုရာ ပန်းတိုင် ကို ရောက်သွား သည် …။ သူကောင်း ကိုယ်ကောင်း …အချစ်လွန်ပွဲ နံပါတ် ( ၁ ) …ပြီးသွားပြီ ….။တိမ်တိုက် အတန်ကြီးက သုတ်ထွက်ပြီးသွားတာတောင် မာထောင်နေတုံးဘဲ …။ အားကြီးတဲ့ ကိုကြီး တိမ်တိုက်ကို စိတ်တိုင်းကျ ပေးဖို့ ချစ်စု အဆင်သင့်ပါဘဲ…..။